Cinderella Network Myanmar (Episode - 13) - Download Facebook Videos
ကိုယ်ကာတွေအတွက်အာရုံပြည့်ချိုရည်မှ main sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်. .ဇန်နဝါရီလနောက်ရက်မြန်မာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ. ပျိုမေတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖောခွင့်ရမယ်.ကျွန်တောတို့ရဲ့ အပတ်တစ်ဆယ့်သုံးမြောက်တင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ.ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့အစီအစဉ်ကတော့အလှတရားကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ပျိုမေတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုလေးစနစ်ကျကျနဲ့ကိုယ်တိုင်ပုံဖောနိုင်စေဖို့အတွက် စီနီယာဆင်တွဲလောင်းတွေနဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်.စီနီယာစင်ထွန်းသားတွေဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီး beauty blogger နဲ့ professional makeup artist တွေကနေပြီးတော့ အပတ်စဉ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးခြောက်ဦးကိုခေတ်ကာလနဲ့လိုက်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရေပန်းစားတဲ့မိတ်ကပ်လိမ်း ခြယ်မှုတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ. မှာတော့ဘောကာတွေအတွက်အာရုံဖြည့်အချိုရည်ကနေ အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ MNTV ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ MNTV channel Facebook page တွေကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. အေကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်လိုက်ပါလိမ်းချိန်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်း အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်. ဒီနေ့ညမှာ senior center အနေနဲ့သင်ပြပေးသွားမယ့် professional makeup artist give ကိုဖိတ်ခေါလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ. ဒီနေ့ညရဲ့စီနီယာရဲ့ဆင်တွဲလကတော့နာမည်ကျော celebrity တွေရဲ့ လက်စွဲတောမိတ်ကပ် artist တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တောတို့အမြဲတမ်းဆန်းသစ်တဲ့မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှုတွေကို အမြဲတမ်းဖန်တီးနေတဲ့မိတ်ကပ် artist grewye ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. မင်္ဂလာပါ. ဟုတ်.မင်္ဂလာပါအစ်ကို. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့အဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပြန်ပြီ.အဝေးရဲ့မိတ်ကပ် look ကျွန်တောတို့လေအမြဲတမ်းလန်းဆန်းပြီးတော့အမြဲတမ်း create ဖြစ်နေတာပေါ့နော. ဟုတ်. အဲဒီတော့အမြဲတမ်းတွေ့ရပါတယ်.အဲဒီတော့ဒီကနေ့ကရော ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမှုလေးတွေတွေ့တာလဲ. ဟုတ်.ဒီနေ့တော့ဝေးကပေါ့နော.အောလူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတယ်.ပြင်ရတာလည်းလွယ်တယ်. အာ fancy online makeup look လေးတွေပြင်ပြဖို့ပေါ့နော.အဲဒါစီစဉ်ထားပါတယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ဝိတ်အမြဲတမ်းပြင်နေကျတွေထဲကကျွန်တောတို့ဒါလူကြိုက်များတဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ဘယ်လိုမျိုးအဲ မျိုးတွေကျလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ကပ်လွတ်ကလေးကပြင်ဖို့အတွက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်. ဟုတ်.ဝင်းအနေနဲ့ပေါ့နော.ဒီ fancy allange makeup look ကကျတော့ အာ party သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် festival သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သင်္ကြန်ပေါ့နော. အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်း pop up ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ရမယ်လို့နီနီထင်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့လူငယ်ဆန်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲလမ်းအပြင်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေကျလို့ရှိရင်နော.အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်း ကလေးတွေအရမ်းခေတ်စားလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော.ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ TV ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တောတို့နဲ့အတူတူအယ် လိုက်ပါပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တောတို့ဖိတ်ခေါပါတယ်.အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဝင်းနဲ့အတူတူအာ ဟုတ်ကဲ့. အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမလေးကို. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့. ပြီးရင်တော့အားလုံးလည်းလူငယ်လေးတွေနော်. အခုဒီနေ့ပြင်မယ့်ခလုတ်လေးလည်းအားလုံးလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဝေ. ဟုတ်တယ်. ဟုတ်. အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတူတူပြင်ဆင်ကြမယ့်ညီမငယ်လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အဲဒီတော့ ပထမဦးဆုံးကျွန်မငယ်လေးတစ်ဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ. မင်္ဂလာပါရှင်.ညီမစန္ဒာအောင်ပါ.ရန်ကုန်မြို့ပြည့်ဝတဲ့ချောင်ကြိုပါရှင့်.အသက်ကနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပါ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးစန္ဒာပါ.တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.နောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ညီမနာမည်ကတော့စိမ်းသိမ့်ဖြူပါ.အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပါ.တောင်ဥက္ကလာပနော. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးစိမ်းလဲ့မေရေ.တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.ကျွန်တောတို့နောက်ထပ် ညီမလေးတစ်ဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်.ညီမနာမည်ကတော့သဉ္ဇာဦးပါရှင့်. အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ပါ.မရမ်းကုန်းမှာနေပါတယ်ရှင့်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးတင်ဇာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.ကျွန်တောတို့နဲ့အတူတူမိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မယ့်နောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ကျွန်မနာမည်ကပိုးဝင်းမုန်ဖြစ်ပါတယ်.ညီမအသံမစခင်. ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်.ဟုတ်.အားလုံးမင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးမင်္ဂလာပါ.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောနောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ညီမနာမည်ကတော့အေးချမ်းပိုင်ပါ. အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ရှိပါပြီ.ဒဂုံမြို့နယ်ကပါ.ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အစ်ကိုတို့ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်.ညီမလေးတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီကနေ့ညီမငယ်လေးတွေနဲ့အတူတူမိတ်ကပ်ပါဝင်လေ့ကျင့်မယ့် special guest တစ်ဦးကိုလည်းဖိတ်ခေါထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ. သူကတော့ ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့ဒါမြန်မာ idol season two မှာကတည်းကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ အဲကျွန်တောတို့အာအင်းပါသီချင်းတွေကိုပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့တေးသံရှင်ယွန်းဖြစ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ. ဂျိုးရေမင်္ဂလာပါ. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်. တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်နော.ယွန်းရေ.အခုတလောဘာတွေလုပ်နေလဲပြောပါဦး. ပရိသတ်တွေကိုပြောပြပါဦး. ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုဖိုးပြည့်နဲ့ပေါ့နော.သူ့ရဲ့စာအုပ်လေးတစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်. အဲဒီအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ယွန်းရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းကျွန်တော အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်နော.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးရောကြည့်ဖြစ်လား. ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.ရှေ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တောတို့တွေဒါ we နဲ့အတူတူတိုက်ရိုက်ပြင်ရမှာပေါ့နော.ပရိသတ်တွေအများကြီးကလည်းကြည့်နေမှာဆိုတော့အာစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်ထင်တယ် အယ်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်.ညီမမိတ်ကပ်ကိုအဲ့ဒီလို မသင်ဘူးကွာ.အခုဒီနေ့မြေးကလည်း သင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမအရမ်းပျောပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့. ဖိတ်ခေါပေးတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်. ဟုတ်ကဲ့ယွန်းရေနော.ယွန်းအတွက်တော့ဒါပထမဦးဆုံးအယ်တွေ့ရမှာပေါ့နော.ပြင်ရမှာပေါ့.ဆိုတော့ ဝေကရောဘယ်လိုခံစားရလဲ.ဒီနေ့ရုံးပါဝင်ပေးမှာဆိုတော့. အာဒီနေ့ယွန်းပါ.ယွန်းနဲ့ဝေနှင်းကလည်းအရင်ကတည်းကသိတယ်လေ.ဆိုတော့ ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးပိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့. ဒါကျွန်တောတို့ဒါညီမငယ်လေးတွေလည်းဒီနေ့ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပျောစရာကြီးနော. ဟုတ်. အတူတူပြင်ကြမယ်.ယွန်းယွန်းနော. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ဝေ ကျွန်တောတို့ပြင်ဆင်မယ့်မိတ်ကပ် look လေးကလည်းဒါပရိသတ်တွေ ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.ဖိတ်ခေါပါတယ်.ကျွန်တောတို့ပြည်သူတွေအတွက် ဟုတ်ကဲ့ပါ. ဟုတ်ကဲ့. ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါအစ်မ. ကဲအဲဒါဆိုရင်စတင်ချမယ်. ဗီဒီယို ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးစတင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် အာ အာမိတ်ကပ်မလိမ်းခင်မှာအရင်ဆုံး moisturizer လေးလိမ်းပါမယ်. Week ကဒီ က all in one moisturizer လေးလိမ်းမယ်ပေါ့နော်. ကျွန်တောတို့မိတ်ကပ် ပြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် sense အမ်ဒီ တို့ moisturizer တို့ကျွန်တောတို့ skin care step လေးတွေလည်းလိမ်းပေးသင့်တယ်နော. ဟုတ်ဟုတ်.အဲ့ဒါလေးတွေကလိမ်းပေးသင့်တယ်.ဘာလို့ဆိုတော့ moisturizer တို့ဘာတို့ကကျတော့ပေါ့နော.ဝတ်ရည်တို့ရဲ့အသားအရေမှာမညီမညာရှိတာတွေအမ်ပြီးတော့ ဟိုနေလောင်တာတွေဘာတွေပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းပိုပြီးတော့ cover ဖြစ်သွားအောင်လို့ moisturizer လေးသုံးပေးပါမယ်. Moisturizer လေးကိုအသားထဲကိုနည်းနည်းစိမ့်ဝင်အောင်လို့သေချာလေးလိမ်းပေးရမယ်ပေါ့နော. ဒီနေ့ကျွန်တောတို့ဒါ fancy orange makeup look လိမ်းမှာဆိုတော့တချို့ကလိမ္မောရောင်လေးတွေဝတ်ထားကြတယ်နော. အာဟုတ်ပ. အကုန်လုံးအဲ့ဒီတော့မှပိုပြီးတော့နော.အင်္ကျီလေးနဲ့. ဟုတ်တယ်. အမ်းလိုက်ကပ်သွားတာ. လိုက်ဖက်သွားမှာ. ကဲ moisturizer လေးလိမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကိုမိတ်ကပ် base တွေလိမ်းကြမယ်.မိတ်ကပ် base ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော.အာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်လေးတွေ အဲ့ဒီလိုမျိုးအသားအရေမညီတာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးညှိပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးတော့မှ foundation လေးတင်လိုက်တာဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့. ဟုတ်. အာဒီရဲ့ makeup base လေးလိမ်းပါမယ်ရှင့်. ဒါလေးပေါ့နော. ကျွန်တော foundation မလိမ်းခင်မိတ်ကပ် base အရင်လိမ်းတာပေါ့နော. ဟုတ်. ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တောတို့တွေဒါ foundation ကိုတန်းလိမ်းလိုက်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ဖူးတယ်. ဟုတ်. အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုမိတ်ကပ် ကိုခံလိမ်းတာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကွာခြားလဲ. အာမိတ်ကပ် base ခံလိမ်းတာက primer ခံလိမ်းတာကကျတော့လေ.သူကအဓိကကအသားအရေလေးကိုညှိပေးတယ်.ပြီးတော့ကျတော့ဆီတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိန်းပေးတာပေါ့နော. မိတ်ကပ်တန်းလိမ်းတာထက်စာလို့ရှိရင်. ဒီ steps တွေကနည်းနည်းပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်.ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကအသားထဲကိုစိမ့်ဝင်အောင်လို့လိမ်းပေးတာပေါ့နော. Foundation ကောင်းမှကျွန်တောတို့. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒီတော့တစ်နေကုန်ခံတာ.ဟုတ်. အခုနောက်ပိုင်းကလည်းကျွန်တောတို့မိတ်ကပ်ကိုလည်းအဲဒီလို create လုပ်ပြီးတော့လိမ်းလာကြသလို skin care ကိုလည်းအများကြီးဂရုစိုက်လာကြတယ်နော. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. Skin care ကတော့မလုပ်မဖြစ်ပေါ့နော. လုပ်ရမယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ skin skin ကောင်းတဲ့အခါကျတော့မှဝတ်ရည်တို့တွေကအမ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ကပ် look လေးကိုပြင်နိုင်တာပေါ့နော.အဲ့ဒီတော့ skin ကတော့အရေးကြီးတယ်. ရုံးရော skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလား.ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ. မလုပ်ဖြစ်ဘူးလား. ပျင်းတယ်. အများကြီးပဲ. နင်သေချာသင်ပေးရတော့မယ်. ဟုတ်ပ. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရော. ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ. ကျန်တဲ့သူတွေကလုပ်တယ်ထင်တယ်. ကျန်တဲ့သူတွေကလုပ်တာ. လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. လုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့. ရူးမဲတင်းနေတာထင်တယ်. ကဲမိတ်ကပ် ရပြီဆိုလို့ရှိရင် BB cream လေးလိမ်းမယ်.ဒီနေ့ဒီဟာကဒီ BB cream လေးလိမ်းမယ်ပေါ့နော.ပါးပါးလေးပဲလိမ်းကြမယ်. Baby cream ကို ကကျတော့လက်ပေါလေးမှာတင်တယ်.ပြီးလို့ရှိရင်မှမျက်နှာပေါတင်တယ်. Foundation ကိုဝင်းအမြဲတမ်းပြောနေကျအတိုင်းပဲ. ဟိုတစ်စက်ချင်းစီချတာထက်ပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုး မျက်နှာပေါမှာအများကြီးချလိုက်တဲ့ဥစ္စာပိုပြီးတော့ blend လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်. ဆိုရင်မျက်တွင်းအောက်ကနေစပြီးတော့လိမ်းတယ်. ဒီမျက်တွင်းအောက်ကနေစပြီးတော့မှနေရာလေးချလိုက်တယ်.ပြီးလို့ရှိရင်မှ brush လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် sponge လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ blend လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော. ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့နော. ဟုတ်.ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့. ဒီနေ့ကတော့လူငယ်ဆန်ဆန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ BB cream လေးနဲ့ပဲဝတ်ရည်တို့တွေပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့. Baby cream တွေများသွားတာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်ဆမတတ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရော ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲ. ဟုတ်. Baby cream ကများသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဖြူဝဲဘက်သွားတော့လေ နည်းနည်းပြာသွားတတ်တယ်ပေါ့နော.အဲ့ဒီတော့တကယ်လို့မျက်နှာပေါမှာတင်တာများသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတ်ရည်တို့ဒီ sponge လေးနဲ့အာ မသိပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော.ဆွဲဖယ်လိုက်တာ.ဟုတ်.မျက်မျက်နှာပေါကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွဲဖယ်လိုက်တယ်. စယူကတည်းကတော့ကျွန်တောတို့သေချာလေးချိန်ဆပြီးရွေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော. ဟုတ်ဟုတ်. ပိုးလို့ရှိရင်ပြီးတော့လည်ပင်းမှာလိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့.ဟုတ်. လည် လည်ပင်းကလည်းလိမ်းရမှာပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့.လည်ပင်းလည်းဒါတချို့ကတော့တစ်ခါတည်းအသားရောင်မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းနဲ့ညီအောင်တစ်ခါတည်းလိမ်းကြတယ်. ဟုတ်. တချို့ကကျတော့လည်းအဲဒီလိုမျိုးမညီတဲ့သူတွေကျတော့လည်ပင်းက လေးလည်းသတိထားပြီးလိမ်းဖြစ်တာပေါ့. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. လည်ပင်းကတချို့ကကျတော့လေလည်ပင်းကပိုးဖြူနေတယ်. ဟုတ်. မျက်နှာလေးက အဲဒီတော့လည်ပင်းရောမျက်နှာရောတစ်ခါတည်းအရောင်တူအောင်လို့လိမ်းလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော. ကဲအားလုံးမှီကြရဲ့လားရှင်.ဟာလက်တွေနဲ့ပဲချလေ.ကောင်းတယ်.မွေးနိုင်သလိုပဲ. ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဟိုလိမ်းတာနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုကွာတာလဲ. ဟုတ်.လက်နဲ့လိမ်းတာလည်းသူကလက်ရဲ့အနွေးဓာတ်လေးပေါ့နော.လက်ရဲ့ဒီလိုအနွေးဓာတ်လေးကနေပြီးတော့ လိမ်းလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့တော့အသားထဲစိမ့်ဝင်တယ်.ဒါပေမဲ့ကြာလို့ဝီကအဲ့ဒါသိပ်စိတ်မရှည်ဘူးဆိုမဆွဲတတ်ဘူး. အချိန်တော့နည်းနည်းလေးပိုပေးရတယ်.ဒါပေမဲ့လက်နဲ့လိမ်းလည်းကောင်းတယ်. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလိုလိမ်းတဲ့နည်းစနစ်တွေတော့မတူကြဘူးပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ညီမလေးတွေလည်းပြင်နေရင်းနဲ့ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်မေးလို့ရတယ်နော. တစ်ခါတည်းမေးတယ်. ကိုကြီးကိုမေးပါနော. ဒီနေ့ကျွန်တောတို့ဆုံဖို့ကမလွယ်ဘူးလေနော. နင့်ကိုအားမနာပါနဲ့.မကြောက်ကြပါနဲ့နော.ပေါ့ပေါ့ပါးပါး. အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင်လို့လိမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ ဒီနားလေးတွေမှာနည်းနည်း ဟိုဝက်ခြံလေးတွေ,မျက်ကွင်းညိုတာလေးတွေ,ဖုံးဖို့အတွက်ဒီ concealer လေးသုံးမယ်ပေါ့နော. Concept လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပဲယူသုံးမယ်.အယ်ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့.လက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်စေ.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် brush လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော.ကိုယ်လိုသလောက်တွေ.ပြီးကျတော့နည်းနည်းလေးယူမယ်. ယူပြီးရင်မျက်တွင်းအောက်ညိုတာလေးတွေလည်းနည်းနည်းဖြည့်မယ်. အားလုံးမှီကြရဲ့လားရှင့်. အားလုံးကဝင်ပြင်နေကျထင်တယ်.အဲဒီလိုဆိုတော့. ဟာလက်အရမ်းမြန်တယ်နော. ဟုတ်တယ်. အနီးနောက်ကနေ ထက်ထက်မကွာလိုက်နိုင်တာ. ဟုတ်ပ. ကဲမျက်တွင်းလေးတွေလေ.နည်းနည်းညိုတဲ့နေရာလေးတွေဖုံးမယ်. ပြီးရင်ဒီမေးစေ့နားလေးတွေပိုပြီးတော့မေးစေ့ချွန်သင်းရောင်လေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော. Lighting လေးပေးလိုက်တဲ့သဘော.အဲဒါနှာခေါင်းလေးတွေ. ပြီးရင်နဖူးပေါရယ်.ပြီးတော့မျက်လုံးပေါကိုလည်း တာဖြစ်ဖြစ် eye primer ဖြစ်ဖြစ်လိမ်းဖို့မမေ့နဲ့နော.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်ရည်တို့တွေ eye shadow ခြယ်တဲ့ အခါကျလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုပြောရမလဲ.အရောင်ထွက်အားပိုကောင်းတာပေါ့နော.မဟုတ်လို့ရှိရင်က ကိုယ်ခြယ်ထားတဲ့ eye shadow တွေကအရောင်သိပ်မထွက်မှာစိုးလို့. အရောင်သိပ်မထွက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ ဟုတ်.ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူး.သနားလို့ဖြစ်မှာပေါ့. ဒီနေ့ကကျတော့ လေးတွေ ချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တောတို့ color လေးတွေတောက်နေဖို့လိုတာပေါ့. ဟုတ်တယ်. ကဲပြီးရင်တော့ brush လေးနဲ့ လေးနဲ့မီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်. .အားလုံးညှိတယ်နော. ညီမလေးဒီဟာအကုန်ပြင်နေကျထင်တယ်. ဟုတ်တယ်. ရုံးကလည်းသူ သူပြင်တတ်တယ်နော.သူမပြင်ဖူးတာပြောတာ. မပြင်ဖူးဘူးဆိုတာလျှောက်ပြောတာတဲ့. အရမ်းမပြင်တတ်ဘူး. အရမ်းတော့မတတ်ဘူး. အခု week ပြောတဲ့ step တွေအတိုင်းအိမ်မှာပြင်နေကြလား. မဟုတ်ဘူး. အခုမှပြင်တာပဲ.ပြင်းလို့ပဲ. နောက်ကျနေတာ.မှန်တော့ လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ.ပြီးရင်အနီးကပ်မှန်လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော.မီးကိုခဏစောင့်ပါနော. ညီမလေးပိုးဝင်းမဟုတ်ဘူး.ပိုအဆင်ပြေလား.ပြေတယ်နောညီမလေး. တစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်နှစ် ကဲဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီရှင်. ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တောတို့ဒါ မိတ်ကပ်လုပ်တဲ့ပထမဦးဆုံး step လေးတော့ပြီးသွားပါပြီ.ကျွန်တောနောက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ step တွေရှိပါသေးတယ်.တီဗွီရှေ့ကနေမခွာဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော. ဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Thilawa Onlight One Star အချိန်ခဏလေးပေးရုံနဲ့နူးညံ့စိုပြေရေဓာတ်ပြည့်ဝစေတဲ့အသားအရေလေးကိုရမှာပါ. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်နိုင်ငံကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအနေနဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဂျပန်မြန်မာပွဲတော. ဒီနေ့မှာတော့ ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီရေးစပ်မှုပုံစံအသစ်နဲ့ရောက်ရှိလာမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခု. မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကျန်းမာပျောရွှင်စေဖို့ရည်ရွယ်တင်ဆက်တဲ့သတ္တမအကြိမ်မြောက်ဂျပန်မြန်မာပွဲတောကြီးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျောအဆိုတောတွေဖြစ်ကြတဲ့သီလဟာရကနဲ့မိုဒီဆာကီဝင်း. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ကြတဲ့စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နီနီခင်ဇော X box မင်းလှသံစဉ်တို့ရဲ့ဖျောဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ Covening ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန်အတွက်လှူဒါန်းမှုတွေကိုတစ်ပါတည်းပြုလုပ်နိုင်မယ့် Charity online show ဖေဖောဝါရီလတစ်ဆယ့်လေးရက်နေ့မှာ MNTV Channel နဲ့ အခြား social media platform များကနေတိုက်ရိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်. We နဲ့အတူရောကျွန်တောတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ fancy orange wait card လို့ပြင်ဆင်ဖို့လေးကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ. ဒါဆိုရင်ဝင်းတို့ကအခု foundation တွေပြီးသွားပြီ. ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲကြမယ်.မျက်ခုံးမွှေးကိုမျက်ခုံးမွှေးမဆွဲခင် အာဒီလို brush လေးနဲ့ပေါ့နော.ဒီ လေးနဲ့အရင်ဆုံးမျက်ခုံးမွှေးကိုခြစ်လိုက်မယ်.အဲ့ဒါမှဝတ်ရည်တို့နည်းနည်းလဲနေတယ်.ထောင်တယ်.မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေအားလုံးကသူ့နေရာလေးနဲ့သူနေရာတကျလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော. ပြီးရင်တော့ဖြူဖြူကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်မျက်ခုံးမွှေးလေးရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ.အမ်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲချမယ်.မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့အခါမှာဝိအမြဲတမ်းပြောပါတယ်. နေကြည့်ကြည့်ဝေးကြည့်ကြည့်.နေကကြည့်လိုက်အဝေးကကြည့်တယ်.ကြည့်ပြီးတော့ဆွဲရတာပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော. ဒီနေ့တော့ ခဲတံလေးအသုံးပြုမယ်.ဒီ ကဒီခဲတံလေးနဲ့ အကုန်လုံးဆွဲတဲ့ခဲတံလေးနဲ့ဆွဲပါမယ်ရှင်. အနီးကိုလည်းကြည့်မယ်. လက်လေးကိုထောက်ထားပေါ့နော.လက်လေးနည်းနည်းလေးထောက်ထားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုထောက်ချွန်လိုက်.အဲဒီလိုမျိုးသုံးအသုံးပြုသလိုပဲ.ဒီလက်ကဒီမှာထောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာက အာဘယ်လိုပြောရမလဲ.ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော. Control ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့. ဒါကတော့မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့နည်းလေးပါရှင့်. ဒီနေ့ ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တောတို့မျက်ခုံးမွှေးဆွဲရင်အရမ်း အထူကြီးတော့မဆွဲဘူးပေါ့နော. ဟုတ်. ဒီနေ့မျက်ခုံးမွှေးကိုလည်းပါးပါးလေးပေါ့နော. နည်းနည်းပါးပါးလေး. အနက်ရောင် ဟုတ်. ကဒီအညိုပြေပြေလေးပေါ့. ဟုတ်. အညိုပြေပြေလေးဆွဲတာ. အနက်ရောင်လည်းရတယ်. မီးခိုးလည်းရတယ်. အရောင်ပြေပြေလေးဆို ပြေပြေလေးတွေပေါ့နော်. ဟုတ်. ကိုယ့်ရဲ့နဂိုရှိပြီးသားမျက်ခုံးပုံစံအပေါ်မှာပဲ. ဟုတ်. ဘောင်လေးအရင်ကွပ်မယ်.ဘောင်လေးကွပ်ပြီးသွားရင်မီးကိုဒီအမြှီးလေးကိုအရင်ဖြည့်မယ်. အမြှီးလေးကိုကအားဘယ်လောက်သုံးပြီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်.ဘာမှမဖြစ်ဘူး.ဘာလို့ဆိုတော့အမြှီးကနက်သွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး.ကိစ္စရှိတာကဝတ်ရည်တို့ဒီထိပ်ပေါ့နော. ဒီထိပ်.အဲ့ဒီထိပ်မှာဝတ်ရည်တို့အားသုံးမိလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းထူသွားတာပေါ့.ထူသွားပြီ.အရောင်ကလည်းများသွားတယ်.ပြီးတော့ဝိလိုမျိုးမျက်ခုံးမွှေးဒီနားမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့သတိထားရတယ်. အဲ့ဒီမှာအရှေ့နားလေးမှာထူသွားရင်ကျွန်တောတို့ကသဘာဝသိပ်မကျတော့ဘူး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အရှေ့နားမှာတော့ထူသွားရင်နည်းနည်းရုပ်ရင့်သွားတယ်. Angry Bird လေးတော့ ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းလိုက်တယ်.အဲဒါတချို့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးကြီး သမင်ဆွဲတာလားမသိဘူး.ကျွန်တောတွေ့ဖူးတယ်. တချို့ကျတော့လည်းလိုက်တယ်.သူတို့နဲ့ထူထူထဲထဲလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာလိုက်တယ်. တို့ကျတော့ဒီနားမှာအမွှေးလေးတွေလည်းရှိနေပြီးသားဆိုတော့ အဘွားလေးပဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော. ကဲအနီးကြည့်လိုက်.အဝေးကြီးကြည့်လိုက်. ရေအခုထိပြင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လား. သိတယ်ရှင့်. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရောအဆင်ပြေလား. နိုင်နိုင်လား. ညီမလေးစိမ်းလဲ့ဆီကညီမလေးတစ်အိုးတော့ပြည့်လား.ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်ပြေပါတယ်ရှင့်.ဟုတ်. မီးကိုပဲစောင့်နေရတာထင်တယ်. ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်အဆင်ပြေလား. ဟုတ်.ပြေပါတယ်. ပြေပါတယ်နော.ညီမလေးစန္ဒာအောင်ရော. Like တွေရှာတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့. ပြောရင်းနဲ့အဝေးကဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးထူသွားတာ.အားမရသေးတာ. .အဲဒါလည်းဝေး. ကျွန်တောကြည့်ပေးမယ်.အဝေးကို. ကြည့်ပေးပါဦး. ကဲဒါဆိုရင်ရပါပြီ.မျက်ခုံးမွှေးကတော့ ပြီးရင် ပြီးရင်ဝတ်ရည်တို့ဒီမိတ်ကပ် look ရဲ့ main ပေါ့နော.အဓိကကတော့ဝတ်ဒီနှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်လေးကိုအသုံးပြုသွားမှာပါ.မျက်လုံးရော eye shadow အနေနဲ့ရောပါးနီလေးနဲ့ရောနှုတ်ခမ်းနီအနေနဲ့ရောပေါ့နော.ဒီဟာလေးကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးသွားမှာပါ. အောကျွန်တောတို့ဒီတစ်မျိုးတည်းနဲ့ အယ်နှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်တစ်တောင်တည်းနဲ့ကျွန်တောတို့သုံးမျိုးပြည့်မှာပေါ့နော. ဟုတ် အဲဒီတော့ဝတ်ရည်ကိုဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကိုလက်လေးပေါမှာဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်မယ်.တင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် ပြီးတော့ရှင်မှာ brush လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ကိုယ်နှစ်သက်ရာပေါ့နော. အဲဒီလိုမျိုးလေးယူလို့ရတယ်. We ကတော့ brush လေးနဲ့ယူလိုက်မယ်. Brush လေးနဲ့ယူလိုက်ပါမယ်ရှင်. ယူပြီးတော့ ယူ ယူပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှာ eye shadow လေးမှာထည့်လိုက်မယ်.မျက်လုံးလို့. ရွံရဦးမှာ.ပါးမှာထည့်လိုက်တာ. လဆန်းပါတယ်ထင်တယ်. ရတယ်.ပြီးရင်လည်းပါးလွှာ အဲဒီအတိုင်းလေးလည်းလှတယ်. အဲဒီအတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါ. ရပြီ.ရပြီ.မဖျက်နဲ့. ကျွန်တော screenshot ရိုက်လိုက်. အင်းပါတဲ့. သူ့သီချင်းနဲ့သူပြန်ထိတော့မယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားတယ်လေနော.စတိုင်ပေါ့.အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ. စတိုင်ပေါ့. ကဲ eye shadow လေးကို video မျက်ခွံလေးကနေပြီးတော့အပေါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာပေါ့နော. ကျွန်တောနှုတ်ခမ်းနီနဲ့လည်း eye shadow ခြယ်လို့ရတယ်နော. ဟုတ်.နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ sharing ခြယ်လို့ရတယ်.တချို့နှုတ်ခမ်းနီတွေဆိုသူကလုံးဝ ဟို official announce လုပ်ထားတာ.မျက်လုံးပေါလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော. ဒါဆိုကျွန်တောတို့ eye shadow လည်းမကုန်တော့ဘူး.ဝေ့. မကုန်တော့ဘူး.ဟုတ်ကဲ့. အဲ့ဒါကြောင့်လေနှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင့်ရှိရင် အာတောတောများများအဆင်ပြေတယ်.ခရီးသွားလို့ရှိရင် လွယ်လွယ်ကူကူနှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင်ယူသွားလိုက်.ပြီးရင်အဲ့ဒါပါးနီတွေရော eyeshadow တွေရောကြိုက်ကုန်သလိုရတာနော. ဒါဆိုရင်ကျွန်တောတို့တရားဝင်မပြောထားတဲ့တံဆိပ်မပါတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတွေကျတော့မသုံးသင့်တာလား.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သုံးမိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲ.အသားအရေ. အင်း.သုံးပြီးရင်တော့အားလုံးကမျက်နှာပေါမှာသုံးဖို့အတွက်ပဲထုတ်လုပ်ထားတာဆိုတော့လေ.အဲရတော့ရပါတယ်.ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဆီများတဲ့နှုတ်ခမ်းနီတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ မျက်လုံးပေါမှာအဆီပြန်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော.ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကဒီ ရပါတယ်.ကိုရီးယား brand တွေတောတောများများလည်းရတယ်. ပေါ့နော.ဟုတ်. အဲဒါဆိုအရမ်းတော့စိုးရိမ်စရာတော့မရှိဘူး. ဟုတ်.အရမ်းတော့စွဲစရာမရှိဘူး.အကုန်လုံးဒီလိုပဲသုံးကြတာဆိုတော့. မျက်နှာအသားအရေပေါမှာမူတည်ပြီးတော့အဲဒီလိုအရမ်းအဆီပြန်တဲ့ဟာလေးတွေပဲသုံးတယ်ပေါ့. ညီမလေးအေးချမ်းပါတယ်. ခြယ်ထားတဲ့အရောင်လေး we ရှင်. ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်အဆင်ပြေလား.ကြည့်ပေးပါဦး. အော. ပြေတယ်.သူကလေနည်းနည်းဟိုကင်မရာအရောင်ကြောင့်လားမသိဘူး.နည်းနည်းလေးတော့ပန်းရောင်လေးကောင်းတယ်.ဒါပေမဲ့ရတယ်.ကိစ္စမရှိဘူး.ဝတ်ရည်တို့အခုဟို အရောင်လေးပဲနည်းနည်းကွဲသွားတာပေါ့နော.ပြင်ပုံပြင်နည်းကတော့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်မှာဆိုတော့လေ. ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်. ဟုတ်.ညီမဟိုသုံးတာလိမ္မောရောင်စစ်စစ်ပဲ.ဒါပေမဲ့မျက်လုံးအောက်ရောက်မှပန်းရောင်နဲ့ရမှာ. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒါဖြစ်တယ်.ဖြစ်တတ်တယ်. We love အဲ့ဒီလိမ္မောရောင် ခြယ်လို့ရှိရင် သတိထားတယ်.တစ်ခါတလေ brush ကလည်းအရောင်ကူးတယ်လေ.သိလား. အင်း. Brush ကလည်းအရောင်ကူးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဟို အဲ့ဒီလိုမှားတတ်တယ်ပေါ့နော. ဟုတ်. ရတယ်.ရတယ်.ဒါကိစ္စမရှိဘူး. Eyeshadow လိမ္မောသီးတော့ရှိတယ်.နည်းနည်းဖြေလိုက်မယ်. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. Eye shadow လိမ္မောနဲ့ we love ပြန်ဖြည့်မှာ. ပိုတောင့်လိမ့်မယ်. ပြီးရင်ဒီအရောင်လေးကိုပဲဒီမျက်လုံးအောက်လေးကိုလည်းထည့်မယ်ပေါ့နော. .ပြီးရင်ဒီနေ့ makeup look ကကျတော့လည်းကျွန်တောတို့ဒီလိမ္မောဘက်ကိုအသားပေးပြီးပြင်မယ်.ဒါပေမဲ့ ဟိုဒီမိန်းကလေးတောတောများများနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ look ကလေးတွေပေါ့နော.ကျွန်တောတို့အသားညိုညိုအသားဖြူဖြူလိုက်ပြီးပြင်လို့ရမယ့်အလုပ်ကလေးပေါ့. ဟုတ်တယ်.ဒီလိမ္မောရောင်ကကျတော့သူက one done ဘက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေ နည်းနည်းလူတိုင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မယ်.ဝတ်ရည်တို့မြန်မာအသားအရေဆိုအဝါလေးတွေအဖြူလေးတွေအညိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော.လူတိုင်းနဲ့.ပြီးတော့ပြင်ရတာအရမ်းလွယ်တယ်. ဟုတ်တယ်.ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တောတို့နှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်နဲ့ သုံးမျိုးလောက်ပြင်မှာဆိုတော့တောတောကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာတယ်. အရမ်း အားလုံးကြိုက်နေကြပြီ. အားလုံးကတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူသက်သာချောင်ချိပေါ့နော. ဒါကျတော့လိမ္မောရောင်တွေပဲပြင်နေဦးမယ်ဝတ်ရည်. ဒီနှစ်ကျတော့ကျွန်တောတို့ဘယ်လို trend လေးတွေခေတ်စားလာနိုင်လဲ. ဟုတ်.ဝတ်ဆင်တာတော့လေ.နှစ်ထောင့်နဲ့နှစ်ဆယ့်တစ်မှာတော့ဟိုဒီလိုမျိုးအရောင် crazy color လေးတွေခေတ်စားမယ်.နီယောတွေခေတ်စားမယ်ပေါ့နော. နေရုံတွေခေတ်စားမယ်.ပြီးတော့ကျတော့ဟို clean look လုံးဝ clean ပါးပါးကြည်ကြည် look လေးတွေလည်း ခေတ်စားမယ်ပေါ့.အဲ့ဒီလိုမျိုးထင်တယ်.ဟုတ် ကျွန်တောတို့က အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တောတို့ mask ကမဖြစ်မနေတက်ရမယ်လေနော. ဟုတ်တယ်. ဆိုတော့ဒီမျက်လုံးတစ်ဝိုက်လေ.အပေါအပေါပိုင်း မျက်နှာအပေါပိုင်းလေးကိုကျွန်တောတို့ကအဓိကထားပြီးတော့လှအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြင်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးလာတယ်.ပိုပြီးတော့နော. ဟုတ်တယ်. ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးလည်းပိုပြီးတော့သတိထားပြီးပြင်လာကြသလိုပဲ. ဟုတ်တယ်.အဓိကကတော့ပေါတာမျက်လုံးပဲရှိတာကိုး.မျက်လုံးမှာအားတွေ အကုန်လုံး အဲဒီတော့မျက်လုံးကို day သေချာလုပ်ထားတာပေါ့နော.အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင်ဘာညာပေါ့.အမ်း ဒါဆိုရင်ဒီ cream လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် week ကတော့ ရဲ့ဒီ eye shadow palette တွေကလိမ္မောရောင်လေးပေါ့နော.လိမ္မောရောင်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ထပ်ပေးပါ့မယ်. လိမ္မောရောင် eye shadow palette လေးတွေရှိကြလားရှင်.ပြပါဦး.အယ်အဲ့ဒီဟို အောရတယ်.ရတယ်.အဲဒီမှာလိမ္မောရောင်လေးပါတယ်.အဆင်ပြေတယ်.အေးချမ်းပါတယ်.အဆင်ပြေတယ်. နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒီလိုအရောင်လေး.ဟုတ်တယ်.သင်ဇာပဲ.အဆင်ပြေတယ်. အိုကေ. ညီမလေးစန္ဒာအောင်. စန္ဒာကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်.ရတယ်.အဲ့ဒီလိုအရောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေး လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော.လုံးဝယွန်းလည်းရတယ်. ဟုတ်.မရှိတော့ဘူး.လေးပွဲတောင်မရှိတာ. ဪလိမ္မောရောင်မရှိဘူးလား.ယွန်းမာ. မရှိဘူးပဲရတယ်.ယွန်းအရောင်ကတောတောတော့. တောတောတော့ဟိုဟာဖြစ်နေပြီ. ဒီကောင်ကအရောင်တော့ထွက်နေပါပြီ. အရောင်တော့ထွက်နေပြီ. အဲ့ဒီအပေါလေးမှာနည်းနည်းလေး. ဒီမှာလေပိုညီမလေးပိုးဝင်းမောင်ဖို့ရော.အဆင်ပြေလားညီမလေး. ဟုတ်.အစ်မကိုပြပါဦး. အမ်း.ဒီဒီဒီဟာဆိုရင်နော. အောရတယ်.ရတယ်.ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒါလည်းရတယ်. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ colour ခြယ်တာကဟိုထွက်တဲ့အရောင်လေးတွေကတော့အသားအရေပေါမူတည်မယ်ထင်တာပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.အသားအရေပေါမူတည်တယ်.ခုနကဝင်းပြောသလို brush ကလည်းစကားပြောသေးတယ်. Brush ပေါမှာလည်းပါသွားလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းပေါ့နော.အရောင်လေးတွေ ပြောင်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်. ဒါဆိုကျွန်တောတို့ festival တွေဘာတွေသွားလို့ရှိရင် ကိုယ်ကအထင်းဆုံးဖြစ်နေမှာ. Mask တပ်ထားရင်တောင်ထင်းနေပြီ. Mice တပ်ထားရင်တောင်မျက်လုံးပစ်ချမယ်တို့ဘာတို့ ရိုးနို့ဆိုသာ သီချင်းတွေဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး look လေးတွေလည်း ပြင်ရင်အဆင်ပြေမယ်နောအစ်ကိုကြီး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ပြင်တော့မှာတဲ့.ပြင်တော့မှာတဲ့. ဒီနေ့စပြင်ပြီ. အရမ်းကြိုက်သွားပြီ. အမ်း. အမ်း.ဒါကတော့ဒါကတော့အစ်ကိုအကုန်မပြီးသေးဘူးနော. ပြော.အကုန်ပြီးပြီဆိုရင်မျက်နှာမသစ်တော့ဘူးတဲ့.ဒီအတိုင်းအိပ်ထားဦး. ဒါဆိုရင်မျက်လုံးအပေါအောက်လည်းပြီးသွားပြီ.ဆိုလို့ရှိရင် ကို eyeliner လေးဆွဲကြမယ်. Eyeliner ကလည်းဆွဲရမှာပေါ့နော. Eyeliner ကလေဟို ဟိုတချို့ကကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်.မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်. We are ကတော့ eye liner ကိုမသိမသာလေးပါတယ်ဆိုရင်ရောပေါ့နော.အဲဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်. မျက်လုံးအောက်လေးထဲကနေပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော eyeliner ဆွဲတာတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်အရမ်းအထူကြီးမဆွဲကြတော့ဘူးနောအစ်ကိုကြီး. ဟုတ်တယ်. အခုက eye shadow ကိုအရမ်းအသားပေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော.အဲဒီလိုအဲဒီလိုဖြစ်သွားတာ. Eye shadow ကိုပဲများသောအားဖြင့်သေချာအချိန်ပေးပြီးတော့ ခြယ်လေ့ရှိကြတယ်. Liner ကိုတော့ weight ခုထည့်လိုက်သလိုမျိုးလေမသိမသာလေးပါတယ် လေးပဲထည့်ကြတော့တယ်.ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမျက်တောင်. မျက်တောင်ကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ကောကြတယ်.မျက်တောင်ကော့ကောလေးတွေနဲ့ eye shadow လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော. ဟုတ်.ညီမလေးပွဲပွဲမှာပိုအဆင်ပြေလား. သူကြိုက်နေတာကျွန်တော. အားရပါးရကျွေး. ပြည့်တယ်လေ.အဲ့ဒါသူက မှန်တော့ဝိလည်းအဲဒီလိုပဲ.ဒီမှာနည်းနည်းဘာညာလက်ကမဆန့်တော့လို့. ဪဟုတ်. မဟုတ်ရင် လည်းအဲဒီလိုပဲ.လှန်ပြီးတော့ဆိုးရတာ. ဟုတ်.ဟုတ်. အရမ်းပျံ့သွားမှာစိုးလို့. ကျွန်တောတို့ကြည့်ရတာအကုန်လုံးပြေပြင်တာက step တွေကအဆင်ပြေတယ်ကွာ.ဒီစင်္ကြာတောမှာအကုန်လုံးကအားရပါးရကြီးတွေဖြစ်ကုန်လို့. ဟုတ်ပ. ရုံးကပြီးသွားပြီလား. မဆွဲရဲဘူး. အာ liner မဆွဲဘူးလား. ဪ. မအိပ်ရဲလို့. ဪ. ပုံမှန်ဆိုရင်ရောဆွဲနေကြမဟုတ်ဘူးလား.ယွန်းက. အင်း.အဲဒီနေရာကလှိုင်သာယာကိုမဆိုးဖြစ်ဘူး. ဪမဆိုးဖြစ်ဘူး. ဟိုဒီအပေါနားလေးပဲအဲဒီလိုလေးပဲဆွဲဖြစ်တယ်. ဟုတ်.အောက်ထဲ. ပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးမဆွဲရဲတာတို့.ယွန်းတို့လိုလူမျိုးကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.မျက်လုံးလေးတွေပေါ့. အမ်းအမ်း.ဘယ်လိုပြောရမလဲ. Liner မဆွဲရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှလေ. Eye shadow အမှုန့်လေးတွေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးတစ်စောင်းစာလောက်တွေပေါ့နော.အဲဒီလိုမျိုးလေးသုံး. Liner ပုံစံလေးသုံးလည်း မသုံးခင်လည်းရပါတယ်.အခုခေတ်က liner ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းကေ သိပ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော. မျက်တောင်ကော့မယ်.မျက်တောင်ကော့စက်လေးနဲ့သေချာကော့မယ်. ညှပ်မိရုံပဲနော.ကျွန်တောဖြည်းဖြည်းညှပ်မယ်. .သတိထားနော. ကျွန်တောတို့အရေးကြီးတာပဲနော. ဟုတ်. Mascara ကလည်းအရေးကြီးတယ်.အပေါရောအောက်ရောပေါ့နော. Off လေးပါပါးပါးလေးဆို. ဟုတ်.အောက်ကိုပါ.ပါးပါးလေး. Mascara ကတော့သူဆိုးတယ်. အာ mascara ကတော့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အသက်ပေါ့နော.အရမ်းကြိုက်ကြတယ်. Mascara အားလုံးလိုက်မှီတယ်ထင်တယ်နော. အားလုံးလိုက်မိကြလားညီမလေးတို့. အခုကြည့်ထားတာကတော့အကုန်လုံးကလေဝေးနဲ့ထပ်ချက်မကွာဘဲလိုက်ပစ်နေတာ. ဟုတ်ပ. ဝေးပဲ.ဝေးပဲနည်းနည်းပဲနောက်ကျနေတယ်. နောက်မကျပါဘူး. အဆင်ပြေပါတယ်.အိုကေ. ဒါဆိုရင် eye makeup လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ မီးကလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော.ဟုတ်. ဟုတ်.အရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုအာအရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုအာ feedback ပေးပါမယ်. အဲဒီညီမလေးကသူကကျတော့သူလည်းအဲဒီလိုပဲ.လိမ္မောရောင်သိပ်မပေါက်ဘူးပေါ့နော. Eye shadow ခြယ်ထားတာမှန်တယ်. ဒါပေမဲ့အရောင်လေးတော့နည်းနည်းလေးမှားနေတယ်.ခုနက week ပြောသလိုမျိုး brush မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလို အမှုန်လေးတွေနည်းနည်းရောသွားလို့ရှိရင်အရောင်လေးတွေရောတတ်တယ်.ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်. ပြီးရင်နော.ဒီမှာလေ.စိမ်းတဲ့နှင်း.စိမ်းတဲ့နှင်းက အယ်စိတ်နဲ့နေတယ်. Blending color blending ကလည်းအဆင်ပြေတယ်. အာ foundation လေးတော့နည်းနည်းလေးပါးတယ်ပေါ့နော.ပြီးတော့ကျတော့အာ blending ကိုဒီဘက်လေးဒီမျက်လုံးထောင့်လေးမှာပါနည်းနည်းလေး ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်.ဟုတ်. .ပြီးလို့ရှိရင်ညီမလေးသင်ဇာဦး သင်ဇာဦးကအယ်ညီမလေးသင်ဇာဦးက eye shadow အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းနေတယ်. သူကဒီဒီနားနဲ့အယ်မျက်မျက်ခုံးနဲ့ပေါ့နော.မျက်ခုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကနည်းနည်းလေးနီးတဲ့အခါကျတော့ အရောင်လေးကိုဒီထက်မကပိုပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ဆိုးလို့ရတယ်.ကျန်တာကတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်. ဟုတ်.ဟိုဘက်သွားရအောင်. .ပြီးရင်ဇွန်း. ယွန်းကတော့ယွန်းကအဆင်ပြေတယ်.ပါးယံတယ်. ပါးနီလေးကြိုဆွဲလိုက်တာပေါ့နော.ကြိုးလည်းရိုက်တာပေါ့.အဲ့ဒါစတိုင်မဟုတ်ပါဘူးလို့.ကြိုဆွဲမိတာ. ပြောပြလိုက်ပါဦး.ပရိသတ်ကြီးကို. အမ်.ကျန်တာကအဆင်ပြေတယ်.မျက်ခုံးမွှေးလည်းအဆင်ပြေတယ်. ပြီးတော့ color branding ကလည်းအရမ်းကောင်းတယ်.ပြီးတော့ liner လေးပါသွားလို့ရှိရင်တော့ perfect ပေါ့နော. ဟုတ်.အဆင်ပြေပါတယ်.ယွန်း. ဘားနီလေးကြိုးဆွဲထားလေလို့. ညီမလေး ညီမလေးပိုးမွှားမှုန်ကကျတော့အမ်သူလည်း eye shadow အရောင်လေးတောတောတော့နည်းတယ်.ဒါကင်မရာထဲမှာလား.ဘာလို့လဲတော့ဝီရီမသိဘူးပေါ့နော. ဒါပေမဲ့အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းတယ် အာ ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ. Eye shadow အရောင်လေးကို pop up ဖြစ်အောင်လို့ပိုပြီးတော့ထည့်လို့ရှိရင်တော့အရမ်းအဆင်ပြေမှာ. ဟုတ်.အယ်ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်.ဟုတ်.ပြီးတော့အေးချမ်းပိုင်. Agent file ကတော့ခုနကသူပြောတဲ့အရောင်အရောင်ရောသွားတယ်လို့.ခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်. ပြီးတော့တကယ်လို့ထပ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော.အရောင်လိမ္မောရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးမျက်လုံးတစ်ပြင်လုံးနီးပါးပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ထည့်ပြီးတော့ ထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်.ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေတယ်. Liner လေးဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးထွက်နေတယ်.ကျန်တာအဆင်ပြေတယ်. ဟုတ်. ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့အခု eye makeup လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော. အဲ့ဒီမိတ်ကပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုမျိုးမိတ်ကပ်တွေဆက်ပြီးတော့ချဲ့မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်. ခေတ်သစ်မှာဆန်းသစ်မှုတွေများစွာနဲ့ပရိသတ်ထံကိုရရှိလာမယ့် Happy Bank အရင့်နဲ့မတူဘဲ အခုနွယ်ကဘာတွေသိမှာလဲ. ဆီတွေပုဆိုးနဲ့ဒူချင်ပြုတ်.ဟာမိုက်တယ်. ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုခံစားနိုင်သလို ကျွန်တောတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖလှယ်ရင်း ဗဟုသုတတွေရရှိစေမယ့်အပြင်စိတ်လည်းပျောရွှင်စရာလေးပါ.သာမန်သာ .ဒါတွေဘယ်ကရမလဲ. ပရိသတ်တွေရယ်မောပျောရွှင်နိုင်မယ့်ပခန်းရဲ့ဟာသတွေလာဦးမှာနော. TV ရှေ့ကမခွာနဲ့. Final သုံးမှာ. ဒီလို စိတ်ဝင်စားဖွယ်များစွာကိုကြည့်ရှုခံစားရမယ့် Happy ကျွန်တောရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်.အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တောတို့ဒါနောက်ဆုံး step ကိုရောက်ပါပြီ.အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေထူးခြားပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်. ခုနကပြောသလိုပဲဝတ်ရည်တို့ရေဒါနောက်ဆုံး step ပေါ့နော.ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ အဆင့်ထဲမှာပါတယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်ရည်တို့ခုနကပါးနီလေးတွေပါးနီလေးကို အယ်ဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှဆိုးကြမယ်.ပါးနီကအရောင်လေးနည်းနည်းလေးနှုတ်ခမ်းနီကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးတောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော.သတိထားပြီးတော့ဆိုးရမယ်. Branding ကိုသေချာလုပ်ရမယ်.အဲ့ဒီတော့ we are အာယူလိုက်တယ်. ယူပြီးလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့ပဲ လက်လေးနဲ့ယူပြီးတော့မှမျက်နှာပေါမှာတင်လိုက်မယ်. ကိုယ်ရေလိုက်သလိုပြုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါလာတယ်.ဒီပါးမှုန့်လေး ပေါ့နော.အဲဒီပုံလေးမှာတင်မယ်.ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ခါတည်း spot ကလေးနဲ့ brand blending လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော.မဟုတ်လို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့ အာအရောင်ကကွက်သွားမှာတွေဘာတွေကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့ သမီးရေဒါဆိုဟိုမှာယွန်းကကွက်နေပြီထင်တယ်. ယွန်းပလိုင်းကြည့်ပါဦး. ရုံးကကြိုပြီးတင်ပေးလိုက်တော့လေ.သူအရောင်ကိုအမှန်ထွက်သွားတာ. မျက်နှာသစ်ဖို့အချိန်ပေးရမယ်. ရပါတယ်. Blend blend လုပ်လို့ရှိရင်အမ်းတို့တို့ပြီးတော့လုပ်သွားလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်. ရလားရော့. အဆင်ပြေရဲ့လားပြောလေ. နည်းနည်းတော့ခဲနေတယ်. နည်းနည်းတော့ခဲတယ်ဗျ.ဒါပေမဲ့လည်းချစ်စရာလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော. စတိုင်ပေါ့.ဒါစတိုင်ပစ်တိုင်အသစ်.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာယူစတိုင်အသစ်နဲ့စပါမယ်. မက်မွန်အသီးလေးလိုဖြစ်နေပြီ.မက်မွန်သီးကာလလိုဖြစ်နေပြီ. .ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်း အဲဒီလိုပဲ.တစ်ဖက်ချင်းစီလုပ်တဲ့ we are men ဟိုဟာကွက်တာတို့ဘာတို့ကြောက်လို့ပေါ့နော.အဲဒီတော့ဒီဘက်ကိုလည်းလုပ်မယ်. ပါးနီကလေဟိုအမျိုးမျိုးခြယ်လို့ရတယ်သိလား. အခုဒီနားလေးမှာခြယ်ကြတယ်.တချို့ကကျတော့ဒီမျက်လုံးကာလာလေးနဲ့စပ်စပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးတွေမှာခြယ်ကြတယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအယ်ပိုးဝတ်မှုန်ခြယ်သလိုမျိုးဒီလိုအတန်းလိုက်တွေခြယ်ကြတယ်.ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့နော.ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆိုခြယ်လို့ရတယ်. သူကဒီနေ့အလုပ်ကကောဘယ်လိုကြက်ဥကိုထည့်လို့ရလဲ. ဟုတ်.ကြိုက်သလိုခြယ်လို့ရတယ်.ဒီနေ့လုပ်တာလည်း ညီမလေးပေါအဝတ်မဟုတ်ဘူး.အထူချယ်ထားတာမျိုးဆိုတော့အလယ်နားလေး. ဟုတ်တယ်.သူအလယ်လေး.ဒီလိုလေးဖြတ်ပြီးတော့တချို့ဆိုနှာခေါင်းလေးတွေပါဖြတ်ချယ်. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒါလည်းအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် လူငယ်လည်းအရမ်းဆန်တယ်. .ဆိုတော့ပါးနီတို့ဘာတို့လည်းခြယ်လာကြတယ်နော. .အဲ့ဒီတော့ပါးနီချယ်ရီကျတော့ကျွန်တောတို့ ဘယ်လိုမျိုးအယ်ကိုယ့်မျက်နှာကျပေါမူတည်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလိုက်ဖက်မှုရှိလဲ. ဟုတ်.ပန်းတွေကတော့အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်.မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံသေလည်းရှိတယ်.ဒါပေမဲ့အယ်အခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိပ် ဟိုဘောင်နဲ့ဆေးနဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော.အခုခေတ်ကကျတော့အဓိကဖက်ရှင်ခေတ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ.ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်လိုက်ဖက်မယ့်အလုပ်ကလေးတွေကိုခြယ်ကြတာများတယ်. Rose မရှိဘူးပေါ့နော. Music ရယ်လို့တော့ထွက်မတတ်တော့မရှိဘူး. အာဒီနေ့လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တောတို့အယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေနဲ့ပိုပြီးတော့လိုက်တာပေါ့နော. လေးတွေကလည်းနည်းနည်းတောက်တောက်ကလေးသုံးတာ. ဟုတ်တယ်. ဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေး. ပြီးရင်တော့ဝတ်ရည်တို့အာဒီ BB လည်းသုံးထားတယ်ဆိုတော့မေဦးတို့လိမ်းထားတဲ့မိတ်ကပ်လေးတွေကိုကြာရှည်ခံအောင်လို့အာဒီ loose powder လေးနဲ့ set လုပ်ကြမယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအာ two way ပေါ့နော.တချို့ကကျတော့လည်း comfort powder သုံးကြတယ်ပေါ့. ဒါကတော့ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်. We ကတော့ loose powder လေးသုံးပေးပါမယ်ရှင်. .အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောဒီနေ့ဒီ မိတ်ကပ် look ပါ. ဟုတ်. အယ်ပြင်ဆင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလည်းဟို step တွေအများကြီးကျွန်တောတို့သုံးစရာမလိုဘူးနော.ဒီနေ့ဆိုအများကြီးလည်း cosmetic ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးမလိုဘူး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒီမှာကျွန်တောတို့ moisturizer ကနေစပြီးတော့လိမ်းလာတာဆိုတော့အခုဆိုနှုတ်ခမ်းနီလေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းကျွန်တောတို့သုံးမျိုးလောက်ခြယ်တာဆိုတော့လေ. ဟုတ်. ဟုတ်. Step တွေလည်းအများကြီးမှတ်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.အများကြီးမှတ်စရာမလိုဘူး.ပြီးတော့ဒါက အာအဓိကကတော့ခရီးသွားရင်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ပိုးထင်တယ်.ဒီလိမ္မောရောင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော. ဘယ်လိုအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီနည်းလမ်းလေးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရောင်လေးတွေလည်းခြယ်လို့ရတယ်. ဒါပေမဲ့လိမ္မောရောင်ကျတော့လည်းခုနကပြောခဲ့သလို ကြားမှာတွေ party သွားတာတို့သိတယ်မလား. Festival သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေကျတော့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်တောအခုနောက်ပိုင်းက တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီလို color လေးတွေနော.အဲဒီလိုမျိုး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ခြယ်ထားကြတယ်. Color အရမ်းသုံးကြတယ်အခုခေတ်ကလေ. .ပြီးရင်နှာခေါင်းလေးဖောမယ်.နှာခေါင်းကတော့ we are browser လေးအသုံးပြုပြီးတော့နှာခေါင်းလေးဖောမယ်. မေးရိုးလေးနည်းနည်းချမယ်ပေါ့နော. We နှာခေါင်းကမဖောထားရင်နှာခေါင်းပျောက်နေလို့လေ. ဝေရဲ့ အဝေးရဲ့အသက်ကောင်ပေါ့နော. ရဲ့အသက်ကတော့နှာခေါင်းပါ. ယွန်းရဲ့အသက်ကရော. ယွန်းရဲ့အသက်ကရော. ဝမ်းဆက်လည်းခြောက်နှစ်. နှစ်ထောင်နှစ်နှစ်ကြီးနေလို့ပြီးအောင်လို့ပါ. မကြီးပါဘူးရော့. မကြီးပါဘူးလို့ထင်လို့ပါ. ဒါပေမဲ့ ယွန်းရဲ့အသက်ကကျွန်တောထင်တယ်. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရော.အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး.ကိုယ့်ရဲ့အားသွင်းအားနည်းချက်အားသာချက်တော့ရှိမှာပေါ့နော.မိန်းကလေးတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး.ဘယ်နေရာလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ပြင်ဖြစ်ကြလဲ. အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်ပြင်ပြီဆိုအဓိကထားပေးပါ. ဖြေပေးပါဦး. ဖြေပေးပါဦး. ဟုတ်.အဓိကကတော့မျက်လုံးပေါ့နော. မျက်လုံးလား.ညီမလေးက.မျက်လုံးကအယ် eye shadow ထိအောင်ပေါမူတည်ပြီးတော့မျက်နှာရဲ့ အမ်ပိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော. အင်း.ပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတာပေါ့နော.မျက်လုံးပေါမှာပဲတွေ့တယ်. ဟုတ်တယ်.မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လောက်ပဲလှနေလှနေပေါ့နော.ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုမကျကြဘူး.တစ်ခုခုကိုတော့လိုနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်. ပြီးရင်ပါးရိုးလေးချမယ်. ဒီမေးရိုးကားကလေမေးရိုးကဝေးတဲ့ဒီလိုမျိုး v shape လေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော.ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနားကနေစပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေး v shape လေးဖြစ်အောင်လို့မေးရိုးလေးနည်းနည်းချမယ်. မျက်နှာရှိန်လေးပိုပေါတာပေါ့. ဟုတ်.မျက်နှာ shape လေးပိုပေါသွားအောင်လို့. အားလုံးလိုက်မိလားရှင်. .ဒါပြီးရင်တော့ဝင်းပြောသလိုမျိုးဟို party တွေဘာတွေမသွားကြနဲ့နော. မုဒေ on ပြီးတော့ကျွန်တောတို့ မရတော့ဘူး.လျှော့လို့မရတော့ဘူးတဲ့.အကုန်လုံးက. အပြည့်တွေလိုက်ဝတ်ထားပြီးသားဆိုတော့. သွားရင်လည်းခေါဦးလို့ပြောမလို့ပါ.တို့ဘာတို့ .ဒါဆိုရင် အားလုံးလိုက်မိပါတယ်နော.အဆင်ပြေရဲ့လားရှင့်. ပြေပါတယ်ရှင့်. နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ. နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့နှုတ်ခမ်းနီပေါ့နော. နှုတ်ခမ်းနီဆိုးမယ်.နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်မှာ week က foundation လေးနဲ့ဒီ BV လေးနဲ့ပေါ့နော. Baby လေးနဲ့ပဲ အာနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်အောင်ဒီနားလေးတွေကိုပို့လိုက်မယ်.အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့အရောင်လေးကလည်းအရောင်ထွက်အားကောင်းမယ်. ပေါ့နော. ဟုတ်.ကျွန်တောတို့နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းလေးမှာအရင်တင်ပေးရမှာ. ဟုတ်.နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားအရောင်နဲ့ ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ခမ်းနီတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော. အောဟုတ်.အဲ့ဒီတော့ဝေတို့ကအရင်ဆုံး အရင်လုပ်လိုက်မယ်. အရောင်မှန်အောင်ပေါ့. ဟုတ်.အရောင်လေးမှန်သွားအောင်ပေါ့. Confirm လုပ်ပြီးတော့မှအဓိကဇာတ်လိုက်ကြီးကိုဆိုးကြမယ်. လိမ္မောရောင်ပေါ့နော. နန်းလိမ္မောရောင်နှုတ်ခမ်းနီ. ဟုတ်. .နှုတ်ခမ်းနီကလေ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆိုလို့ရတယ်သိလား.တချို့ကကျတော့လည်းသင့်လိုမျိုးလေးဆိုးကြတယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအပြည့်ဆိုးကြတယ်. ကိုယ်ကြိုက်သလိုကိုယ်ပေါလို့. ဟုတ်.ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆိုတာပေါ့နော. အခုနောက်ပိုင်းတော့သင့်ပုံစံလေးတွေဆိုတာပိုများတယ်နော. ဟုတ်တယ်. ဒီနားလေးကိုဦးနည်းနည်းလေးပြန်ဖြည့်ပေးမယ်.အရမ်းအပြည့်ကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ဝေးပစ်နေကြအဲဒီလို look လေးတွေကျွန်တောတို့အမြဲတမ်း တွေ့ဖြစ်တယ်.ဒီလိုမျိုးနောက်မီးကအဲဒီလိုမျိုး orange fancy အဲ first orange makeup look လေးတွေတောတောလေးကြိုက်စရာလား.အဲဒီလိုမျိုးနော. ဟုတ်. ဆံပင်ကာလာလေးတွေဆိုးထားတာတွေကိုပိုပြီးတော့ဒီဒီ look နဲ့ပိုလိုက်သလိုပဲနော. ဟုတ်တယ်. ဆံပင်ကာလာလေးတွေဆိုးထားရင်တော့ပိုပြီးကြွတာပေါ့နော.အရမ်းကို party mood လေးဖြစ်နေပြီ.အရမ်းမရတော့ဘူး. သူတို့တွေ ယွန်းအဆိုးဆုံးလို့ပါ. အခုအမှန်ခုနကလိုပါးနီလေးဒီလိုမျိုးလေးခြယ်ထားတာလေးကပိုတောင်မှမိုက်သေးတယ်နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ချင်တယ်. နော. တစ်ခြစ်ပဲသိလား. အချစ်ပဲ. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေတော့အဆင်ပြေလားရှင်. ပြေတယ်နော.ဟာမြန်တယ်ဟ.အားလုံးက. ကဲဦးရေ.အယ်ကျွန်တောတို့ အခု အခုဒီနေ့ပြင်တဲ့မိတ်ကပ် look လေးကလေ. ကျွန်တောတို့ဒါလူငယ်ဆန်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့လိုက်တယ်. Weight ဆိုလည်းအရမ်းနော. We week ကိုတွေ့နေကျဒါကတော့ ဟုတ်တယ်.ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလိမ္မောရောင်ကိုအသားပေးပြီးခြယ်တဲ့ဟာမျိုးသူတို့ အာဒါ first time ထင်တယ်ကျွန်တောထားတာနော. ဟုတ်. အယ်သိပ်ပြီးတော့မတွေ့ ဟုတ်. ဟိုဝင်းအနေနဲ့ကြည့်ရတာလည်းလေ.သူတို့ကအင်္ကျီလေးတွေကလည်းလိမ္မောရောင်လေးတွေနဲ့အပြည့်ပဲဝတ်ထားတယ်.မိတ်ကပ်လေးကလည်းအရမ်းကိုလိုက်ဖက်နေတယ်ဆိုတော့ လိမ္မောသီးလေးတွေတန်းစီထားသလိုပဲခံစားရတယ်. ဟုတ်တယ်.ကျွန်တောတို့ဒါ ဟိုညနေနီညိုရယ်လို့ရှိရင်နီညိုစူးစပ်အလှလေးပေါ့. ထင်စားလိုက်တာ. အိုကေ.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့သူတို့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေမေးကြည့်ရအောင်နော.ဟုတ်.ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနလို ဝိပြောသလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ book လေးတွေဖြစ်နေမလဲ. ဟုတ်.ဟုတ်.နောက် you ကစပြောပေးပါဦး. အာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ကျတာအမြဲတမ်းပြင်တော့မှာ.ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်တော့မှာအရမ်းကြိုက်သွားပြီ. ဒီဒီမိတ်ကပ် look ပဲ လိမ္မောရောင်ပဲ. လိမ္မောရောင်ဝတ်ဖို့တောပါတယ်.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာ အဲဒီတော့ယွန်းရောဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒါလိုက်ပြင်တာပေါ့နော.ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးကြည့်နေတာဆိုတော့ အာဒီနေ့ပြင်ရတဲ့ခံစားချက်ကကောဘယ်လိုရှိလဲ. ဘယ်လိုပြောမှာတုန်း.ရင်တွေခုန်တယ်.စောနကဆိုဒီလိုကြီးကိုင်တာတုန်နေတယ်. သီချင်းဆိုတာထက်လည်းမကျောဘူးပေါ့နော.ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တောတို့မိတ်ကပ်ပြင်ပြီးတော့ရင်ခုန်ရတာ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ကျွန်တောတို့ကျေးဇူးပါ.ကျွန်တောတို့နောက်ထပ်ညီမလေးစိမ်းလဲ့လေးကိုဝင်ကြည့်မယ်နော. ဟုတ်. ဒီ look လေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်.မဝင်းနဲ့တူတူပြင်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်. BCC မှာပါဝင်ပေး ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်. ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး.အဲဒီတော့ဒီနေ့ပြင်ပြီးသွားတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ. အင်း.အရမ်းလှနေတယ်. အရမ်းလှနေတယ်.ဟုတ်တယ်.အရမ်းလှပါတယ်ညီမလေး.ဆံပင်လေးနဲ့လည်းလိုက်တာလေ. ဟုတ်တယ်.ပြီးတော့ဒီနေ့ပြင်ဆင်တာအကုန်လုံးကအဆင်ပြေကြတယ်. ဟုတ်.အကုန်လုံးနဲ့လိုက်တယ်.အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်ကိုလည်းမေးကြည့်ချင်ပါတယ်. ဟာဒီအရောင်ကလေပြင်နေကျမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်မျိုးဆန်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်. ဟိုမိတ်ကပ်တွေဖျက်ပြီးတော့အိပ်လိုက်ရမှာတောင်နှမြောတယ်.ဘယ်သွားရမလဲ. အင်းအင်း. ပျောစရာကြီးနော.အဲ့ဒီလိုမျိုးကြားတာအားရတယ်. ဒီနေ့မျက်နှာမသစ်တော့ဘူးတဲ့. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့ပြီးရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ထားတာနော.ဆရာကြီး. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကနည်းလမ်းလေးတွေသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တောတို့နောက်နေ့တွေပြင်လို့ရပြီ.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာကျွန်တောတို့ခေါကြမယ်.အဲ့ဒီတော့ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအကုန်အဆင်ပြေတယ်နော.ဝေးလည်း ဒီဟာခြောက်ယောက်လုံးကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ. အာဝေခုနကပြောသလိုပေါ့. ခုနကပြော ဟုတ်.ပြီးတော့အကုန်လုံးကအရမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့လေ live တင်တာလေ.ဝီက တကယ်လည်းအံ့သြတယ်.ဟိုတစ်ခုခုဆိုတာနဲ့တစ်ခုခုတန်းလုပ်ပေးပြီးသားပဲ.ဝိတိုတောင်နည်းနည်းပြန်စောင့်နေရသလိုပဲ.အရမ်းတောတယ်.အရမ်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော.ဝင် ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.ယွန်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့အားတက်သရောနော.အားလုံးပါဝင်ပေးကြတာ.အားလုံးအရမ်းလှကြပါတယ်.ကျေးဇူးပါ. ဟုတ်ပြီး.ကျွန်တောတို့ဒီကနေ့ကတော့ညီမငယ်လေးတွေနဲ့ပြင်တာကတော့အရမ်းအဆင်ပြေတယ်နော.ကျွန်တောတို့ကြည့်ပြီးတော့လည်း အကုန်လုံးချစ်စရာလေးတွေခုနကဝူးပြောသလိုပဲ.လိမ္မောသီးလေးတွေလို အခုတီဗီကနေပြီးတော့ကျွန်တောတို့အစီအစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြင်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါနော.ဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကိုရောကျွန်တောတို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ သိချင်တာလေးတွေရှိလား. ဟုတ်.ရှိတာပေါ့.အခု week ဒီ program ပြီးသွားပြီ.ဒီအစီအစဉ်လေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော.ဝတ်ရည်တို့ရဲ့ syndrome network မြန်မာ group ရှိတယ်. Facebook မှာ.အဲ့ဒီမှာ post ရှိပါမယ်.အဲ့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော. Live တင်ပြီးသားလေးတွေကို comment လေး photo comment လေးတွေပေးပေးပါ.ဝီကလည်းအဲ့ဒီမှာ feedback လေးတွေပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တောတို့ comment လေးတွေပေးပါဦးနော. အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဝေထပ်မံပြီးတော့အာဒီနေ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ထပ်မံပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဟုတ်.အဝေးကလည်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်. ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဝိနည်းနဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ special guest ရိုးရာကျေးဇူးပါ. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအားလုံးကျေးဇူးပါနော.ကျွန်တောဒီကနေ့မှာအားလုံးအတူတူပါဝင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ကျွန်တောတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တောတို့ အာတစ်ဆယ့်သုံးပတ်မြောက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ.ကျွန်တောတို့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်.အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တောတို့ အနေနဲ့ပါဝင်မယ့်သူကတော့ကျွန်တောတို့ရဲ့ blogger လမ်းမ ဖြစ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ.အဲဒီတော့ Juventus ကနောက်ဆုံးရေမှာဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ တွေနဲ့တင်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုဆက်စပ်စောင့်မျှောကြည့်ရှုဖို့လည်းပြောကြားရင်းနဲ့ ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်.အားလုံးပဲသာယာပျောရွှင်တဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေ. တာ့တာပါခင်ဗျာ.အားလုံးတာ့တာပါ. ကိုယ်ကာရီအတွက် iron page မှာ main sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်. Cinderella Network Myanmar (Episode - 13), MNTV Channel, 711579826081106, Download Facebook video and save them to your devices to play anytime for free">
ကိုယ်ကာတွေအတွက်အာရုံပြည့်ချိုရည်မှ main sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်. .ဇန်နဝါရီလနောက်ရက်မြန်မာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ. ပျိုမေတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖောခွင့်ရမယ်.ကျွန်တောတို့ရဲ့ အပတ်တစ်ဆယ့်သုံးမြောက်တင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ.ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့အစီအစဉ်ကတော့အလှတရားကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ပျိုမေတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုလေးစနစ်ကျကျနဲ့ကိုယ်တိုင်ပုံဖောနိုင်စေဖို့အတွက် စီနီယာဆင်တွဲလောင်းတွေနဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်.စီနီယာစင်ထွန်းသားတွေဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီး beauty blogger နဲ့ professional makeup artist တွေကနေပြီးတော့ အပတ်စဉ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးခြောက်ဦးကိုခေတ်ကာလနဲ့လိုက်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရေပန်းစားတဲ့မိတ်ကပ်လိမ်း ခြယ်မှုတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ. မှာတော့ဘောကာတွေအတွက်အာရုံဖြည့်အချိုရည်ကနေ အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ MNTV ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ MNTV channel Facebook page တွေကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. အေကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်လိုက်ပါလိမ်းချိန်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်း အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်. ဒီနေ့ညမှာ senior center အနေနဲ့သင်ပြပေးသွားမယ့် professional makeup artist give ကိုဖိတ်ခေါလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ. ဒီနေ့ညရဲ့စီနီယာရဲ့ဆင်တွဲလကတော့နာမည်ကျော celebrity တွေရဲ့ လက်စွဲတောမိတ်ကပ် artist တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တောတို့အမြဲတမ်းဆန်းသစ်တဲ့မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှုတွေကို အမြဲတမ်းဖန်တီးနေတဲ့မိတ်ကပ် artist grewye ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. မင်္ဂလာပါ. ဟုတ်.မင်္ဂလာပါအစ်ကို. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့အဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပြန်ပြီ.အဝေးရဲ့မိတ်ကပ် look ကျွန်တောတို့လေအမြဲတမ်းလန်းဆန်းပြီးတော့အမြဲတမ်း create ဖြစ်နေတာပေါ့နော. ဟုတ်. အဲဒီတော့အမြဲတမ်းတွေ့ရပါတယ်.အဲဒီတော့ဒီကနေ့ကရော ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမှုလေးတွေတွေ့တာလဲ. ဟုတ်.ဒီနေ့တော့ဝေးကပေါ့နော.အောလူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတယ်.ပြင်ရတာလည်းလွယ်တယ်. အာ fancy online makeup look လေးတွေပြင်ပြဖို့ပေါ့နော.အဲဒါစီစဉ်ထားပါတယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ဝိတ်အမြဲတမ်းပြင်နေကျတွေထဲကကျွန်တောတို့ဒါလူကြိုက်များတဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ဘယ်လိုမျိုးအဲ မျိုးတွေကျလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ကပ်လွတ်ကလေးကပြင်ဖို့အတွက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်. ဟုတ်.ဝင်းအနေနဲ့ပေါ့နော.ဒီ fancy allange makeup look ကကျတော့ အာ party သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် festival သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သင်္ကြန်ပေါ့နော. အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်း pop up ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ရမယ်လို့နီနီထင်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့လူငယ်ဆန်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲလမ်းအပြင်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေကျလို့ရှိရင်နော.အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်း ကလေးတွေအရမ်းခေတ်စားလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော.ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ TV ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တောတို့နဲ့အတူတူအယ် လိုက်ပါပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တောတို့ဖိတ်ခေါပါတယ်.အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဝင်းနဲ့အတူတူအာ ဟုတ်ကဲ့. အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမလေးကို. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့. ပြီးရင်တော့အားလုံးလည်းလူငယ်လေးတွေနော်. အခုဒီနေ့ပြင်မယ့်ခလုတ်လေးလည်းအားလုံးလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဝေ. ဟုတ်တယ်. ဟုတ်. အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတူတူပြင်ဆင်ကြမယ့်ညီမငယ်လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အဲဒီတော့ ပထမဦးဆုံးကျွန်မငယ်လေးတစ်ဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ. မင်္ဂလာပါရှင်.ညီမစန္ဒာအောင်ပါ.ရန်ကုန်မြို့ပြည့်ဝတဲ့ချောင်ကြိုပါရှင့်.အသက်ကနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပါ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးစန္ဒာပါ.တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.နောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ညီမနာမည်ကတော့စိမ်းသိမ့်ဖြူပါ.အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပါ.တောင်ဥက္ကလာပနော. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးစိမ်းလဲ့မေရေ.တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.ကျွန်တောတို့နောက်ထပ် ညီမလေးတစ်ဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်.ညီမနာမည်ကတော့သဉ္ဇာဦးပါရှင့်. အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ပါ.မရမ်းကုန်းမှာနေပါတယ်ရှင့်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးတင်ဇာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.ကျွန်တောတို့နဲ့အတူတူမိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မယ့်နောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ကျွန်မနာမည်ကပိုးဝင်းမုန်ဖြစ်ပါတယ်.ညီမအသံမစခင်. ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်.ဟုတ်.အားလုံးမင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးမင်္ဂလာပါ.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောနောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ညီမနာမည်ကတော့အေးချမ်းပိုင်ပါ. အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ရှိပါပြီ.ဒဂုံမြို့နယ်ကပါ.ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အစ်ကိုတို့ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်.ညီမလေးတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီကနေ့ညီမငယ်လေးတွေနဲ့အတူတူမိတ်ကပ်ပါဝင်လေ့ကျင့်မယ့် special guest တစ်ဦးကိုလည်းဖိတ်ခေါထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ. သူကတော့ ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့ဒါမြန်မာ idol season two မှာကတည်းကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ အဲကျွန်တောတို့အာအင်းပါသီချင်းတွေကိုပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့တေးသံရှင်ယွန်းဖြစ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ. ဂျိုးရေမင်္ဂလာပါ. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်. တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်နော.ယွန်းရေ.အခုတလောဘာတွေလုပ်နေလဲပြောပါဦး. ပရိသတ်တွေကိုပြောပြပါဦး. ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုဖိုးပြည့်နဲ့ပေါ့နော.သူ့ရဲ့စာအုပ်လေးတစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်. အဲဒီအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ယွန်းရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းကျွန်တော အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်နော.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးရောကြည့်ဖြစ်လား. ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.ရှေ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တောတို့တွေဒါ we နဲ့အတူတူတိုက်ရိုက်ပြင်ရမှာပေါ့နော.ပရိသတ်တွေအများကြီးကလည်းကြည့်နေမှာဆိုတော့အာစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်ထင်တယ် အယ်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်.ညီမမိတ်ကပ်ကိုအဲ့ဒီလို မသင်ဘူးကွာ.အခုဒီနေ့မြေးကလည်း သင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမအရမ်းပျောပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့. ဖိတ်ခေါပေးတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်. ဟုတ်ကဲ့ယွန်းရေနော.ယွန်းအတွက်တော့ဒါပထမဦးဆုံးအယ်တွေ့ရမှာပေါ့နော.ပြင်ရမှာပေါ့.ဆိုတော့ ဝေကရောဘယ်လိုခံစားရလဲ.ဒီနေ့ရုံးပါဝင်ပေးမှာဆိုတော့. အာဒီနေ့ယွန်းပါ.ယွန်းနဲ့ဝေနှင်းကလည်းအရင်ကတည်းကသိတယ်လေ.ဆိုတော့ ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးပိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့. ဒါကျွန်တောတို့ဒါညီမငယ်လေးတွေလည်းဒီနေ့ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပျောစရာကြီးနော. ဟုတ်. အတူတူပြင်ကြမယ်.ယွန်းယွန်းနော. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ဝေ ကျွန်တောတို့ပြင်ဆင်မယ့်မိတ်ကပ် look လေးကလည်းဒါပရိသတ်တွေ ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.ဖိတ်ခေါပါတယ်.ကျွန်တောတို့ပြည်သူတွေအတွက် ဟုတ်ကဲ့ပါ. ဟုတ်ကဲ့. ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါအစ်မ. ကဲအဲဒါဆိုရင်စတင်ချမယ်. ဗီဒီယို ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးစတင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် အာ အာမိတ်ကပ်မလိမ်းခင်မှာအရင်ဆုံး moisturizer လေးလိမ်းပါမယ်. Week ကဒီ က all in one moisturizer လေးလိမ်းမယ်ပေါ့နော်. ကျွန်တောတို့မိတ်ကပ် ပြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် sense အမ်ဒီ တို့ moisturizer တို့ကျွန်တောတို့ skin care step လေးတွေလည်းလိမ်းပေးသင့်တယ်နော. ဟုတ်ဟုတ်.အဲ့ဒါလေးတွေကလိမ်းပေးသင့်တယ်.ဘာလို့ဆိုတော့ moisturizer တို့ဘာတို့ကကျတော့ပေါ့နော.ဝတ်ရည်တို့ရဲ့အသားအရေမှာမညီမညာရှိတာတွေအမ်ပြီးတော့ ဟိုနေလောင်တာတွေဘာတွေပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းပိုပြီးတော့ cover ဖြစ်သွားအောင်လို့ moisturizer လေးသုံးပေးပါမယ်. Moisturizer လေးကိုအသားထဲကိုနည်းနည်းစိမ့်ဝင်အောင်လို့သေချာလေးလိမ်းပေးရမယ်ပေါ့နော. ဒီနေ့ကျွန်တောတို့ဒါ fancy orange makeup look လိမ်းမှာဆိုတော့တချို့ကလိမ္မောရောင်လေးတွေဝတ်ထားကြတယ်နော. အာဟုတ်ပ. အကုန်လုံးအဲ့ဒီတော့မှပိုပြီးတော့နော.အင်္ကျီလေးနဲ့. ဟုတ်တယ်. အမ်းလိုက်ကပ်သွားတာ. လိုက်ဖက်သွားမှာ. ကဲ moisturizer လေးလိမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကိုမိတ်ကပ် base တွေလိမ်းကြမယ်.မိတ်ကပ် base ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော.အာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်လေးတွေ အဲ့ဒီလိုမျိုးအသားအရေမညီတာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးညှိပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးတော့မှ foundation လေးတင်လိုက်တာဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့. ဟုတ်. အာဒီရဲ့ makeup base လေးလိမ်းပါမယ်ရှင့်. ဒါလေးပေါ့နော. ကျွန်တော foundation မလိမ်းခင်မိတ်ကပ် base အရင်လိမ်းတာပေါ့နော. ဟုတ်. ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တောတို့တွေဒါ foundation ကိုတန်းလိမ်းလိုက်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ဖူးတယ်. ဟုတ်. အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုမိတ်ကပ် ကိုခံလိမ်းတာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကွာခြားလဲ. အာမိတ်ကပ် base ခံလိမ်းတာက primer ခံလိမ်းတာကကျတော့လေ.သူကအဓိကကအသားအရေလေးကိုညှိပေးတယ်.ပြီးတော့ကျတော့ဆီတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိန်းပေးတာပေါ့နော. မိတ်ကပ်တန်းလိမ်းတာထက်စာလို့ရှိရင်. ဒီ steps တွေကနည်းနည်းပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်.ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကအသားထဲကိုစိမ့်ဝင်အောင်လို့လိမ်းပေးတာပေါ့နော. Foundation ကောင်းမှကျွန်တောတို့. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒီတော့တစ်နေကုန်ခံတာ.ဟုတ်. အခုနောက်ပိုင်းကလည်းကျွန်တောတို့မိတ်ကပ်ကိုလည်းအဲဒီလို create လုပ်ပြီးတော့လိမ်းလာကြသလို skin care ကိုလည်းအများကြီးဂရုစိုက်လာကြတယ်နော. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. Skin care ကတော့မလုပ်မဖြစ်ပေါ့နော. လုပ်ရမယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ skin skin ကောင်းတဲ့အခါကျတော့မှဝတ်ရည်တို့တွေကအမ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ကပ် look လေးကိုပြင်နိုင်တာပေါ့နော.အဲ့ဒီတော့ skin ကတော့အရေးကြီးတယ်. ရုံးရော skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလား.ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ. မလုပ်ဖြစ်ဘူးလား. ပျင်းတယ်. အများကြီးပဲ. နင်သေချာသင်ပေးရတော့မယ်. ဟုတ်ပ. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရော. ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ. ကျန်တဲ့သူတွေကလုပ်တယ်ထင်တယ်. ကျန်တဲ့သူတွေကလုပ်တာ. လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. လုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့. ရူးမဲတင်းနေတာထင်တယ်. ကဲမိတ်ကပ် ရပြီဆိုလို့ရှိရင် BB cream လေးလိမ်းမယ်.ဒီနေ့ဒီဟာကဒီ BB cream လေးလိမ်းမယ်ပေါ့နော.ပါးပါးလေးပဲလိမ်းကြမယ်. Baby cream ကို ကကျတော့လက်ပေါလေးမှာတင်တယ်.ပြီးလို့ရှိရင်မှမျက်နှာပေါတင်တယ်. Foundation ကိုဝင်းအမြဲတမ်းပြောနေကျအတိုင်းပဲ. ဟိုတစ်စက်ချင်းစီချတာထက်ပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုး မျက်နှာပေါမှာအများကြီးချလိုက်တဲ့ဥစ္စာပိုပြီးတော့ blend လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်. ဆိုရင်မျက်တွင်းအောက်ကနေစပြီးတော့လိမ်းတယ်. ဒီမျက်တွင်းအောက်ကနေစပြီးတော့မှနေရာလေးချလိုက်တယ်.ပြီးလို့ရှိရင်မှ brush လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် sponge လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ blend လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော. ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့နော. ဟုတ်.ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့. ဒီနေ့ကတော့လူငယ်ဆန်ဆန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ BB cream လေးနဲ့ပဲဝတ်ရည်တို့တွေပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့. Baby cream တွေများသွားတာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်ဆမတတ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရော ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲ. ဟုတ်. Baby cream ကများသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဖြူဝဲဘက်သွားတော့လေ နည်းနည်းပြာသွားတတ်တယ်ပေါ့နော.အဲ့ဒီတော့တကယ်လို့မျက်နှာပေါမှာတင်တာများသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတ်ရည်တို့ဒီ sponge လေးနဲ့အာ မသိပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော.ဆွဲဖယ်လိုက်တာ.ဟုတ်.မျက်မျက်နှာပေါကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွဲဖယ်လိုက်တယ်. စယူကတည်းကတော့ကျွန်တောတို့သေချာလေးချိန်ဆပြီးရွေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော. ဟုတ်ဟုတ်. ပိုးလို့ရှိရင်ပြီးတော့လည်ပင်းမှာလိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့.ဟုတ်. လည် လည်ပင်းကလည်းလိမ်းရမှာပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့.လည်ပင်းလည်းဒါတချို့ကတော့တစ်ခါတည်းအသားရောင်မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းနဲ့ညီအောင်တစ်ခါတည်းလိမ်းကြတယ်. ဟုတ်. တချို့ကကျတော့လည်းအဲဒီလိုမျိုးမညီတဲ့သူတွေကျတော့လည်ပင်းက လေးလည်းသတိထားပြီးလိမ်းဖြစ်တာပေါ့. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. လည်ပင်းကတချို့ကကျတော့လေလည်ပင်းကပိုးဖြူနေတယ်. ဟုတ်. မျက်နှာလေးက အဲဒီတော့လည်ပင်းရောမျက်နှာရောတစ်ခါတည်းအရောင်တူအောင်လို့လိမ်းလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော. ကဲအားလုံးမှီကြရဲ့လားရှင်.ဟာလက်တွေနဲ့ပဲချလေ.ကောင်းတယ်.မွေးနိုင်သလိုပဲ. ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဟိုလိမ်းတာနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုကွာတာလဲ. ဟုတ်.လက်နဲ့လိမ်းတာလည်းသူကလက်ရဲ့အနွေးဓာတ်လေးပေါ့နော.လက်ရဲ့ဒီလိုအနွေးဓာတ်လေးကနေပြီးတော့ လိမ်းလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့တော့အသားထဲစိမ့်ဝင်တယ်.ဒါပေမဲ့ကြာလို့ဝီကအဲ့ဒါသိပ်စိတ်မရှည်ဘူးဆိုမဆွဲတတ်ဘူး. အချိန်တော့နည်းနည်းလေးပိုပေးရတယ်.ဒါပေမဲ့လက်နဲ့လိမ်းလည်းကောင်းတယ်. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလိုလိမ်းတဲ့နည်းစနစ်တွေတော့မတူကြဘူးပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ညီမလေးတွေလည်းပြင်နေရင်းနဲ့ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်မေးလို့ရတယ်နော. တစ်ခါတည်းမေးတယ်. ကိုကြီးကိုမေးပါနော. ဒီနေ့ကျွန်တောတို့ဆုံဖို့ကမလွယ်ဘူးလေနော. နင့်ကိုအားမနာပါနဲ့.မကြောက်ကြပါနဲ့နော.ပေါ့ပေါ့ပါးပါး. အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင်လို့လိမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ ဒီနားလေးတွေမှာနည်းနည်း ဟိုဝက်ခြံလေးတွေ,မျက်ကွင်းညိုတာလေးတွေ,ဖုံးဖို့အတွက်ဒီ concealer လေးသုံးမယ်ပေါ့နော. Concept လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပဲယူသုံးမယ်.အယ်ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့.လက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်စေ.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် brush လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော.ကိုယ်လိုသလောက်တွေ.ပြီးကျတော့နည်းနည်းလေးယူမယ်. ယူပြီးရင်မျက်တွင်းအောက်ညိုတာလေးတွေလည်းနည်းနည်းဖြည့်မယ်. အားလုံးမှီကြရဲ့လားရှင့်. အားလုံးကဝင်ပြင်နေကျထင်တယ်.အဲဒီလိုဆိုတော့. ဟာလက်အရမ်းမြန်တယ်နော. ဟုတ်တယ်. အနီးနောက်ကနေ ထက်ထက်မကွာလိုက်နိုင်တာ. ဟုတ်ပ. ကဲမျက်တွင်းလေးတွေလေ.နည်းနည်းညိုတဲ့နေရာလေးတွေဖုံးမယ်. ပြီးရင်ဒီမေးစေ့နားလေးတွေပိုပြီးတော့မေးစေ့ချွန်သင်းရောင်လေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော. Lighting လေးပေးလိုက်တဲ့သဘော.အဲဒါနှာခေါင်းလေးတွေ. ပြီးရင်နဖူးပေါရယ်.ပြီးတော့မျက်လုံးပေါကိုလည်း တာဖြစ်ဖြစ် eye primer ဖြစ်ဖြစ်လိမ်းဖို့မမေ့နဲ့နော.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်ရည်တို့တွေ eye shadow ခြယ်တဲ့ အခါကျလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုပြောရမလဲ.အရောင်ထွက်အားပိုကောင်းတာပေါ့နော.မဟုတ်လို့ရှိရင်က ကိုယ်ခြယ်ထားတဲ့ eye shadow တွေကအရောင်သိပ်မထွက်မှာစိုးလို့. အရောင်သိပ်မထွက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ ဟုတ်.ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူး.သနားလို့ဖြစ်မှာပေါ့. ဒီနေ့ကကျတော့ လေးတွေ ချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တောတို့ color လေးတွေတောက်နေဖို့လိုတာပေါ့. ဟုတ်တယ်. ကဲပြီးရင်တော့ brush လေးနဲ့ လေးနဲ့မီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်. .အားလုံးညှိတယ်နော. ညီမလေးဒီဟာအကုန်ပြင်နေကျထင်တယ်. ဟုတ်တယ်. ရုံးကလည်းသူ သူပြင်တတ်တယ်နော.သူမပြင်ဖူးတာပြောတာ. မပြင်ဖူးဘူးဆိုတာလျှောက်ပြောတာတဲ့. အရမ်းမပြင်တတ်ဘူး. အရမ်းတော့မတတ်ဘူး. အခု week ပြောတဲ့ step တွေအတိုင်းအိမ်မှာပြင်နေကြလား. မဟုတ်ဘူး. အခုမှပြင်တာပဲ.ပြင်းလို့ပဲ. နောက်ကျနေတာ.မှန်တော့ လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ.ပြီးရင်အနီးကပ်မှန်လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော.မီးကိုခဏစောင့်ပါနော. ညီမလေးပိုးဝင်းမဟုတ်ဘူး.ပိုအဆင်ပြေလား.ပြေတယ်နောညီမလေး. တစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်နှစ် ကဲဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီရှင်. ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တောတို့ဒါ မိတ်ကပ်လုပ်တဲ့ပထမဦးဆုံး step လေးတော့ပြီးသွားပါပြီ.ကျွန်တောနောက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ step တွေရှိပါသေးတယ်.တီဗွီရှေ့ကနေမခွာဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော. ဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Thilawa Onlight One Star အချိန်ခဏလေးပေးရုံနဲ့နူးညံ့စိုပြေရေဓာတ်ပြည့်ဝစေတဲ့အသားအရေလေးကိုရမှာပါ. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်နိုင်ငံကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအနေနဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဂျပန်မြန်မာပွဲတော. ဒီနေ့မှာတော့ ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီရေးစပ်မှုပုံစံအသစ်နဲ့ရောက်ရှိလာမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခု. မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကျန်းမာပျောရွှင်စေဖို့ရည်ရွယ်တင်ဆက်တဲ့သတ္တမအကြိမ်မြောက်ဂျပန်မြန်မာပွဲတောကြီးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျောအဆိုတောတွေဖြစ်ကြတဲ့သီလဟာရကနဲ့မိုဒီဆာကီဝင်း. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ကြတဲ့စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နီနီခင်ဇော X box မင်းလှသံစဉ်တို့ရဲ့ဖျောဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ Covening ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန်အတွက်လှူဒါန်းမှုတွေကိုတစ်ပါတည်းပြုလုပ်နိုင်မယ့် Charity online show ဖေဖောဝါရီလတစ်ဆယ့်လေးရက်နေ့မှာ MNTV Channel နဲ့ အခြား social media platform များကနေတိုက်ရိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်. We နဲ့အတူရောကျွန်တောတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ fancy orange wait card လို့ပြင်ဆင်ဖို့လေးကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ. ဒါဆိုရင်ဝင်းတို့ကအခု foundation တွေပြီးသွားပြီ. ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲကြမယ်.မျက်ခုံးမွှေးကိုမျက်ခုံးမွှေးမဆွဲခင် အာဒီလို brush လေးနဲ့ပေါ့နော.ဒီ လေးနဲ့အရင်ဆုံးမျက်ခုံးမွှေးကိုခြစ်လိုက်မယ်.အဲ့ဒါမှဝတ်ရည်တို့နည်းနည်းလဲနေတယ်.ထောင်တယ်.မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေအားလုံးကသူ့နေရာလေးနဲ့သူနေရာတကျလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော. ပြီးရင်တော့ဖြူဖြူကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်မျက်ခုံးမွှေးလေးရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ.အမ်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲချမယ်.မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့အခါမှာဝိအမြဲတမ်းပြောပါတယ်. နေကြည့်ကြည့်ဝေးကြည့်ကြည့်.နေကကြည့်လိုက်အဝေးကကြည့်တယ်.ကြည့်ပြီးတော့ဆွဲရတာပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော. ဒီနေ့တော့ ခဲတံလေးအသုံးပြုမယ်.ဒီ ကဒီခဲတံလေးနဲ့ အကုန်လုံးဆွဲတဲ့ခဲတံလေးနဲ့ဆွဲပါမယ်ရှင်. အနီးကိုလည်းကြည့်မယ်. လက်လေးကိုထောက်ထားပေါ့နော.လက်လေးနည်းနည်းလေးထောက်ထားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုထောက်ချွန်လိုက်.အဲဒီလိုမျိုးသုံးအသုံးပြုသလိုပဲ.ဒီလက်ကဒီမှာထောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာက အာဘယ်လိုပြောရမလဲ.ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော. Control ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့. ဒါကတော့မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့နည်းလေးပါရှင့်. ဒီနေ့ ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တောတို့မျက်ခုံးမွှေးဆွဲရင်အရမ်း အထူကြီးတော့မဆွဲဘူးပေါ့နော. ဟုတ်. ဒီနေ့မျက်ခုံးမွှေးကိုလည်းပါးပါးလေးပေါ့နော. နည်းနည်းပါးပါးလေး. အနက်ရောင် ဟုတ်. ကဒီအညိုပြေပြေလေးပေါ့. ဟုတ်. အညိုပြေပြေလေးဆွဲတာ. အနက်ရောင်လည်းရတယ်. မီးခိုးလည်းရတယ်. အရောင်ပြေပြေလေးဆို ပြေပြေလေးတွေပေါ့နော်. ဟုတ်. ကိုယ့်ရဲ့နဂိုရှိပြီးသားမျက်ခုံးပုံစံအပေါ်မှာပဲ. ဟုတ်. ဘောင်လေးအရင်ကွပ်မယ်.ဘောင်လေးကွပ်ပြီးသွားရင်မီးကိုဒီအမြှီးလေးကိုအရင်ဖြည့်မယ်. အမြှီးလေးကိုကအားဘယ်လောက်သုံးပြီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်.ဘာမှမဖြစ်ဘူး.ဘာလို့ဆိုတော့အမြှီးကနက်သွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး.ကိစ္စရှိတာကဝတ်ရည်တို့ဒီထိပ်ပေါ့နော. ဒီထိပ်.အဲ့ဒီထိပ်မှာဝတ်ရည်တို့အားသုံးမိလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းထူသွားတာပေါ့.ထူသွားပြီ.အရောင်ကလည်းများသွားတယ်.ပြီးတော့ဝိလိုမျိုးမျက်ခုံးမွှေးဒီနားမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့သတိထားရတယ်. အဲ့ဒီမှာအရှေ့နားလေးမှာထူသွားရင်ကျွန်တောတို့ကသဘာဝသိပ်မကျတော့ဘူး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အရှေ့နားမှာတော့ထူသွားရင်နည်းနည်းရုပ်ရင့်သွားတယ်. Angry Bird လေးတော့ ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းလိုက်တယ်.အဲဒါတချို့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးကြီး သမင်ဆွဲတာလားမသိဘူး.ကျွန်တောတွေ့ဖူးတယ်. တချို့ကျတော့လည်းလိုက်တယ်.သူတို့နဲ့ထူထူထဲထဲလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာလိုက်တယ်. တို့ကျတော့ဒီနားမှာအမွှေးလေးတွေလည်းရှိနေပြီးသားဆိုတော့ အဘွားလေးပဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော. ကဲအနီးကြည့်လိုက်.အဝေးကြီးကြည့်လိုက်. ရေအခုထိပြင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လား. သိတယ်ရှင့်. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရောအဆင်ပြေလား. နိုင်နိုင်လား. ညီမလေးစိမ်းလဲ့ဆီကညီမလေးတစ်အိုးတော့ပြည့်လား.ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်ပြေပါတယ်ရှင့်.ဟုတ်. မီးကိုပဲစောင့်နေရတာထင်တယ်. ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်အဆင်ပြေလား. ဟုတ်.ပြေပါတယ်. ပြေပါတယ်နော.ညီမလေးစန္ဒာအောင်ရော. Like တွေရှာတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့. ပြောရင်းနဲ့အဝေးကဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးထူသွားတာ.အားမရသေးတာ. .အဲဒါလည်းဝေး. ကျွန်တောကြည့်ပေးမယ်.အဝေးကို. ကြည့်ပေးပါဦး. ကဲဒါဆိုရင်ရပါပြီ.မျက်ခုံးမွှေးကတော့ ပြီးရင် ပြီးရင်ဝတ်ရည်တို့ဒီမိတ်ကပ် look ရဲ့ main ပေါ့နော.အဓိကကတော့ဝတ်ဒီနှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်လေးကိုအသုံးပြုသွားမှာပါ.မျက်လုံးရော eye shadow အနေနဲ့ရောပါးနီလေးနဲ့ရောနှုတ်ခမ်းနီအနေနဲ့ရောပေါ့နော.ဒီဟာလေးကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးသွားမှာပါ. အောကျွန်တောတို့ဒီတစ်မျိုးတည်းနဲ့ အယ်နှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်တစ်တောင်တည်းနဲ့ကျွန်တောတို့သုံးမျိုးပြည့်မှာပေါ့နော. ဟုတ် အဲဒီတော့ဝတ်ရည်ကိုဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကိုလက်လေးပေါမှာဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်မယ်.တင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် ပြီးတော့ရှင်မှာ brush လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ကိုယ်နှစ်သက်ရာပေါ့နော. အဲဒီလိုမျိုးလေးယူလို့ရတယ်. We ကတော့ brush လေးနဲ့ယူလိုက်မယ်. Brush လေးနဲ့ယူလိုက်ပါမယ်ရှင်. ယူပြီးတော့ ယူ ယူပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှာ eye shadow လေးမှာထည့်လိုက်မယ်.မျက်လုံးလို့. ရွံရဦးမှာ.ပါးမှာထည့်လိုက်တာ. လဆန်းပါတယ်ထင်တယ်. ရတယ်.ပြီးရင်လည်းပါးလွှာ အဲဒီအတိုင်းလေးလည်းလှတယ်. အဲဒီအတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါ. ရပြီ.ရပြီ.မဖျက်နဲ့. ကျွန်တော screenshot ရိုက်လိုက်. အင်းပါတဲ့. သူ့သီချင်းနဲ့သူပြန်ထိတော့မယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားတယ်လေနော.စတိုင်ပေါ့.အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ. စတိုင်ပေါ့. ကဲ eye shadow လေးကို video မျက်ခွံလေးကနေပြီးတော့အပေါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာပေါ့နော. ကျွန်တောနှုတ်ခမ်းနီနဲ့လည်း eye shadow ခြယ်လို့ရတယ်နော. ဟုတ်.နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ sharing ခြယ်လို့ရတယ်.တချို့နှုတ်ခမ်းနီတွေဆိုသူကလုံးဝ ဟို official announce လုပ်ထားတာ.မျက်လုံးပေါလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော. ဒါဆိုကျွန်တောတို့ eye shadow လည်းမကုန်တော့ဘူး.ဝေ့. မကုန်တော့ဘူး.ဟုတ်ကဲ့. အဲ့ဒါကြောင့်လေနှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင့်ရှိရင် အာတောတောများများအဆင်ပြေတယ်.ခရီးသွားလို့ရှိရင် လွယ်လွယ်ကူကူနှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင်ယူသွားလိုက်.ပြီးရင်အဲ့ဒါပါးနီတွေရော eyeshadow တွေရောကြိုက်ကုန်သလိုရတာနော. ဒါဆိုရင်ကျွန်တောတို့တရားဝင်မပြောထားတဲ့တံဆိပ်မပါတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတွေကျတော့မသုံးသင့်တာလား.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သုံးမိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲ.အသားအရေ. အင်း.သုံးပြီးရင်တော့အားလုံးကမျက်နှာပေါမှာသုံးဖို့အတွက်ပဲထုတ်လုပ်ထားတာဆိုတော့လေ.အဲရတော့ရပါတယ်.ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဆီများတဲ့နှုတ်ခမ်းနီတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ မျက်လုံးပေါမှာအဆီပြန်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော.ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကဒီ ရပါတယ်.ကိုရီးယား brand တွေတောတောများများလည်းရတယ်. ပေါ့နော.ဟုတ်. အဲဒါဆိုအရမ်းတော့စိုးရိမ်စရာတော့မရှိဘူး. ဟုတ်.အရမ်းတော့စွဲစရာမရှိဘူး.အကုန်လုံးဒီလိုပဲသုံးကြတာဆိုတော့. မျက်နှာအသားအရေပေါမှာမူတည်ပြီးတော့အဲဒီလိုအရမ်းအဆီပြန်တဲ့ဟာလေးတွေပဲသုံးတယ်ပေါ့. ညီမလေးအေးချမ်းပါတယ်. ခြယ်ထားတဲ့အရောင်လေး we ရှင်. ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်အဆင်ပြေလား.ကြည့်ပေးပါဦး. အော. ပြေတယ်.သူကလေနည်းနည်းဟိုကင်မရာအရောင်ကြောင့်လားမသိဘူး.နည်းနည်းလေးတော့ပန်းရောင်လေးကောင်းတယ်.ဒါပေမဲ့ရတယ်.ကိစ္စမရှိဘူး.ဝတ်ရည်တို့အခုဟို အရောင်လေးပဲနည်းနည်းကွဲသွားတာပေါ့နော.ပြင်ပုံပြင်နည်းကတော့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်မှာဆိုတော့လေ. ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်. ဟုတ်.ညီမဟိုသုံးတာလိမ္မောရောင်စစ်စစ်ပဲ.ဒါပေမဲ့မျက်လုံးအောက်ရောက်မှပန်းရောင်နဲ့ရမှာ. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒါဖြစ်တယ်.ဖြစ်တတ်တယ်. We love အဲ့ဒီလိမ္မောရောင် ခြယ်လို့ရှိရင် သတိထားတယ်.တစ်ခါတလေ brush ကလည်းအရောင်ကူးတယ်လေ.သိလား. အင်း. Brush ကလည်းအရောင်ကူးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဟို အဲ့ဒီလိုမှားတတ်တယ်ပေါ့နော. ဟုတ်. ရတယ်.ရတယ်.ဒါကိစ္စမရှိဘူး. Eyeshadow လိမ္မောသီးတော့ရှိတယ်.နည်းနည်းဖြေလိုက်မယ်. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. Eye shadow လိမ္မောနဲ့ we love ပြန်ဖြည့်မှာ. ပိုတောင့်လိမ့်မယ်. ပြီးရင်ဒီအရောင်လေးကိုပဲဒီမျက်လုံးအောက်လေးကိုလည်းထည့်မယ်ပေါ့နော. .ပြီးရင်ဒီနေ့ makeup look ကကျတော့လည်းကျွန်တောတို့ဒီလိမ္မောဘက်ကိုအသားပေးပြီးပြင်မယ်.ဒါပေမဲ့ ဟိုဒီမိန်းကလေးတောတောများများနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ look ကလေးတွေပေါ့နော.ကျွန်တောတို့အသားညိုညိုအသားဖြူဖြူလိုက်ပြီးပြင်လို့ရမယ့်အလုပ်ကလေးပေါ့. ဟုတ်တယ်.ဒီလိမ္မောရောင်ကကျတော့သူက one done ဘက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေ နည်းနည်းလူတိုင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မယ်.ဝတ်ရည်တို့မြန်မာအသားအရေဆိုအဝါလေးတွေအဖြူလေးတွေအညိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော.လူတိုင်းနဲ့.ပြီးတော့ပြင်ရတာအရမ်းလွယ်တယ်. ဟုတ်တယ်.ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တောတို့နှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်နဲ့ သုံးမျိုးလောက်ပြင်မှာဆိုတော့တောတောကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာတယ်. အရမ်း အားလုံးကြိုက်နေကြပြီ. အားလုံးကတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူသက်သာချောင်ချိပေါ့နော. ဒါကျတော့လိမ္မောရောင်တွေပဲပြင်နေဦးမယ်ဝတ်ရည်. ဒီနှစ်ကျတော့ကျွန်တောတို့ဘယ်လို trend လေးတွေခေတ်စားလာနိုင်လဲ. ဟုတ်.ဝတ်ဆင်တာတော့လေ.နှစ်ထောင့်နဲ့နှစ်ဆယ့်တစ်မှာတော့ဟိုဒီလိုမျိုးအရောင် crazy color လေးတွေခေတ်စားမယ်.နီယောတွေခေတ်စားမယ်ပေါ့နော. နေရုံတွေခေတ်စားမယ်.ပြီးတော့ကျတော့ဟို clean look လုံးဝ clean ပါးပါးကြည်ကြည် look လေးတွေလည်း ခေတ်စားမယ်ပေါ့.အဲ့ဒီလိုမျိုးထင်တယ်.ဟုတ် ကျွန်တောတို့က အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တောတို့ mask ကမဖြစ်မနေတက်ရမယ်လေနော. ဟုတ်တယ်. ဆိုတော့ဒီမျက်လုံးတစ်ဝိုက်လေ.အပေါအပေါပိုင်း မျက်နှာအပေါပိုင်းလေးကိုကျွန်တောတို့ကအဓိကထားပြီးတော့လှအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြင်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးလာတယ်.ပိုပြီးတော့နော. ဟုတ်တယ်. ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးလည်းပိုပြီးတော့သတိထားပြီးပြင်လာကြသလိုပဲ. ဟုတ်တယ်.အဓိကကတော့ပေါတာမျက်လုံးပဲရှိတာကိုး.မျက်လုံးမှာအားတွေ အကုန်လုံး အဲဒီတော့မျက်လုံးကို day သေချာလုပ်ထားတာပေါ့နော.အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင်ဘာညာပေါ့.အမ်း ဒါဆိုရင်ဒီ cream လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် week ကတော့ ရဲ့ဒီ eye shadow palette တွေကလိမ္မောရောင်လေးပေါ့နော.လိမ္မောရောင်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ထပ်ပေးပါ့မယ်. လိမ္မောရောင် eye shadow palette လေးတွေရှိကြလားရှင်.ပြပါဦး.အယ်အဲ့ဒီဟို အောရတယ်.ရတယ်.အဲဒီမှာလိမ္မောရောင်လေးပါတယ်.အဆင်ပြေတယ်.အေးချမ်းပါတယ်.အဆင်ပြေတယ်. နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒီလိုအရောင်လေး.ဟုတ်တယ်.သင်ဇာပဲ.အဆင်ပြေတယ်. အိုကေ. ညီမလေးစန္ဒာအောင်. စန္ဒာကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်.ရတယ်.အဲ့ဒီလိုအရောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေး လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော.လုံးဝယွန်းလည်းရတယ်. ဟုတ်.မရှိတော့ဘူး.လေးပွဲတောင်မရှိတာ. ဪလိမ္မောရောင်မရှိဘူးလား.ယွန်းမာ. မရှိဘူးပဲရတယ်.ယွန်းအရောင်ကတောတောတော့. တောတောတော့ဟိုဟာဖြစ်နေပြီ. ဒီကောင်ကအရောင်တော့ထွက်နေပါပြီ. အရောင်တော့ထွက်နေပြီ. အဲ့ဒီအပေါလေးမှာနည်းနည်းလေး. ဒီမှာလေပိုညီမလေးပိုးဝင်းမောင်ဖို့ရော.အဆင်ပြေလားညီမလေး. ဟုတ်.အစ်မကိုပြပါဦး. အမ်း.ဒီဒီဒီဟာဆိုရင်နော. အောရတယ်.ရတယ်.ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒါလည်းရတယ်. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ colour ခြယ်တာကဟိုထွက်တဲ့အရောင်လေးတွေကတော့အသားအရေပေါမူတည်မယ်ထင်တာပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.အသားအရေပေါမူတည်တယ်.ခုနကဝင်းပြောသလို brush ကလည်းစကားပြောသေးတယ်. Brush ပေါမှာလည်းပါသွားလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းပေါ့နော.အရောင်လေးတွေ ပြောင်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်. ဒါဆိုကျွန်တောတို့ festival တွေဘာတွေသွားလို့ရှိရင် ကိုယ်ကအထင်းဆုံးဖြစ်နေမှာ. Mask တပ်ထားရင်တောင်ထင်းနေပြီ. Mice တပ်ထားရင်တောင်မျက်လုံးပစ်ချမယ်တို့ဘာတို့ ရိုးနို့ဆိုသာ သီချင်းတွေဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး look လေးတွေလည်း ပြင်ရင်အဆင်ပြေမယ်နောအစ်ကိုကြီး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ပြင်တော့မှာတဲ့.ပြင်တော့မှာတဲ့. ဒီနေ့စပြင်ပြီ. အရမ်းကြိုက်သွားပြီ. အမ်း. အမ်း.ဒါကတော့ဒါကတော့အစ်ကိုအကုန်မပြီးသေးဘူးနော. ပြော.အကုန်ပြီးပြီဆိုရင်မျက်နှာမသစ်တော့ဘူးတဲ့.ဒီအတိုင်းအိပ်ထားဦး. ဒါဆိုရင်မျက်လုံးအပေါအောက်လည်းပြီးသွားပြီ.ဆိုလို့ရှိရင် ကို eyeliner လေးဆွဲကြမယ်. Eyeliner ကလည်းဆွဲရမှာပေါ့နော. Eyeliner ကလေဟို ဟိုတချို့ကကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်.မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်. We are ကတော့ eye liner ကိုမသိမသာလေးပါတယ်ဆိုရင်ရောပေါ့နော.အဲဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်. မျက်လုံးအောက်လေးထဲကနေပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော eyeliner ဆွဲတာတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်အရမ်းအထူကြီးမဆွဲကြတော့ဘူးနောအစ်ကိုကြီး. ဟုတ်တယ်. အခုက eye shadow ကိုအရမ်းအသားပေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော.အဲဒီလိုအဲဒီလိုဖြစ်သွားတာ. Eye shadow ကိုပဲများသောအားဖြင့်သေချာအချိန်ပေးပြီးတော့ ခြယ်လေ့ရှိကြတယ်. Liner ကိုတော့ weight ခုထည့်လိုက်သလိုမျိုးလေမသိမသာလေးပါတယ် လေးပဲထည့်ကြတော့တယ်.ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမျက်တောင်. မျက်တောင်ကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ကောကြတယ်.မျက်တောင်ကော့ကောလေးတွေနဲ့ eye shadow လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော. ဟုတ်.ညီမလေးပွဲပွဲမှာပိုအဆင်ပြေလား. သူကြိုက်နေတာကျွန်တော. အားရပါးရကျွေး. ပြည့်တယ်လေ.အဲ့ဒါသူက မှန်တော့ဝိလည်းအဲဒီလိုပဲ.ဒီမှာနည်းနည်းဘာညာလက်ကမဆန့်တော့လို့. ဪဟုတ်. မဟုတ်ရင် လည်းအဲဒီလိုပဲ.လှန်ပြီးတော့ဆိုးရတာ. ဟုတ်.ဟုတ်. အရမ်းပျံ့သွားမှာစိုးလို့. ကျွန်တောတို့ကြည့်ရတာအကုန်လုံးပြေပြင်တာက step တွေကအဆင်ပြေတယ်ကွာ.ဒီစင်္ကြာတောမှာအကုန်လုံးကအားရပါးရကြီးတွေဖြစ်ကုန်လို့. ဟုတ်ပ. ရုံးကပြီးသွားပြီလား. မဆွဲရဲဘူး. အာ liner မဆွဲဘူးလား. ဪ. မအိပ်ရဲလို့. ဪ. ပုံမှန်ဆိုရင်ရောဆွဲနေကြမဟုတ်ဘူးလား.ယွန်းက. အင်း.အဲဒီနေရာကလှိုင်သာယာကိုမဆိုးဖြစ်ဘူး. ဪမဆိုးဖြစ်ဘူး. ဟိုဒီအပေါနားလေးပဲအဲဒီလိုလေးပဲဆွဲဖြစ်တယ်. ဟုတ်.အောက်ထဲ. ပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးမဆွဲရဲတာတို့.ယွန်းတို့လိုလူမျိုးကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.မျက်လုံးလေးတွေပေါ့. အမ်းအမ်း.ဘယ်လိုပြောရမလဲ. Liner မဆွဲရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှလေ. Eye shadow အမှုန့်လေးတွေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးတစ်စောင်းစာလောက်တွေပေါ့နော.အဲဒီလိုမျိုးလေးသုံး. Liner ပုံစံလေးသုံးလည်း မသုံးခင်လည်းရပါတယ်.အခုခေတ်က liner ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းကေ သိပ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော. မျက်တောင်ကော့မယ်.မျက်တောင်ကော့စက်လေးနဲ့သေချာကော့မယ်. ညှပ်မိရုံပဲနော.ကျွန်တောဖြည်းဖြည်းညှပ်မယ်. .သတိထားနော. ကျွန်တောတို့အရေးကြီးတာပဲနော. ဟုတ်. Mascara ကလည်းအရေးကြီးတယ်.အပေါရောအောက်ရောပေါ့နော. Off လေးပါပါးပါးလေးဆို. ဟုတ်.အောက်ကိုပါ.ပါးပါးလေး. Mascara ကတော့သူဆိုးတယ်. အာ mascara ကတော့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အသက်ပေါ့နော.အရမ်းကြိုက်ကြတယ်. Mascara အားလုံးလိုက်မှီတယ်ထင်တယ်နော. အားလုံးလိုက်မိကြလားညီမလေးတို့. အခုကြည့်ထားတာကတော့အကုန်လုံးကလေဝေးနဲ့ထပ်ချက်မကွာဘဲလိုက်ပစ်နေတာ. ဟုတ်ပ. ဝေးပဲ.ဝေးပဲနည်းနည်းပဲနောက်ကျနေတယ်. နောက်မကျပါဘူး. အဆင်ပြေပါတယ်.အိုကေ. ဒါဆိုရင် eye makeup လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ မီးကလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော.ဟုတ်. ဟုတ်.အရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုအာအရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုအာ feedback ပေးပါမယ်. အဲဒီညီမလေးကသူကကျတော့သူလည်းအဲဒီလိုပဲ.လိမ္မောရောင်သိပ်မပေါက်ဘူးပေါ့နော. Eye shadow ခြယ်ထားတာမှန်တယ်. ဒါပေမဲ့အရောင်လေးတော့နည်းနည်းလေးမှားနေတယ်.ခုနက week ပြောသလိုမျိုး brush မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလို အမှုန်လေးတွေနည်းနည်းရောသွားလို့ရှိရင်အရောင်လေးတွေရောတတ်တယ်.ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်. ပြီးရင်နော.ဒီမှာလေ.စိမ်းတဲ့နှင်း.စိမ်းတဲ့နှင်းက အယ်စိတ်နဲ့နေတယ်. Blending color blending ကလည်းအဆင်ပြေတယ်. အာ foundation လေးတော့နည်းနည်းလေးပါးတယ်ပေါ့နော.ပြီးတော့ကျတော့အာ blending ကိုဒီဘက်လေးဒီမျက်လုံးထောင့်လေးမှာပါနည်းနည်းလေး ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်.ဟုတ်. .ပြီးလို့ရှိရင်ညီမလေးသင်ဇာဦး သင်ဇာဦးကအယ်ညီမလေးသင်ဇာဦးက eye shadow အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းနေတယ်. သူကဒီဒီနားနဲ့အယ်မျက်မျက်ခုံးနဲ့ပေါ့နော.မျက်ခုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကနည်းနည်းလေးနီးတဲ့အခါကျတော့ အရောင်လေးကိုဒီထက်မကပိုပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ဆိုးလို့ရတယ်.ကျန်တာကတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်. ဟုတ်.ဟိုဘက်သွားရအောင်. .ပြီးရင်ဇွန်း. ယွန်းကတော့ယွန်းကအဆင်ပြေတယ်.ပါးယံတယ်. ပါးနီလေးကြိုဆွဲလိုက်တာပေါ့နော.ကြိုးလည်းရိုက်တာပေါ့.အဲ့ဒါစတိုင်မဟုတ်ပါဘူးလို့.ကြိုဆွဲမိတာ. ပြောပြလိုက်ပါဦး.ပရိသတ်ကြီးကို. အမ်.ကျန်တာကအဆင်ပြေတယ်.မျက်ခုံးမွှေးလည်းအဆင်ပြေတယ်. ပြီးတော့ color branding ကလည်းအရမ်းကောင်းတယ်.ပြီးတော့ liner လေးပါသွားလို့ရှိရင်တော့ perfect ပေါ့နော. ဟုတ်.အဆင်ပြေပါတယ်.ယွန်း. ဘားနီလေးကြိုးဆွဲထားလေလို့. ညီမလေး ညီမလေးပိုးမွှားမှုန်ကကျတော့အမ်သူလည်း eye shadow အရောင်လေးတောတောတော့နည်းတယ်.ဒါကင်မရာထဲမှာလား.ဘာလို့လဲတော့ဝီရီမသိဘူးပေါ့နော. ဒါပေမဲ့အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းတယ် အာ ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ. Eye shadow အရောင်လေးကို pop up ဖြစ်အောင်လို့ပိုပြီးတော့ထည့်လို့ရှိရင်တော့အရမ်းအဆင်ပြေမှာ. ဟုတ်.အယ်ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်.ဟုတ်.ပြီးတော့အေးချမ်းပိုင်. Agent file ကတော့ခုနကသူပြောတဲ့အရောင်အရောင်ရောသွားတယ်လို့.ခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်. ပြီးတော့တကယ်လို့ထပ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော.အရောင်လိမ္မောရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးမျက်လုံးတစ်ပြင်လုံးနီးပါးပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ထည့်ပြီးတော့ ထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်.ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေတယ်. Liner လေးဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးထွက်နေတယ်.ကျန်တာအဆင်ပြေတယ်. ဟုတ်. ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့အခု eye makeup လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော. အဲ့ဒီမိတ်ကပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုမျိုးမိတ်ကပ်တွေဆက်ပြီးတော့ချဲ့မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်. ခေတ်သစ်မှာဆန်းသစ်မှုတွေများစွာနဲ့ပရိသတ်ထံကိုရရှိလာမယ့် Happy Bank အရင့်နဲ့မတူဘဲ အခုနွယ်ကဘာတွေသိမှာလဲ. ဆီတွေပုဆိုးနဲ့ဒူချင်ပြုတ်.ဟာမိုက်တယ်. ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုခံစားနိုင်သလို ကျွန်တောတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖလှယ်ရင်း ဗဟုသုတတွေရရှိစေမယ့်အပြင်စိတ်လည်းပျောရွှင်စရာလေးပါ.သာမန်သာ .ဒါတွေဘယ်ကရမလဲ. ပရိသတ်တွေရယ်မောပျောရွှင်နိုင်မယ့်ပခန်းရဲ့ဟာသတွေလာဦးမှာနော. TV ရှေ့ကမခွာနဲ့. Final သုံးမှာ. ဒီလို စိတ်ဝင်စားဖွယ်များစွာကိုကြည့်ရှုခံစားရမယ့် Happy ကျွန်တောရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်.အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တောတို့ဒါနောက်ဆုံး step ကိုရောက်ပါပြီ.အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေထူးခြားပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်. ခုနကပြောသလိုပဲဝတ်ရည်တို့ရေဒါနောက်ဆုံး step ပေါ့နော.ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ အဆင့်ထဲမှာပါတယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်ရည်တို့ခုနကပါးနီလေးတွေပါးနီလေးကို အယ်ဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှဆိုးကြမယ်.ပါးနီကအရောင်လေးနည်းနည်းလေးနှုတ်ခမ်းနီကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးတောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော.သတိထားပြီးတော့ဆိုးရမယ်. Branding ကိုသေချာလုပ်ရမယ်.အဲ့ဒီတော့ we are အာယူလိုက်တယ်. ယူပြီးလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့ပဲ လက်လေးနဲ့ယူပြီးတော့မှမျက်နှာပေါမှာတင်လိုက်မယ်. ကိုယ်ရေလိုက်သလိုပြုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါလာတယ်.ဒီပါးမှုန့်လေး ပေါ့နော.အဲဒီပုံလေးမှာတင်မယ်.ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ခါတည်း spot ကလေးနဲ့ brand blending လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော.မဟုတ်လို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့ အာအရောင်ကကွက်သွားမှာတွေဘာတွေကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့ သမီးရေဒါဆိုဟိုမှာယွန်းကကွက်နေပြီထင်တယ်. ယွန်းပလိုင်းကြည့်ပါဦး. ရုံးကကြိုပြီးတင်ပေးလိုက်တော့လေ.သူအရောင်ကိုအမှန်ထွက်သွားတာ. မျက်နှာသစ်ဖို့အချိန်ပေးရမယ်. ရပါတယ်. Blend blend လုပ်လို့ရှိရင်အမ်းတို့တို့ပြီးတော့လုပ်သွားလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်. ရလားရော့. အဆင်ပြေရဲ့လားပြောလေ. နည်းနည်းတော့ခဲနေတယ်. နည်းနည်းတော့ခဲတယ်ဗျ.ဒါပေမဲ့လည်းချစ်စရာလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော. စတိုင်ပေါ့.ဒါစတိုင်ပစ်တိုင်အသစ်.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာယူစတိုင်အသစ်နဲ့စပါမယ်. မက်မွန်အသီးလေးလိုဖြစ်နေပြီ.မက်မွန်သီးကာလလိုဖြစ်နေပြီ. .ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်း အဲဒီလိုပဲ.တစ်ဖက်ချင်းစီလုပ်တဲ့ we are men ဟိုဟာကွက်တာတို့ဘာတို့ကြောက်လို့ပေါ့နော.အဲဒီတော့ဒီဘက်ကိုလည်းလုပ်မယ်. ပါးနီကလေဟိုအမျိုးမျိုးခြယ်လို့ရတယ်သိလား. အခုဒီနားလေးမှာခြယ်ကြတယ်.တချို့ကကျတော့ဒီမျက်လုံးကာလာလေးနဲ့စပ်စပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးတွေမှာခြယ်ကြတယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအယ်ပိုးဝတ်မှုန်ခြယ်သလိုမျိုးဒီလိုအတန်းလိုက်တွေခြယ်ကြတယ်.ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့နော.ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆိုခြယ်လို့ရတယ်. သူကဒီနေ့အလုပ်ကကောဘယ်လိုကြက်ဥကိုထည့်လို့ရလဲ. ဟုတ်.ကြိုက်သလိုခြယ်လို့ရတယ်.ဒီနေ့လုပ်တာလည်း ညီမလေးပေါအဝတ်မဟုတ်ဘူး.အထူချယ်ထားတာမျိုးဆိုတော့အလယ်နားလေး. ဟုတ်တယ်.သူအလယ်လေး.ဒီလိုလေးဖြတ်ပြီးတော့တချို့ဆိုနှာခေါင်းလေးတွေပါဖြတ်ချယ်. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒါလည်းအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် လူငယ်လည်းအရမ်းဆန်တယ်. .ဆိုတော့ပါးနီတို့ဘာတို့လည်းခြယ်လာကြတယ်နော. .အဲ့ဒီတော့ပါးနီချယ်ရီကျတော့ကျွန်တောတို့ ဘယ်လိုမျိုးအယ်ကိုယ့်မျက်နှာကျပေါမူတည်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလိုက်ဖက်မှုရှိလဲ. ဟုတ်.ပန်းတွေကတော့အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်.မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံသေလည်းရှိတယ်.ဒါပေမဲ့အယ်အခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိပ် ဟိုဘောင်နဲ့ဆေးနဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော.အခုခေတ်ကကျတော့အဓိကဖက်ရှင်ခေတ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ.ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်လိုက်ဖက်မယ့်အလုပ်ကလေးတွေကိုခြယ်ကြတာများတယ်. Rose မရှိဘူးပေါ့နော. Music ရယ်လို့တော့ထွက်မတတ်တော့မရှိဘူး. အာဒီနေ့လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တောတို့အယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေနဲ့ပိုပြီးတော့လိုက်တာပေါ့နော. လေးတွေကလည်းနည်းနည်းတောက်တောက်ကလေးသုံးတာ. ဟုတ်တယ်. ဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေး. ပြီးရင်တော့ဝတ်ရည်တို့အာဒီ BB လည်းသုံးထားတယ်ဆိုတော့မေဦးတို့လိမ်းထားတဲ့မိတ်ကပ်လေးတွေကိုကြာရှည်ခံအောင်လို့အာဒီ loose powder လေးနဲ့ set လုပ်ကြမယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအာ two way ပေါ့နော.တချို့ကကျတော့လည်း comfort powder သုံးကြတယ်ပေါ့. ဒါကတော့ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်. We ကတော့ loose powder လေးသုံးပေးပါမယ်ရှင်. .အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောဒီနေ့ဒီ မိတ်ကပ် look ပါ. ဟုတ်. အယ်ပြင်ဆင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလည်းဟို step တွေအများကြီးကျွန်တောတို့သုံးစရာမလိုဘူးနော.ဒီနေ့ဆိုအများကြီးလည်း cosmetic ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးမလိုဘူး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒီမှာကျွန်တောတို့ moisturizer ကနေစပြီးတော့လိမ်းလာတာဆိုတော့အခုဆိုနှုတ်ခမ်းနီလေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းကျွန်တောတို့သုံးမျိုးလောက်ခြယ်တာဆိုတော့လေ. ဟုတ်. ဟုတ်. Step တွေလည်းအများကြီးမှတ်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.အများကြီးမှတ်စရာမလိုဘူး.ပြီးတော့ဒါက အာအဓိကကတော့ခရီးသွားရင်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ပိုးထင်တယ်.ဒီလိမ္မောရောင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော. ဘယ်လိုအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီနည်းလမ်းလေးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရောင်လေးတွေလည်းခြယ်လို့ရတယ်. ဒါပေမဲ့လိမ္မောရောင်ကျတော့လည်းခုနကပြောခဲ့သလို ကြားမှာတွေ party သွားတာတို့သိတယ်မလား. Festival သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေကျတော့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်တောအခုနောက်ပိုင်းက တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီလို color လေးတွေနော.အဲဒီလိုမျိုး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ခြယ်ထားကြတယ်. Color အရမ်းသုံးကြတယ်အခုခေတ်ကလေ. .ပြီးရင်နှာခေါင်းလေးဖောမယ်.နှာခေါင်းကတော့ we are browser လေးအသုံးပြုပြီးတော့နှာခေါင်းလေးဖောမယ်. မေးရိုးလေးနည်းနည်းချမယ်ပေါ့နော. We နှာခေါင်းကမဖောထားရင်နှာခေါင်းပျောက်နေလို့လေ. ဝေရဲ့ အဝေးရဲ့အသက်ကောင်ပေါ့နော. ရဲ့အသက်ကတော့နှာခေါင်းပါ. ယွန်းရဲ့အသက်ကရော. ယွန်းရဲ့အသက်ကရော. ဝမ်းဆက်လည်းခြောက်နှစ်. နှစ်ထောင်နှစ်နှစ်ကြီးနေလို့ပြီးအောင်လို့ပါ. မကြီးပါဘူးရော့. မကြီးပါဘူးလို့ထင်လို့ပါ. ဒါပေမဲ့ ယွန်းရဲ့အသက်ကကျွန်တောထင်တယ်. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရော.အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး.ကိုယ့်ရဲ့အားသွင်းအားနည်းချက်အားသာချက်တော့ရှိမှာပေါ့နော.မိန်းကလေးတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး.ဘယ်နေရာလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ပြင်ဖြစ်ကြလဲ. အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်ပြင်ပြီဆိုအဓိကထားပေးပါ. ဖြေပေးပါဦး. ဖြေပေးပါဦး. ဟုတ်.အဓိကကတော့မျက်လုံးပေါ့နော. မျက်လုံးလား.ညီမလေးက.မျက်လုံးကအယ် eye shadow ထိအောင်ပေါမူတည်ပြီးတော့မျက်နှာရဲ့ အမ်ပိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော. အင်း.ပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတာပေါ့နော.မျက်လုံးပေါမှာပဲတွေ့တယ်. ဟုတ်တယ်.မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လောက်ပဲလှနေလှနေပေါ့နော.ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုမကျကြဘူး.တစ်ခုခုကိုတော့လိုနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်. ပြီးရင်ပါးရိုးလေးချမယ်. ဒီမေးရိုးကားကလေမေးရိုးကဝေးတဲ့ဒီလိုမျိုး v shape လေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော.ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနားကနေစပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေး v shape လေးဖြစ်အောင်လို့မေးရိုးလေးနည်းနည်းချမယ်. မျက်နှာရှိန်လေးပိုပေါတာပေါ့. ဟုတ်.မျက်နှာ shape လေးပိုပေါသွားအောင်လို့. အားလုံးလိုက်မိလားရှင်. .ဒါပြီးရင်တော့ဝင်းပြောသလိုမျိုးဟို party တွေဘာတွေမသွားကြနဲ့နော. မုဒေ on ပြီးတော့ကျွန်တောတို့ မရတော့ဘူး.လျှော့လို့မရတော့ဘူးတဲ့.အကုန်လုံးက. အပြည့်တွေလိုက်ဝတ်ထားပြီးသားဆိုတော့. သွားရင်လည်းခေါဦးလို့ပြောမလို့ပါ.တို့ဘာတို့ .ဒါဆိုရင် အားလုံးလိုက်မိပါတယ်နော.အဆင်ပြေရဲ့လားရှင့်. ပြေပါတယ်ရှင့်. နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ. နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့နှုတ်ခမ်းနီပေါ့နော. နှုတ်ခမ်းနီဆိုးမယ်.နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်မှာ week က foundation လေးနဲ့ဒီ BV လေးနဲ့ပေါ့နော. Baby လေးနဲ့ပဲ အာနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်အောင်ဒီနားလေးတွေကိုပို့လိုက်မယ်.အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့အရောင်လေးကလည်းအရောင်ထွက်အားကောင်းမယ်. ပေါ့နော. ဟုတ်.ကျွန်တောတို့နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းလေးမှာအရင်တင်ပေးရမှာ. ဟုတ်.နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားအရောင်နဲ့ ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ခမ်းနီတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော. အောဟုတ်.အဲ့ဒီတော့ဝေတို့ကအရင်ဆုံး အရင်လုပ်လိုက်မယ်. အရောင်မှန်အောင်ပေါ့. ဟုတ်.အရောင်လေးမှန်သွားအောင်ပေါ့. Confirm လုပ်ပြီးတော့မှအဓိကဇာတ်လိုက်ကြီးကိုဆိုးကြမယ်. လိမ္မောရောင်ပေါ့နော. နန်းလိမ္မောရောင်နှုတ်ခမ်းနီ. ဟုတ်. .နှုတ်ခမ်းနီကလေ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆိုလို့ရတယ်သိလား.တချို့ကကျတော့လည်းသင့်လိုမျိုးလေးဆိုးကြတယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအပြည့်ဆိုးကြတယ်. ကိုယ်ကြိုက်သလိုကိုယ်ပေါလို့. ဟုတ်.ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆိုတာပေါ့နော. အခုနောက်ပိုင်းတော့သင့်ပုံစံလေးတွေဆိုတာပိုများတယ်နော. ဟုတ်တယ်. ဒီနားလေးကိုဦးနည်းနည်းလေးပြန်ဖြည့်ပေးမယ်.အရမ်းအပြည့်ကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ဝေးပစ်နေကြအဲဒီလို look လေးတွေကျွန်တောတို့အမြဲတမ်း တွေ့ဖြစ်တယ်.ဒီလိုမျိုးနောက်မီးကအဲဒီလိုမျိုး orange fancy အဲ first orange makeup look လေးတွေတောတောလေးကြိုက်စရာလား.အဲဒီလိုမျိုးနော. ဟုတ်. ဆံပင်ကာလာလေးတွေဆိုးထားတာတွေကိုပိုပြီးတော့ဒီဒီ look နဲ့ပိုလိုက်သလိုပဲနော. ဟုတ်တယ်. ဆံပင်ကာလာလေးတွေဆိုးထားရင်တော့ပိုပြီးကြွတာပေါ့နော.အရမ်းကို party mood လေးဖြစ်နေပြီ.အရမ်းမရတော့ဘူး. သူတို့တွေ ယွန်းအဆိုးဆုံးလို့ပါ. အခုအမှန်ခုနကလိုပါးနီလေးဒီလိုမျိုးလေးခြယ်ထားတာလေးကပိုတောင်မှမိုက်သေးတယ်နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ချင်တယ်. နော. တစ်ခြစ်ပဲသိလား. အချစ်ပဲ. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေတော့အဆင်ပြေလားရှင်. ပြေတယ်နော.ဟာမြန်တယ်ဟ.အားလုံးက. ကဲဦးရေ.အယ်ကျွန်တောတို့ အခု အခုဒီနေ့ပြင်တဲ့မိတ်ကပ် look လေးကလေ. ကျွန်တောတို့ဒါလူငယ်ဆန်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့လိုက်တယ်. Weight ဆိုလည်းအရမ်းနော. We week ကိုတွေ့နေကျဒါကတော့ ဟုတ်တယ်.ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလိမ္မောရောင်ကိုအသားပေးပြီးခြယ်တဲ့ဟာမျိုးသူတို့ အာဒါ first time ထင်တယ်ကျွန်တောထားတာနော. ဟုတ်. အယ်သိပ်ပြီးတော့မတွေ့ ဟုတ်. ဟိုဝင်းအနေနဲ့ကြည့်ရတာလည်းလေ.သူတို့ကအင်္ကျီလေးတွေကလည်းလိမ္မောရောင်လေးတွေနဲ့အပြည့်ပဲဝတ်ထားတယ်.မိတ်ကပ်လေးကလည်းအရမ်းကိုလိုက်ဖက်နေတယ်ဆိုတော့ လိမ္မောသီးလေးတွေတန်းစီထားသလိုပဲခံစားရတယ်. ဟုတ်တယ်.ကျွန်တောတို့ဒါ ဟိုညနေနီညိုရယ်လို့ရှိရင်နီညိုစူးစပ်အလှလေးပေါ့. ထင်စားလိုက်တာ. အိုကေ.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့သူတို့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေမေးကြည့်ရအောင်နော.ဟုတ်.ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနလို ဝိပြောသလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ book လေးတွေဖြစ်နေမလဲ. ဟုတ်.ဟုတ်.နောက် you ကစပြောပေးပါဦး. အာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ကျတာအမြဲတမ်းပြင်တော့မှာ.ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်တော့မှာအရမ်းကြိုက်သွားပြီ. ဒီဒီမိတ်ကပ် look ပဲ လိမ္မောရောင်ပဲ. လိမ္မောရောင်ဝတ်ဖို့တောပါတယ်.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာ အဲဒီတော့ယွန်းရောဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒါလိုက်ပြင်တာပေါ့နော.ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးကြည့်နေတာဆိုတော့ အာဒီနေ့ပြင်ရတဲ့ခံစားချက်ကကောဘယ်လိုရှိလဲ. ဘယ်လိုပြောမှာတုန်း.ရင်တွေခုန်တယ်.စောနကဆိုဒီလိုကြီးကိုင်တာတုန်နေတယ်. သီချင်းဆိုတာထက်လည်းမကျောဘူးပေါ့နော.ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တောတို့မိတ်ကပ်ပြင်ပြီးတော့ရင်ခုန်ရတာ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ကျွန်တောတို့ကျေးဇူးပါ.ကျွန်တောတို့နောက်ထပ်ညီမလေးစိမ်းလဲ့လေးကိုဝင်ကြည့်မယ်နော. ဟုတ်. ဒီ look လေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်.မဝင်းနဲ့တူတူပြင်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်. BCC မှာပါဝင်ပေး ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်. ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး.အဲဒီတော့ဒီနေ့ပြင်ပြီးသွားတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ. အင်း.အရမ်းလှနေတယ်. အရမ်းလှနေတယ်.ဟုတ်တယ်.အရမ်းလှပါတယ်ညီမလေး.ဆံပင်လေးနဲ့လည်းလိုက်တာလေ. ဟုတ်တယ်.ပြီးတော့ဒီနေ့ပြင်ဆင်တာအကုန်လုံးကအဆင်ပြေကြတယ်. ဟုတ်.အကုန်လုံးနဲ့လိုက်တယ်.အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်ကိုလည်းမေးကြည့်ချင်ပါတယ်. ဟာဒီအရောင်ကလေပြင်နေကျမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်မျိုးဆန်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်. ဟိုမိတ်ကပ်တွေဖျက်ပြီးတော့အိပ်လိုက်ရမှာတောင်နှမြောတယ်.ဘယ်သွားရမလဲ. အင်းအင်း. ပျောစရာကြီးနော.အဲ့ဒီလိုမျိုးကြားတာအားရတယ်. ဒီနေ့မျက်နှာမသစ်တော့ဘူးတဲ့. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့ပြီးရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ထားတာနော.ဆရာကြီး. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကနည်းလမ်းလေးတွေသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တောတို့နောက်နေ့တွေပြင်လို့ရပြီ.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာကျွန်တောတို့ခေါကြမယ်.အဲ့ဒီတော့ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအကုန်အဆင်ပြေတယ်နော.ဝေးလည်း ဒီဟာခြောက်ယောက်လုံးကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ. အာဝေခုနကပြောသလိုပေါ့. ခုနကပြော ဟုတ်.ပြီးတော့အကုန်လုံးကအရမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့လေ live တင်တာလေ.ဝီက တကယ်လည်းအံ့သြတယ်.ဟိုတစ်ခုခုဆိုတာနဲ့တစ်ခုခုတန်းလုပ်ပေးပြီးသားပဲ.ဝိတိုတောင်နည်းနည်းပြန်စောင့်နေရသလိုပဲ.အရမ်းတောတယ်.အရမ်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော.ဝင် ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.ယွန်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့အားတက်သရောနော.အားလုံးပါဝင်ပေးကြတာ.အားလုံးအရမ်းလှကြပါတယ်.ကျေးဇူးပါ. ဟုတ်ပြီး.ကျွန်တောတို့ဒီကနေ့ကတော့ညီမငယ်လေးတွေနဲ့ပြင်တာကတော့အရမ်းအဆင်ပြေတယ်နော.ကျွန်တောတို့ကြည့်ပြီးတော့လည်း အကုန်လုံးချစ်စရာလေးတွေခုနကဝူးပြောသလိုပဲ.လိမ္မောသီးလေးတွေလို အခုတီဗီကနေပြီးတော့ကျွန်တောတို့အစီအစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြင်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါနော.ဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကိုရောကျွန်တောတို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ သိချင်တာလေးတွေရှိလား. ဟုတ်.ရှိတာပေါ့.အခု week ဒီ program ပြီးသွားပြီ.ဒီအစီအစဉ်လေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော.ဝတ်ရည်တို့ရဲ့ syndrome network မြန်မာ group ရှိတယ်. Facebook မှာ.အဲ့ဒီမှာ post ရှိပါမယ်.အဲ့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော. Live တင်ပြီးသားလေးတွေကို comment လေး photo comment လေးတွေပေးပေးပါ.ဝီကလည်းအဲ့ဒီမှာ feedback လေးတွေပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တောတို့ comment လေးတွေပေးပါဦးနော. အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဝေထပ်မံပြီးတော့အာဒီနေ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ထပ်မံပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဟုတ်.အဝေးကလည်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်. ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဝိနည်းနဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ special guest ရိုးရာကျေးဇူးပါ. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအားလုံးကျေးဇူးပါနော.ကျွန်တောဒီကနေ့မှာအားလုံးအတူတူပါဝင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ကျွန်တောတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တောတို့ အာတစ်ဆယ့်သုံးပတ်မြောက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ.ကျွန်တောတို့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်.အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တောတို့ အနေနဲ့ပါဝင်မယ့်သူကတော့ကျွန်တောတို့ရဲ့ blogger လမ်းမ ဖြစ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ.အဲဒီတော့ Juventus ကနောက်ဆုံးရေမှာဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ တွေနဲ့တင်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုဆက်စပ်စောင့်မျှောကြည့်ရှုဖို့လည်းပြောကြားရင်းနဲ့ ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်.အားလုံးပဲသာယာပျောရွှင်တဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေ. တာ့တာပါခင်ဗျာ.အားလုံးတာ့တာပါ. ကိုယ်ကာရီအတွက် iron page မှာ main sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်.">
ကိုယ်ကာတွေအတွက်အာရုံပြည့်ချိုရည်မှ main sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်. .ဇန်နဝါရီလနောက်ရက်မြန်မာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ. ပျိုမေတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖောခွင့်ရမယ်.ကျွန်တောတို့ရဲ့ အပတ်တစ်ဆယ့်သုံးမြောက်တင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ.ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့အစီအစဉ်ကတော့အလှတရားကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ပျိုမေတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုလေးစနစ်ကျကျနဲ့ကိုယ်တိုင်ပုံဖောနိုင်စေဖို့အတွက် စီနီယာဆင်တွဲလောင်းတွေနဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်.စီနီယာစင်ထွန်းသားတွေဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီး beauty blogger နဲ့ professional makeup artist တွေကနေပြီးတော့ အပတ်စဉ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးခြောက်ဦးကိုခေတ်ကာလနဲ့လိုက်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရေပန်းစားတဲ့မိတ်ကပ်လိမ်း ခြယ်မှုတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ. မှာတော့ဘောကာတွေအတွက်အာရုံဖြည့်အချိုရည်ကနေ အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ MNTV ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ MNTV channel Facebook page တွေကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. အေကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်လိုက်ပါလိမ်းချိန်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်း အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်. ဒီနေ့ညမှာ senior center အနေနဲ့သင်ပြပေးသွားမယ့် professional makeup artist give ကိုဖိတ်ခေါလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ. ဒီနေ့ညရဲ့စီနီယာရဲ့ဆင်တွဲလကတော့နာမည်ကျော celebrity တွေရဲ့ လက်စွဲတောမိတ်ကပ် artist တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တောတို့အမြဲတမ်းဆန်းသစ်တဲ့မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှုတွေကို အမြဲတမ်းဖန်တီးနေတဲ့မိတ်ကပ် artist grewye ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. မင်္ဂလာပါ. ဟုတ်.မင်္ဂလာပါအစ်ကို. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့အဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပြန်ပြီ.အဝေးရဲ့မိတ်ကပ် look ကျွန်တောတို့လေအမြဲတမ်းလန်းဆန်းပြီးတော့အမြဲတမ်း create ဖြစ်နေတာပေါ့နော. ဟုတ်. အဲဒီတော့အမြဲတမ်းတွေ့ရပါတယ်.အဲဒီတော့ဒီကနေ့ကရော ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမှုလေးတွေတွေ့တာလဲ. ဟုတ်.ဒီနေ့တော့ဝေးကပေါ့နော.အောလူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတယ်.ပြင်ရတာလည်းလွယ်တယ်. အာ fancy online makeup look လေးတွေပြင်ပြဖို့ပေါ့နော.အဲဒါစီစဉ်ထားပါတယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ဝိတ်အမြဲတမ်းပြင်နေကျတွေထဲကကျွန်တောတို့ဒါလူကြိုက်များတဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ဘယ်လိုမျိုးအဲ မျိုးတွေကျလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ကပ်လွတ်ကလေးကပြင်ဖို့အတွက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်. ဟုတ်.ဝင်းအနေနဲ့ပေါ့နော.ဒီ fancy allange makeup look ကကျတော့ အာ party သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် festival သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သင်္ကြန်ပေါ့နော. အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်း pop up ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ရမယ်လို့နီနီထင်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့လူငယ်ဆန်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲလမ်းအပြင်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေကျလို့ရှိရင်နော.အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်း ကလေးတွေအရမ်းခေတ်စားလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော.ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ TV ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တောတို့နဲ့အတူတူအယ် လိုက်ပါပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တောတို့ဖိတ်ခေါပါတယ်.အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဝင်းနဲ့အတူတူအာ ဟုတ်ကဲ့. အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမလေးကို. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့. ပြီးရင်တော့အားလုံးလည်းလူငယ်လေးတွေနော်. အခုဒီနေ့ပြင်မယ့်ခလုတ်လေးလည်းအားလုံးလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဝေ. ဟုတ်တယ်. ဟုတ်. အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတူတူပြင်ဆင်ကြမယ့်ညီမငယ်လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အဲဒီတော့ ပထမဦးဆုံးကျွန်မငယ်လေးတစ်ဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ. မင်္ဂလာပါရှင်.ညီမစန္ဒာအောင်ပါ.ရန်ကုန်မြို့ပြည့်ဝတဲ့ချောင်ကြိုပါရှင့်.အသက်ကနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပါ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးစန္ဒာပါ.တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.နောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ညီမနာမည်ကတော့စိမ်းသိမ့်ဖြူပါ.အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပါ.တောင်ဥက္ကလာပနော. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးစိမ်းလဲ့မေရေ.တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.ကျွန်တောတို့နောက်ထပ် ညီမလေးတစ်ဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်.ညီမနာမည်ကတော့သဉ္ဇာဦးပါရှင့်. အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ပါ.မရမ်းကုန်းမှာနေပါတယ်ရှင့်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးတင်ဇာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.ကျွန်တောတို့နဲ့အတူတူမိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မယ့်နောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ကျွန်မနာမည်ကပိုးဝင်းမုန်ဖြစ်ပါတယ်.ညီမအသံမစခင်. ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်.ဟုတ်.အားလုံးမင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးမင်္ဂလာပါ.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောနောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ညီမနာမည်ကတော့အေးချမ်းပိုင်ပါ. အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ရှိပါပြီ.ဒဂုံမြို့နယ်ကပါ.ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အစ်ကိုတို့ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်.ညီမလေးတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီကနေ့ညီမငယ်လေးတွေနဲ့အတူတူမိတ်ကပ်ပါဝင်လေ့ကျင့်မယ့် special guest တစ်ဦးကိုလည်းဖိတ်ခေါထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ. သူကတော့ ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့ဒါမြန်မာ idol season two မှာကတည်းကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ အဲကျွန်တောတို့အာအင်းပါသီချင်းတွေကိုပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့တေးသံရှင်ယွန်းဖြစ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ. ဂျိုးရေမင်္ဂလာပါ. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်. တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်နော.ယွန်းရေ.အခုတလောဘာတွေလုပ်နေလဲပြောပါဦး. ပရိသတ်တွေကိုပြောပြပါဦး. ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုဖိုးပြည့်နဲ့ပေါ့နော.သူ့ရဲ့စာအုပ်လေးတစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်. အဲဒီအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ယွန်းရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းကျွန်တော အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်နော.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးရောကြည့်ဖြစ်လား. ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.ရှေ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တောတို့တွေဒါ we နဲ့အတူတူတိုက်ရိုက်ပြင်ရမှာပေါ့နော.ပရိသတ်တွေအများကြီးကလည်းကြည့်နေမှာဆိုတော့အာစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်ထင်တယ် အယ်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်.ညီမမိတ်ကပ်ကိုအဲ့ဒီလို မသင်ဘူးကွာ.အခုဒီနေ့မြေးကလည်း သင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမအရမ်းပျောပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့. ဖိတ်ခေါပေးတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်. ဟုတ်ကဲ့ယွန်းရေနော.ယွန်းအတွက်တော့ဒါပထမဦးဆုံးအယ်တွေ့ရမှာပေါ့နော.ပြင်ရမှာပေါ့.ဆိုတော့ ဝေကရောဘယ်လိုခံစားရလဲ.ဒီနေ့ရုံးပါဝင်ပေးမှာဆိုတော့. အာဒီနေ့ယွန်းပါ.ယွန်းနဲ့ဝေနှင်းကလည်းအရင်ကတည်းကသိတယ်လေ.ဆိုတော့ ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးပိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့. ဒါကျွန်တောတို့ဒါညီမငယ်လေးတွေလည်းဒီနေ့ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပျောစရာကြီးနော. ဟုတ်. အတူတူပြင်ကြမယ်.ယွန်းယွန်းနော. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ဝေ ကျွန်တောတို့ပြင်ဆင်မယ့်မိတ်ကပ် look လေးကလည်းဒါပရိသတ်တွေ ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.ဖိတ်ခေါပါတယ်.ကျွန်တောတို့ပြည်သူတွေအတွက် ဟုတ်ကဲ့ပါ. ဟုတ်ကဲ့. ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါအစ်မ. ကဲအဲဒါဆိုရင်စတင်ချမယ်. ဗီဒီယို ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးစတင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် အာ အာမိတ်ကပ်မလိမ်းခင်မှာအရင်ဆုံး moisturizer လေးလိမ်းပါမယ်. Week ကဒီ က all in one moisturizer လေးလိမ်းမယ်ပေါ့နော်. ကျွန်တောတို့မိတ်ကပ် ပြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် sense အမ်ဒီ တို့ moisturizer တို့ကျွန်တောတို့ skin care step လေးတွေလည်းလိမ်းပေးသင့်တယ်နော. ဟုတ်ဟုတ်.အဲ့ဒါလေးတွေကလိမ်းပေးသင့်တယ်.ဘာလို့ဆိုတော့ moisturizer တို့ဘာတို့ကကျတော့ပေါ့နော.ဝတ်ရည်တို့ရဲ့အသားအရေမှာမညီမညာရှိတာတွေအမ်ပြီးတော့ ဟိုနေလောင်တာတွေဘာတွေပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းပိုပြီးတော့ cover ဖြစ်သွားအောင်လို့ moisturizer လေးသုံးပေးပါမယ်. Moisturizer လေးကိုအသားထဲကိုနည်းနည်းစိမ့်ဝင်အောင်လို့သေချာလေးလိမ်းပေးရမယ်ပေါ့နော. ဒီနေ့ကျွန်တောတို့ဒါ fancy orange makeup look လိမ်းမှာဆိုတော့တချို့ကလိမ္မောရောင်လေးတွေဝတ်ထားကြတယ်နော. အာဟုတ်ပ. အကုန်လုံးအဲ့ဒီတော့မှပိုပြီးတော့နော.အင်္ကျီလေးနဲ့. ဟုတ်တယ်. အမ်းလိုက်ကပ်သွားတာ. လိုက်ဖက်သွားမှာ. ကဲ moisturizer လေးလိမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကိုမိတ်ကပ် base တွေလိမ်းကြမယ်.မိတ်ကပ် base ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော.အာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်လေးတွေ အဲ့ဒီလိုမျိုးအသားအရေမညီတာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးညှိပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးတော့မှ foundation လေးတင်လိုက်တာဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့. ဟုတ်. အာဒီရဲ့ makeup base လေးလိမ်းပါမယ်ရှင့်. ဒါလေးပေါ့နော. ကျွန်တော foundation မလိမ်းခင်မိတ်ကပ် base အရင်လိမ်းတာပေါ့နော. ဟုတ်. ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တောတို့တွေဒါ foundation ကိုတန်းလိမ်းလိုက်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ဖူးတယ်. ဟုတ်. အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုမိတ်ကပ် ကိုခံလိမ်းတာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကွာခြားလဲ. အာမိတ်ကပ် base ခံလိမ်းတာက primer ခံလိမ်းတာကကျတော့လေ.သူကအဓိကကအသားအရေလေးကိုညှိပေးတယ်.ပြီးတော့ကျတော့ဆီတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိန်းပေးတာပေါ့နော. မိတ်ကပ်တန်းလိမ်းတာထက်စာလို့ရှိရင်. ဒီ steps တွေကနည်းနည်းပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်.ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကအသားထဲကိုစိမ့်ဝင်အောင်လို့လိမ်းပေးတာပေါ့နော. Foundation ကောင်းမှကျွန်တောတို့. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒီတော့တစ်နေကုန်ခံတာ.ဟုတ်. အခုနောက်ပိုင်းကလည်းကျွန်တောတို့မိတ်ကပ်ကိုလည်းအဲဒီလို create လုပ်ပြီးတော့လိမ်းလာကြသလို skin care ကိုလည်းအများကြီးဂရုစိုက်လာကြတယ်နော. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. Skin care ကတော့မလုပ်မဖြစ်ပေါ့နော. လုပ်ရမယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ skin skin ကောင်းတဲ့အခါကျတော့မှဝတ်ရည်တို့တွေကအမ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ကပ် look လေးကိုပြင်နိုင်တာပေါ့နော.အဲ့ဒီတော့ skin ကတော့အရေးကြီးတယ်. ရုံးရော skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလား.ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ. မလုပ်ဖြစ်ဘူးလား. ပျင်းတယ်. အများကြီးပဲ. နင်သေချာသင်ပေးရတော့မယ်. ဟုတ်ပ. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရော. ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ. ကျန်တဲ့သူတွေကလုပ်တယ်ထင်တယ်. ကျန်တဲ့သူတွေကလုပ်တာ. လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. လုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့. ရူးမဲတင်းနေတာထင်တယ်. ကဲမိတ်ကပ် ရပြီဆိုလို့ရှိရင် BB cream လေးလိမ်းမယ်.ဒီနေ့ဒီဟာကဒီ BB cream လေးလိမ်းမယ်ပေါ့နော.ပါးပါးလေးပဲလိမ်းကြမယ်. Baby cream ကို ကကျတော့လက်ပေါလေးမှာတင်တယ်.ပြီးလို့ရှိရင်မှမျက်နှာပေါတင်တယ်. Foundation ကိုဝင်းအမြဲတမ်းပြောနေကျအတိုင်းပဲ. ဟိုတစ်စက်ချင်းစီချတာထက်ပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုး မျက်နှာပေါမှာအများကြီးချလိုက်တဲ့ဥစ္စာပိုပြီးတော့ blend လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်. ဆိုရင်မျက်တွင်းအောက်ကနေစပြီးတော့လိမ်းတယ်. ဒီမျက်တွင်းအောက်ကနေစပြီးတော့မှနေရာလေးချလိုက်တယ်.ပြီးလို့ရှိရင်မှ brush လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် sponge လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ blend လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော. ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့နော. ဟုတ်.ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့. ဒီနေ့ကတော့လူငယ်ဆန်ဆန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ BB cream လေးနဲ့ပဲဝတ်ရည်တို့တွေပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့. Baby cream တွေများသွားတာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်ဆမတတ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရော ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲ. ဟုတ်. Baby cream ကများသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဖြူဝဲဘက်သွားတော့လေ နည်းနည်းပြာသွားတတ်တယ်ပေါ့နော.အဲ့ဒီတော့တကယ်လို့မျက်နှာပေါမှာတင်တာများသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတ်ရည်တို့ဒီ sponge လေးနဲ့အာ မသိပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော.ဆွဲဖယ်လိုက်တာ.ဟုတ်.မျက်မျက်နှာပေါကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွဲဖယ်လိုက်တယ်. စယူကတည်းကတော့ကျွန်တောတို့သေချာလေးချိန်ဆပြီးရွေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော. ဟုတ်ဟုတ်. ပိုးလို့ရှိရင်ပြီးတော့လည်ပင်းမှာလိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့.ဟုတ်. လည် လည်ပင်းကလည်းလိမ်းရမှာပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့.လည်ပင်းလည်းဒါတချို့ကတော့တစ်ခါတည်းအသားရောင်မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းနဲ့ညီအောင်တစ်ခါတည်းလိမ်းကြတယ်. ဟုတ်. တချို့ကကျတော့လည်းအဲဒီလိုမျိုးမညီတဲ့သူတွေကျတော့လည်ပင်းက လေးလည်းသတိထားပြီးလိမ်းဖြစ်တာပေါ့. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. လည်ပင်းကတချို့ကကျတော့လေလည်ပင်းကပိုးဖြူနေတယ်. ဟုတ်. မျက်နှာလေးက အဲဒီတော့လည်ပင်းရောမျက်နှာရောတစ်ခါတည်းအရောင်တူအောင်လို့လိမ်းလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော. ကဲအားလုံးမှီကြရဲ့လားရှင်.ဟာလက်တွေနဲ့ပဲချလေ.ကောင်းတယ်.မွေးနိုင်သလိုပဲ. ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဟိုလိမ်းတာနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုကွာတာလဲ. ဟုတ်.လက်နဲ့လိမ်းတာလည်းသူကလက်ရဲ့အနွေးဓာတ်လေးပေါ့နော.လက်ရဲ့ဒီလိုအနွေးဓာတ်လေးကနေပြီးတော့ လိမ်းလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့တော့အသားထဲစိမ့်ဝင်တယ်.ဒါပေမဲ့ကြာလို့ဝီကအဲ့ဒါသိပ်စိတ်မရှည်ဘူးဆိုမဆွဲတတ်ဘူး. အချိန်တော့နည်းနည်းလေးပိုပေးရတယ်.ဒါပေမဲ့လက်နဲ့လိမ်းလည်းကောင်းတယ်. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလိုလိမ်းတဲ့နည်းစနစ်တွေတော့မတူကြဘူးပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ညီမလေးတွေလည်းပြင်နေရင်းနဲ့ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်မေးလို့ရတယ်နော. တစ်ခါတည်းမေးတယ်. ကိုကြီးကိုမေးပါနော. ဒီနေ့ကျွန်တောတို့ဆုံဖို့ကမလွယ်ဘူးလေနော. နင့်ကိုအားမနာပါနဲ့.မကြောက်ကြပါနဲ့နော.ပေါ့ပေါ့ပါးပါး. အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင်လို့လိမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ ဒီနားလေးတွေမှာနည်းနည်း ဟိုဝက်ခြံလေးတွေ,မျက်ကွင်းညိုတာလေးတွေ,ဖုံးဖို့အတွက်ဒီ concealer လေးသုံးမယ်ပေါ့နော. Concept လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပဲယူသုံးမယ်.အယ်ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့.လက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်စေ.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် brush လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော.ကိုယ်လိုသလောက်တွေ.ပြီးကျတော့နည်းနည်းလေးယူမယ်. ယူပြီးရင်မျက်တွင်းအောက်ညိုတာလေးတွေလည်းနည်းနည်းဖြည့်မယ်. အားလုံးမှီကြရဲ့လားရှင့်. အားလုံးကဝင်ပြင်နေကျထင်တယ်.အဲဒီလိုဆိုတော့. ဟာလက်အရမ်းမြန်တယ်နော. ဟုတ်တယ်. အနီးနောက်ကနေ ထက်ထက်မကွာလိုက်နိုင်တာ. ဟုတ်ပ. ကဲမျက်တွင်းလေးတွေလေ.နည်းနည်းညိုတဲ့နေရာလေးတွေဖုံးမယ်. ပြီးရင်ဒီမေးစေ့နားလေးတွေပိုပြီးတော့မေးစေ့ချွန်သင်းရောင်လေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော. Lighting လေးပေးလိုက်တဲ့သဘော.အဲဒါနှာခေါင်းလေးတွေ. ပြီးရင်နဖူးပေါရယ်.ပြီးတော့မျက်လုံးပေါကိုလည်း တာဖြစ်ဖြစ် eye primer ဖြစ်ဖြစ်လိမ်းဖို့မမေ့နဲ့နော.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်ရည်တို့တွေ eye shadow ခြယ်တဲ့ အခါကျလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုပြောရမလဲ.အရောင်ထွက်အားပိုကောင်းတာပေါ့နော.မဟုတ်လို့ရှိရင်က ကိုယ်ခြယ်ထားတဲ့ eye shadow တွေကအရောင်သိပ်မထွက်မှာစိုးလို့. အရောင်သိပ်မထွက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ ဟုတ်.ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူး.သနားလို့ဖြစ်မှာပေါ့. ဒီနေ့ကကျတော့ လေးတွေ ချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တောတို့ color လေးတွေတောက်နေဖို့လိုတာပေါ့. ဟုတ်တယ်. ကဲပြီးရင်တော့ brush လေးနဲ့ လေးနဲ့မီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်. .အားလုံးညှိတယ်နော. ညီမလေးဒီဟာအကုန်ပြင်နေကျထင်တယ်. ဟုတ်တယ်. ရုံးကလည်းသူ သူပြင်တတ်တယ်နော.သူမပြင်ဖူးတာပြောတာ. မပြင်ဖူးဘူးဆိုတာလျှောက်ပြောတာတဲ့. အရမ်းမပြင်တတ်ဘူး. အရမ်းတော့မတတ်ဘူး. အခု week ပြောတဲ့ step တွေအတိုင်းအိမ်မှာပြင်နေကြလား. မဟုတ်ဘူး. အခုမှပြင်တာပဲ.ပြင်းလို့ပဲ. နောက်ကျနေတာ.မှန်တော့ လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ.ပြီးရင်အနီးကပ်မှန်လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော.မီးကိုခဏစောင့်ပါနော. ညီမလေးပိုးဝင်းမဟုတ်ဘူး.ပိုအဆင်ပြေလား.ပြေတယ်နောညီမလေး. တစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်နှစ် ကဲဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီရှင်. ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တောတို့ဒါ မိတ်ကပ်လုပ်တဲ့ပထမဦးဆုံး step လေးတော့ပြီးသွားပါပြီ.ကျွန်တောနောက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ step တွေရှိပါသေးတယ်.တီဗွီရှေ့ကနေမခွာဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော. ဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Thilawa Onlight One Star အချိန်ခဏလေးပေးရုံနဲ့နူးညံ့စိုပြေရေဓာတ်ပြည့်ဝစေတဲ့အသားအရေလေးကိုရမှာပါ. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်နိုင်ငံကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအနေနဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဂျပန်မြန်မာပွဲတော. ဒီနေ့မှာတော့ ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီရေးစပ်မှုပုံစံအသစ်နဲ့ရောက်ရှိလာမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခု. မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကျန်းမာပျောရွှင်စေဖို့ရည်ရွယ်တင်ဆက်တဲ့သတ္တမအကြိမ်မြောက်ဂျပန်မြန်မာပွဲတောကြီးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျောအဆိုတောတွေဖြစ်ကြတဲ့သီလဟာရကနဲ့မိုဒီဆာကီဝင်း. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ကြတဲ့စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နီနီခင်ဇော X box မင်းလှသံစဉ်တို့ရဲ့ဖျောဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ Covening ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန်အတွက်လှူဒါန်းမှုတွေကိုတစ်ပါတည်းပြုလုပ်နိုင်မယ့် Charity online show ဖေဖောဝါရီလတစ်ဆယ့်လေးရက်နေ့မှာ MNTV Channel နဲ့ အခြား social media platform များကနေတိုက်ရိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်. We နဲ့အတူရောကျွန်တောတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ fancy orange wait card လို့ပြင်ဆင်ဖို့လေးကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ. ဒါဆိုရင်ဝင်းတို့ကအခု foundation တွေပြီးသွားပြီ. ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲကြမယ်.မျက်ခုံးမွှေးကိုမျက်ခုံးမွှေးမဆွဲခင် အာဒီလို brush လေးနဲ့ပေါ့နော.ဒီ လေးနဲ့အရင်ဆုံးမျက်ခုံးမွှေးကိုခြစ်လိုက်မယ်.အဲ့ဒါမှဝတ်ရည်တို့နည်းနည်းလဲနေတယ်.ထောင်တယ်.မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေအားလုံးကသူ့နေရာလေးနဲ့သူနေရာတကျလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော. ပြီးရင်တော့ဖြူဖြူကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်မျက်ခုံးမွှေးလေးရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ.အမ်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲချမယ်.မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့အခါမှာဝိအမြဲတမ်းပြောပါတယ်. နေကြည့်ကြည့်ဝေးကြည့်ကြည့်.နေကကြည့်လိုက်အဝေးကကြည့်တယ်.ကြည့်ပြီးတော့ဆွဲရတာပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော. ဒီနေ့တော့ ခဲတံလေးအသုံးပြုမယ်.ဒီ ကဒီခဲတံလေးနဲ့ အကုန်လုံးဆွဲတဲ့ခဲတံလေးနဲ့ဆွဲပါမယ်ရှင်. အနီးကိုလည်းကြည့်မယ်. လက်လေးကိုထောက်ထားပေါ့နော.လက်လေးနည်းနည်းလေးထောက်ထားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုထောက်ချွန်လိုက်.အဲဒီလိုမျိုးသုံးအသုံးပြုသလိုပဲ.ဒီလက်ကဒီမှာထောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာက အာဘယ်လိုပြောရမလဲ.ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော. Control ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့. ဒါကတော့မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့နည်းလေးပါရှင့်. ဒီနေ့ ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တောတို့မျက်ခုံးမွှေးဆွဲရင်အရမ်း အထူကြီးတော့မဆွဲဘူးပေါ့နော. ဟုတ်. ဒီနေ့မျက်ခုံးမွှေးကိုလည်းပါးပါးလေးပေါ့နော. နည်းနည်းပါးပါးလေး. အနက်ရောင် ဟုတ်. ကဒီအညိုပြေပြေလေးပေါ့. ဟုတ်. အညိုပြေပြေလေးဆွဲတာ. အနက်ရောင်လည်းရတယ်. မီးခိုးလည်းရတယ်. အရောင်ပြေပြေလေးဆို ပြေပြေလေးတွေပေါ့နော်. ဟုတ်. ကိုယ့်ရဲ့နဂိုရှိပြီးသားမျက်ခုံးပုံစံအပေါ်မှာပဲ. ဟုတ်. ဘောင်လေးအရင်ကွပ်မယ်.ဘောင်လေးကွပ်ပြီးသွားရင်မီးကိုဒီအမြှီးလေးကိုအရင်ဖြည့်မယ်. အမြှီးလေးကိုကအားဘယ်လောက်သုံးပြီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်.ဘာမှမဖြစ်ဘူး.ဘာလို့ဆိုတော့အမြှီးကနက်သွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး.ကိစ္စရှိတာကဝတ်ရည်တို့ဒီထိပ်ပေါ့နော. ဒီထိပ်.အဲ့ဒီထိပ်မှာဝတ်ရည်တို့အားသုံးမိလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းထူသွားတာပေါ့.ထူသွားပြီ.အရောင်ကလည်းများသွားတယ်.ပြီးတော့ဝိလိုမျိုးမျက်ခုံးမွှေးဒီနားမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့သတိထားရတယ်. အဲ့ဒီမှာအရှေ့နားလေးမှာထူသွားရင်ကျွန်တောတို့ကသဘာဝသိပ်မကျတော့ဘူး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အရှေ့နားမှာတော့ထူသွားရင်နည်းနည်းရုပ်ရင့်သွားတယ်. Angry Bird လေးတော့ ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းလိုက်တယ်.အဲဒါတချို့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးကြီး သမင်ဆွဲတာလားမသိဘူး.ကျွန်တောတွေ့ဖူးတယ်. တချို့ကျတော့လည်းလိုက်တယ်.သူတို့နဲ့ထူထူထဲထဲလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာလိုက်တယ်. တို့ကျတော့ဒီနားမှာအမွှေးလေးတွေလည်းရှိနေပြီးသားဆိုတော့ အဘွားလေးပဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော. ကဲအနီးကြည့်လိုက်.အဝေးကြီးကြည့်လိုက်. ရေအခုထိပြင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လား. သိတယ်ရှင့်. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရောအဆင်ပြေလား. နိုင်နိုင်လား. ညီမလေးစိမ်းလဲ့ဆီကညီမလေးတစ်အိုးတော့ပြည့်လား.ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်ပြေပါတယ်ရှင့်.ဟုတ်. မီးကိုပဲစောင့်နေရတာထင်တယ်. ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်အဆင်ပြေလား. ဟုတ်.ပြေပါတယ်. ပြေပါတယ်နော.ညီမလေးစန္ဒာအောင်ရော. Like တွေရှာတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့. ပြောရင်းနဲ့အဝေးကဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးထူသွားတာ.အားမရသေးတာ. .အဲဒါလည်းဝေး. ကျွန်တောကြည့်ပေးမယ်.အဝေးကို. ကြည့်ပေးပါဦး. ကဲဒါဆိုရင်ရပါပြီ.မျက်ခုံးမွှေးကတော့ ပြီးရင် ပြီးရင်ဝတ်ရည်တို့ဒီမိတ်ကပ် look ရဲ့ main ပေါ့နော.အဓိကကတော့ဝတ်ဒီနှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်လေးကိုအသုံးပြုသွားမှာပါ.မျက်လုံးရော eye shadow အနေနဲ့ရောပါးနီလေးနဲ့ရောနှုတ်ခမ်းနီအနေနဲ့ရောပေါ့နော.ဒီဟာလေးကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးသွားမှာပါ. အောကျွန်တောတို့ဒီတစ်မျိုးတည်းနဲ့ အယ်နှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်တစ်တောင်တည်းနဲ့ကျွန်တောတို့သုံးမျိုးပြည့်မှာပေါ့နော. ဟုတ် အဲဒီတော့ဝတ်ရည်ကိုဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကိုလက်လေးပေါမှာဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်မယ်.တင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် ပြီးတော့ရှင်မှာ brush လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ကိုယ်နှစ်သက်ရာပေါ့နော. အဲဒီလိုမျိုးလေးယူလို့ရတယ်. We ကတော့ brush လေးနဲ့ယူလိုက်မယ်. Brush လေးနဲ့ယူလိုက်ပါမယ်ရှင်. ယူပြီးတော့ ယူ ယူပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှာ eye shadow လေးမှာထည့်လိုက်မယ်.မျက်လုံးလို့. ရွံရဦးမှာ.ပါးမှာထည့်လိုက်တာ. လဆန်းပါတယ်ထင်တယ်. ရတယ်.ပြီးရင်လည်းပါးလွှာ အဲဒီအတိုင်းလေးလည်းလှတယ်. အဲဒီအတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါ. ရပြီ.ရပြီ.မဖျက်နဲ့. ကျွန်တော screenshot ရိုက်လိုက်. အင်းပါတဲ့. သူ့သီချင်းနဲ့သူပြန်ထိတော့မယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားတယ်လေနော.စတိုင်ပေါ့.အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ. စတိုင်ပေါ့. ကဲ eye shadow လေးကို video မျက်ခွံလေးကနေပြီးတော့အပေါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာပေါ့နော. ကျွန်တောနှုတ်ခမ်းနီနဲ့လည်း eye shadow ခြယ်လို့ရတယ်နော. ဟုတ်.နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ sharing ခြယ်လို့ရတယ်.တချို့နှုတ်ခမ်းနီတွေဆိုသူကလုံးဝ ဟို official announce လုပ်ထားတာ.မျက်လုံးပေါလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော. ဒါဆိုကျွန်တောတို့ eye shadow လည်းမကုန်တော့ဘူး.ဝေ့. မကုန်တော့ဘူး.ဟုတ်ကဲ့. အဲ့ဒါကြောင့်လေနှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင့်ရှိရင် အာတောတောများများအဆင်ပြေတယ်.ခရီးသွားလို့ရှိရင် လွယ်လွယ်ကူကူနှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင်ယူသွားလိုက်.ပြီးရင်အဲ့ဒါပါးနီတွေရော eyeshadow တွေရောကြိုက်ကုန်သလိုရတာနော. ဒါဆိုရင်ကျွန်တောတို့တရားဝင်မပြောထားတဲ့တံဆိပ်မပါတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတွေကျတော့မသုံးသင့်တာလား.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သုံးမိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲ.အသားအရေ. အင်း.သုံးပြီးရင်တော့အားလုံးကမျက်နှာပေါမှာသုံးဖို့အတွက်ပဲထုတ်လုပ်ထားတာဆိုတော့လေ.အဲရတော့ရပါတယ်.ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဆီများတဲ့နှုတ်ခမ်းနီတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ မျက်လုံးပေါမှာအဆီပြန်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော.ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကဒီ ရပါတယ်.ကိုရီးယား brand တွေတောတောများများလည်းရတယ်. ပေါ့နော.ဟုတ်. အဲဒါဆိုအရမ်းတော့စိုးရိမ်စရာတော့မရှိဘူး. ဟုတ်.အရမ်းတော့စွဲစရာမရှိဘူး.အကုန်လုံးဒီလိုပဲသုံးကြတာဆိုတော့. မျက်နှာအသားအရေပေါမှာမူတည်ပြီးတော့အဲဒီလိုအရမ်းအဆီပြန်တဲ့ဟာလေးတွေပဲသုံးတယ်ပေါ့. ညီမလေးအေးချမ်းပါတယ်. ခြယ်ထားတဲ့အရောင်လေး we ရှင်. ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်အဆင်ပြေလား.ကြည့်ပေးပါဦး. အော. ပြေတယ်.သူကလေနည်းနည်းဟိုကင်မရာအရောင်ကြောင့်လားမသိဘူး.နည်းနည်းလေးတော့ပန်းရောင်လေးကောင်းတယ်.ဒါပေမဲ့ရတယ်.ကိစ္စမရှိဘူး.ဝတ်ရည်တို့အခုဟို အရောင်လေးပဲနည်းနည်းကွဲသွားတာပေါ့နော.ပြင်ပုံပြင်နည်းကတော့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်မှာဆိုတော့လေ. ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်. ဟုတ်.ညီမဟိုသုံးတာလိမ္မောရောင်စစ်စစ်ပဲ.ဒါပေမဲ့မျက်လုံးအောက်ရောက်မှပန်းရောင်နဲ့ရမှာ. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒါဖြစ်တယ်.ဖြစ်တတ်တယ်. We love အဲ့ဒီလိမ္မောရောင် ခြယ်လို့ရှိရင် သတိထားတယ်.တစ်ခါတလေ brush ကလည်းအရောင်ကူးတယ်လေ.သိလား. အင်း. Brush ကလည်းအရောင်ကူးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဟို အဲ့ဒီလိုမှားတတ်တယ်ပေါ့နော. ဟုတ်. ရတယ်.ရတယ်.ဒါကိစ္စမရှိဘူး. Eyeshadow လိမ္မောသီးတော့ရှိတယ်.နည်းနည်းဖြေလိုက်မယ်. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. Eye shadow လိမ္မောနဲ့ we love ပြန်ဖြည့်မှာ. ပိုတောင့်လိမ့်မယ်. ပြီးရင်ဒီအရောင်လေးကိုပဲဒီမျက်လုံးအောက်လေးကိုလည်းထည့်မယ်ပေါ့နော. .ပြီးရင်ဒီနေ့ makeup look ကကျတော့လည်းကျွန်တောတို့ဒီလိမ္မောဘက်ကိုအသားပေးပြီးပြင်မယ်.ဒါပေမဲ့ ဟိုဒီမိန်းကလေးတောတောများများနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ look ကလေးတွေပေါ့နော.ကျွန်တောတို့အသားညိုညိုအသားဖြူဖြူလိုက်ပြီးပြင်လို့ရမယ့်အလုပ်ကလေးပေါ့. ဟုတ်တယ်.ဒီလိမ္မောရောင်ကကျတော့သူက one done ဘက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေ နည်းနည်းလူတိုင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မယ်.ဝတ်ရည်တို့မြန်မာအသားအရေဆိုအဝါလေးတွေအဖြူလေးတွေအညိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော.လူတိုင်းနဲ့.ပြီးတော့ပြင်ရတာအရမ်းလွယ်တယ်. ဟုတ်တယ်.ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တောတို့နှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်နဲ့ သုံးမျိုးလောက်ပြင်မှာဆိုတော့တောတောကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာတယ်. အရမ်း အားလုံးကြိုက်နေကြပြီ. အားလုံးကတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူသက်သာချောင်ချိပေါ့နော. ဒါကျတော့လိမ္မောရောင်တွေပဲပြင်နေဦးမယ်ဝတ်ရည်. ဒီနှစ်ကျတော့ကျွန်တောတို့ဘယ်လို trend လေးတွေခေတ်စားလာနိုင်လဲ. ဟုတ်.ဝတ်ဆင်တာတော့လေ.နှစ်ထောင့်နဲ့နှစ်ဆယ့်တစ်မှာတော့ဟိုဒီလိုမျိုးအရောင် crazy color လေးတွေခေတ်စားမယ်.နီယောတွေခေတ်စားမယ်ပေါ့နော. နေရုံတွေခေတ်စားမယ်.ပြီးတော့ကျတော့ဟို clean look လုံးဝ clean ပါးပါးကြည်ကြည် look လေးတွေလည်း ခေတ်စားမယ်ပေါ့.အဲ့ဒီလိုမျိုးထင်တယ်.ဟုတ် ကျွန်တောတို့က အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တောတို့ mask ကမဖြစ်မနေတက်ရမယ်လေနော. ဟုတ်တယ်. ဆိုတော့ဒီမျက်လုံးတစ်ဝိုက်လေ.အပေါအပေါပိုင်း မျက်နှာအပေါပိုင်းလေးကိုကျွန်တောတို့ကအဓိကထားပြီးတော့လှအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြင်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးလာတယ်.ပိုပြီးတော့နော. ဟုတ်တယ်. ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးလည်းပိုပြီးတော့သတိထားပြီးပြင်လာကြသလိုပဲ. ဟုတ်တယ်.အဓိကကတော့ပေါတာမျက်လုံးပဲရှိတာကိုး.မျက်လုံးမှာအားတွေ အကုန်လုံး အဲဒီတော့မျက်လုံးကို day သေချာလုပ်ထားတာပေါ့နော.အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင်ဘာညာပေါ့.အမ်း ဒါဆိုရင်ဒီ cream လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် week ကတော့ ရဲ့ဒီ eye shadow palette တွေကလိမ္မောရောင်လေးပေါ့နော.လိမ္မောရောင်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ထပ်ပေးပါ့မယ်. လိမ္မောရောင် eye shadow palette လေးတွေရှိကြလားရှင်.ပြပါဦး.အယ်အဲ့ဒီဟို အောရတယ်.ရတယ်.အဲဒီမှာလိမ္မောရောင်လေးပါတယ်.အဆင်ပြေတယ်.အေးချမ်းပါတယ်.အဆင်ပြေတယ်. နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒီလိုအရောင်လေး.ဟုတ်တယ်.သင်ဇာပဲ.အဆင်ပြေတယ်. အိုကေ. ညီမလေးစန္ဒာအောင်. စန္ဒာကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်.ရတယ်.အဲ့ဒီလိုအရောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေး လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော.လုံးဝယွန်းလည်းရတယ်. ဟုတ်.မရှိတော့ဘူး.လေးပွဲတောင်မရှိတာ. ဪလိမ္မောရောင်မရှိဘူးလား.ယွန်းမာ. မရှိဘူးပဲရတယ်.ယွန်းအရောင်ကတောတောတော့. တောတောတော့ဟိုဟာဖြစ်နေပြီ. ဒီကောင်ကအရောင်တော့ထွက်နေပါပြီ. အရောင်တော့ထွက်နေပြီ. အဲ့ဒီအပေါလေးမှာနည်းနည်းလေး. ဒီမှာလေပိုညီမလေးပိုးဝင်းမောင်ဖို့ရော.အဆင်ပြေလားညီမလေး. ဟုတ်.အစ်မကိုပြပါဦး. အမ်း.ဒီဒီဒီဟာဆိုရင်နော. အောရတယ်.ရတယ်.ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒါလည်းရတယ်. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ colour ခြယ်တာကဟိုထွက်တဲ့အရောင်လေးတွေကတော့အသားအရေပေါမူတည်မယ်ထင်တာပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.အသားအရေပေါမူတည်တယ်.ခုနကဝင်းပြောသလို brush ကလည်းစကားပြောသေးတယ်. Brush ပေါမှာလည်းပါသွားလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းပေါ့နော.အရောင်လေးတွေ ပြောင်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်. ဒါဆိုကျွန်တောတို့ festival တွေဘာတွေသွားလို့ရှိရင် ကိုယ်ကအထင်းဆုံးဖြစ်နေမှာ. Mask တပ်ထားရင်တောင်ထင်းနေပြီ. Mice တပ်ထားရင်တောင်မျက်လုံးပစ်ချမယ်တို့ဘာတို့ ရိုးနို့ဆိုသာ သီချင်းတွေဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး look လေးတွေလည်း ပြင်ရင်အဆင်ပြေမယ်နောအစ်ကိုကြီး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ပြင်တော့မှာတဲ့.ပြင်တော့မှာတဲ့. ဒီနေ့စပြင်ပြီ. အရမ်းကြိုက်သွားပြီ. အမ်း. အမ်း.ဒါကတော့ဒါကတော့အစ်ကိုအကုန်မပြီးသေးဘူးနော. ပြော.အကုန်ပြီးပြီဆိုရင်မျက်နှာမသစ်တော့ဘူးတဲ့.ဒီအတိုင်းအိပ်ထားဦး. ဒါဆိုရင်မျက်လုံးအပေါအောက်လည်းပြီးသွားပြီ.ဆိုလို့ရှိရင် ကို eyeliner လေးဆွဲကြမယ်. Eyeliner ကလည်းဆွဲရမှာပေါ့နော. Eyeliner ကလေဟို ဟိုတချို့ကကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်.မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်. We are ကတော့ eye liner ကိုမသိမသာလေးပါတယ်ဆိုရင်ရောပေါ့နော.အဲဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်. မျက်လုံးအောက်လေးထဲကနေပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော eyeliner ဆွဲတာတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်အရမ်းအထူကြီးမဆွဲကြတော့ဘူးနောအစ်ကိုကြီး. ဟုတ်တယ်. အခုက eye shadow ကိုအရမ်းအသားပေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော.အဲဒီလိုအဲဒီလိုဖြစ်သွားတာ. Eye shadow ကိုပဲများသောအားဖြင့်သေချာအချိန်ပေးပြီးတော့ ခြယ်လေ့ရှိကြတယ်. Liner ကိုတော့ weight ခုထည့်လိုက်သလိုမျိုးလေမသိမသာလေးပါတယ် လေးပဲထည့်ကြတော့တယ်.ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမျက်တောင်. မျက်တောင်ကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ကောကြတယ်.မျက်တောင်ကော့ကောလေးတွေနဲ့ eye shadow လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော. ဟုတ်.ညီမလေးပွဲပွဲမှာပိုအဆင်ပြေလား. သူကြိုက်နေတာကျွန်တော. အားရပါးရကျွေး. ပြည့်တယ်လေ.အဲ့ဒါသူက မှန်တော့ဝိလည်းအဲဒီလိုပဲ.ဒီမှာနည်းနည်းဘာညာလက်ကမဆန့်တော့လို့. ဪဟုတ်. မဟုတ်ရင် လည်းအဲဒီလိုပဲ.လှန်ပြီးတော့ဆိုးရတာ. ဟုတ်.ဟုတ်. အရမ်းပျံ့သွားမှာစိုးလို့. ကျွန်တောတို့ကြည့်ရတာအကုန်လုံးပြေပြင်တာက step တွေကအဆင်ပြေတယ်ကွာ.ဒီစင်္ကြာတောမှာအကုန်လုံးကအားရပါးရကြီးတွေဖြစ်ကုန်လို့. ဟုတ်ပ. ရုံးကပြီးသွားပြီလား. မဆွဲရဲဘူး. အာ liner မဆွဲဘူးလား. ဪ. မအိပ်ရဲလို့. ဪ. ပုံမှန်ဆိုရင်ရောဆွဲနေကြမဟုတ်ဘူးလား.ယွန်းက. အင်း.အဲဒီနေရာကလှိုင်သာယာကိုမဆိုးဖြစ်ဘူး. ဪမဆိုးဖြစ်ဘူး. ဟိုဒီအပေါနားလေးပဲအဲဒီလိုလေးပဲဆွဲဖြစ်တယ်. ဟုတ်.အောက်ထဲ. ပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးမဆွဲရဲတာတို့.ယွန်းတို့လိုလူမျိုးကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.မျက်လုံးလေးတွေပေါ့. အမ်းအမ်း.ဘယ်လိုပြောရမလဲ. Liner မဆွဲရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှလေ. Eye shadow အမှုန့်လေးတွေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးတစ်စောင်းစာလောက်တွေပေါ့နော.အဲဒီလိုမျိုးလေးသုံး. Liner ပုံစံလေးသုံးလည်း မသုံးခင်လည်းရပါတယ်.အခုခေတ်က liner ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းကေ သိပ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော. မျက်တောင်ကော့မယ်.မျက်တောင်ကော့စက်လေးနဲ့သေချာကော့မယ်. ညှပ်မိရုံပဲနော.ကျွန်တောဖြည်းဖြည်းညှပ်မယ်. .သတိထားနော. ကျွန်တောတို့အရေးကြီးတာပဲနော. ဟုတ်. Mascara ကလည်းအရေးကြီးတယ်.အပေါရောအောက်ရောပေါ့နော. Off လေးပါပါးပါးလေးဆို. ဟုတ်.အောက်ကိုပါ.ပါးပါးလေး. Mascara ကတော့သူဆိုးတယ်. အာ mascara ကတော့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အသက်ပေါ့နော.အရမ်းကြိုက်ကြတယ်. Mascara အားလုံးလိုက်မှီတယ်ထင်တယ်နော. အားလုံးလိုက်မိကြလားညီမလေးတို့. အခုကြည့်ထားတာကတော့အကုန်လုံးကလေဝေးနဲ့ထပ်ချက်မကွာဘဲလိုက်ပစ်နေတာ. ဟုတ်ပ. ဝေးပဲ.ဝေးပဲနည်းနည်းပဲနောက်ကျနေတယ်. နောက်မကျပါဘူး. အဆင်ပြေပါတယ်.အိုကေ. ဒါဆိုရင် eye makeup လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ မီးကလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော.ဟုတ်. ဟုတ်.အရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုအာအရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုအာ feedback ပေးပါမယ်. အဲဒီညီမလေးကသူကကျတော့သူလည်းအဲဒီလိုပဲ.လိမ္မောရောင်သိပ်မပေါက်ဘူးပေါ့နော. Eye shadow ခြယ်ထားတာမှန်တယ်. ဒါပေမဲ့အရောင်လေးတော့နည်းနည်းလေးမှားနေတယ်.ခုနက week ပြောသလိုမျိုး brush မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလို အမှုန်လေးတွေနည်းနည်းရောသွားလို့ရှိရင်အရောင်လေးတွေရောတတ်တယ်.ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်. ပြီးရင်နော.ဒီမှာလေ.စိမ်းတဲ့နှင်း.စိမ်းတဲ့နှင်းက အယ်စိတ်နဲ့နေတယ်. Blending color blending ကလည်းအဆင်ပြေတယ်. အာ foundation လေးတော့နည်းနည်းလေးပါးတယ်ပေါ့နော.ပြီးတော့ကျတော့အာ blending ကိုဒီဘက်လေးဒီမျက်လုံးထောင့်လေးမှာပါနည်းနည်းလေး ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်.ဟုတ်. .ပြီးလို့ရှိရင်ညီမလေးသင်ဇာဦး သင်ဇာဦးကအယ်ညီမလေးသင်ဇာဦးက eye shadow အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းနေတယ်. သူကဒီဒီနားနဲ့အယ်မျက်မျက်ခုံးနဲ့ပေါ့နော.မျက်ခုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကနည်းနည်းလေးနီးတဲ့အခါကျတော့ အရောင်လေးကိုဒီထက်မကပိုပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ဆိုးလို့ရတယ်.ကျန်တာကတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်. ဟုတ်.ဟိုဘက်သွားရအောင်. .ပြီးရင်ဇွန်း. ယွန်းကတော့ယွန်းကအဆင်ပြေတယ်.ပါးယံတယ်. ပါးနီလေးကြိုဆွဲလိုက်တာပေါ့နော.ကြိုးလည်းရိုက်တာပေါ့.အဲ့ဒါစတိုင်မဟုတ်ပါဘူးလို့.ကြိုဆွဲမိတာ. ပြောပြလိုက်ပါဦး.ပရိသတ်ကြီးကို. အမ်.ကျန်တာကအဆင်ပြေတယ်.မျက်ခုံးမွှေးလည်းအဆင်ပြေတယ်. ပြီးတော့ color branding ကလည်းအရမ်းကောင်းတယ်.ပြီးတော့ liner လေးပါသွားလို့ရှိရင်တော့ perfect ပေါ့နော. ဟုတ်.အဆင်ပြေပါတယ်.ယွန်း. ဘားနီလေးကြိုးဆွဲထားလေလို့. ညီမလေး ညီမလေးပိုးမွှားမှုန်ကကျတော့အမ်သူလည်း eye shadow အရောင်လေးတောတောတော့နည်းတယ်.ဒါကင်မရာထဲမှာလား.ဘာလို့လဲတော့ဝီရီမသိဘူးပေါ့နော. ဒါပေမဲ့အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းတယ် အာ ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ. Eye shadow အရောင်လေးကို pop up ဖြစ်အောင်လို့ပိုပြီးတော့ထည့်လို့ရှိရင်တော့အရမ်းအဆင်ပြေမှာ. ဟုတ်.အယ်ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်.ဟုတ်.ပြီးတော့အေးချမ်းပိုင်. Agent file ကတော့ခုနကသူပြောတဲ့အရောင်အရောင်ရောသွားတယ်လို့.ခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်. ပြီးတော့တကယ်လို့ထပ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော.အရောင်လိမ္မောရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးမျက်လုံးတစ်ပြင်လုံးနီးပါးပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ထည့်ပြီးတော့ ထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်.ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေတယ်. Liner လေးဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးထွက်နေတယ်.ကျန်တာအဆင်ပြေတယ်. ဟုတ်. ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့အခု eye makeup လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော. အဲ့ဒီမိတ်ကပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုမျိုးမိတ်ကပ်တွေဆက်ပြီးတော့ချဲ့မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်. ခေတ်သစ်မှာဆန်းသစ်မှုတွေများစွာနဲ့ပရိသတ်ထံကိုရရှိလာမယ့် Happy Bank အရင့်နဲ့မတူဘဲ အခုနွယ်ကဘာတွေသိမှာလဲ. ဆီတွေပုဆိုးနဲ့ဒူချင်ပြုတ်.ဟာမိုက်တယ်. ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုခံစားနိုင်သလို ကျွန်တောတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖလှယ်ရင်း ဗဟုသုတတွေရရှိစေမယ့်အပြင်စိတ်လည်းပျောရွှင်စရာလေးပါ.သာမန်သာ .ဒါတွေဘယ်ကရမလဲ. ပရိသတ်တွေရယ်မောပျောရွှင်နိုင်မယ့်ပခန်းရဲ့ဟာသတွေလာဦးမှာနော. TV ရှေ့ကမခွာနဲ့. Final သုံးမှာ. ဒီလို စိတ်ဝင်စားဖွယ်များစွာကိုကြည့်ရှုခံစားရမယ့် Happy ကျွန်တောရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်.အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တောတို့ဒါနောက်ဆုံး step ကိုရောက်ပါပြီ.အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေထူးခြားပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်. ခုနကပြောသလိုပဲဝတ်ရည်တို့ရေဒါနောက်ဆုံး step ပေါ့နော.ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ အဆင့်ထဲမှာပါတယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်ရည်တို့ခုနကပါးနီလေးတွေပါးနီလေးကို အယ်ဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှဆိုးကြမယ်.ပါးနီကအရောင်လေးနည်းနည်းလေးနှုတ်ခမ်းနီကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးတောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော.သတိထားပြီးတော့ဆိုးရမယ်. Branding ကိုသေချာလုပ်ရမယ်.အဲ့ဒီတော့ we are အာယူလိုက်တယ်. ယူပြီးလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့ပဲ လက်လေးနဲ့ယူပြီးတော့မှမျက်နှာပေါမှာတင်လိုက်မယ်. ကိုယ်ရေလိုက်သလိုပြုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါလာတယ်.ဒီပါးမှုန့်လေး ပေါ့နော.အဲဒီပုံလေးမှာတင်မယ်.ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ခါတည်း spot ကလေးနဲ့ brand blending လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော.မဟုတ်လို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့ အာအရောင်ကကွက်သွားမှာတွေဘာတွေကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့ သမီးရေဒါဆိုဟိုမှာယွန်းကကွက်နေပြီထင်တယ်. ယွန်းပလိုင်းကြည့်ပါဦး. ရုံးကကြိုပြီးတင်ပေးလိုက်တော့လေ.သူအရောင်ကိုအမှန်ထွက်သွားတာ. မျက်နှာသစ်ဖို့အချိန်ပေးရမယ်. ရပါတယ်. Blend blend လုပ်လို့ရှိရင်အမ်းတို့တို့ပြီးတော့လုပ်သွားလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်. ရလားရော့. အဆင်ပြေရဲ့လားပြောလေ. နည်းနည်းတော့ခဲနေတယ်. နည်းနည်းတော့ခဲတယ်ဗျ.ဒါပေမဲ့လည်းချစ်စရာလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော. စတိုင်ပေါ့.ဒါစတိုင်ပစ်တိုင်အသစ်.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာယူစတိုင်အသစ်နဲ့စပါမယ်. မက်မွန်အသီးလေးလိုဖြစ်နေပြီ.မက်မွန်သီးကာလလိုဖြစ်နေပြီ. .ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်း အဲဒီလိုပဲ.တစ်ဖက်ချင်းစီလုပ်တဲ့ we are men ဟိုဟာကွက်တာတို့ဘာတို့ကြောက်လို့ပေါ့နော.အဲဒီတော့ဒီဘက်ကိုလည်းလုပ်မယ်. ပါးနီကလေဟိုအမျိုးမျိုးခြယ်လို့ရတယ်သိလား. အခုဒီနားလေးမှာခြယ်ကြတယ်.တချို့ကကျတော့ဒီမျက်လုံးကာလာလေးနဲ့စပ်စပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးတွေမှာခြယ်ကြတယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအယ်ပိုးဝတ်မှုန်ခြယ်သလိုမျိုးဒီလိုအတန်းလိုက်တွေခြယ်ကြတယ်.ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့နော.ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆိုခြယ်လို့ရတယ်. သူကဒီနေ့အလုပ်ကကောဘယ်လိုကြက်ဥကိုထည့်လို့ရလဲ. ဟုတ်.ကြိုက်သလိုခြယ်လို့ရတယ်.ဒီနေ့လုပ်တာလည်း ညီမလေးပေါအဝတ်မဟုတ်ဘူး.အထူချယ်ထားတာမျိုးဆိုတော့အလယ်နားလေး. ဟုတ်တယ်.သူအလယ်လေး.ဒီလိုလေးဖြတ်ပြီးတော့တချို့ဆိုနှာခေါင်းလေးတွေပါဖြတ်ချယ်. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒါလည်းအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် လူငယ်လည်းအရမ်းဆန်တယ်. .ဆိုတော့ပါးနီတို့ဘာတို့လည်းခြယ်လာကြတယ်နော. .အဲ့ဒီတော့ပါးနီချယ်ရီကျတော့ကျွန်တောတို့ ဘယ်လိုမျိုးအယ်ကိုယ့်မျက်နှာကျပေါမူတည်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလိုက်ဖက်မှုရှိလဲ. ဟုတ်.ပန်းတွေကတော့အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်.မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံသေလည်းရှိတယ်.ဒါပေမဲ့အယ်အခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိပ် ဟိုဘောင်နဲ့ဆေးနဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော.အခုခေတ်ကကျတော့အဓိကဖက်ရှင်ခေတ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ.ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်လိုက်ဖက်မယ့်အလုပ်ကလေးတွေကိုခြယ်ကြတာများတယ်. Rose မရှိဘူးပေါ့နော. Music ရယ်လို့တော့ထွက်မတတ်တော့မရှိဘူး. အာဒီနေ့လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တောတို့အယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေနဲ့ပိုပြီးတော့လိုက်တာပေါ့နော. လေးတွေကလည်းနည်းနည်းတောက်တောက်ကလေးသုံးတာ. ဟုတ်တယ်. ဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေး. ပြီးရင်တော့ဝတ်ရည်တို့အာဒီ BB လည်းသုံးထားတယ်ဆိုတော့မေဦးတို့လိမ်းထားတဲ့မိတ်ကပ်လေးတွေကိုကြာရှည်ခံအောင်လို့အာဒီ loose powder လေးနဲ့ set လုပ်ကြမယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအာ two way ပေါ့နော.တချို့ကကျတော့လည်း comfort powder သုံးကြတယ်ပေါ့. ဒါကတော့ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်. We ကတော့ loose powder လေးသုံးပေးပါမယ်ရှင်. .အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောဒီနေ့ဒီ မိတ်ကပ် look ပါ. ဟုတ်. အယ်ပြင်ဆင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလည်းဟို step တွေအများကြီးကျွန်တောတို့သုံးစရာမလိုဘူးနော.ဒီနေ့ဆိုအများကြီးလည်း cosmetic ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးမလိုဘူး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒီမှာကျွန်တောတို့ moisturizer ကနေစပြီးတော့လိမ်းလာတာဆိုတော့အခုဆိုနှုတ်ခမ်းနီလေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းကျွန်တောတို့သုံးမျိုးလောက်ခြယ်တာဆိုတော့လေ. ဟုတ်. ဟုတ်. Step တွေလည်းအများကြီးမှတ်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.အများကြီးမှတ်စရာမလိုဘူး.ပြီးတော့ဒါက အာအဓိကကတော့ခရီးသွားရင်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ပိုးထင်တယ်.ဒီလိမ္မောရောင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော. ဘယ်လိုအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီနည်းလမ်းလေးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရောင်လေးတွေလည်းခြယ်လို့ရတယ်. ဒါပေမဲ့လိမ္မောရောင်ကျတော့လည်းခုနကပြောခဲ့သလို ကြားမှာတွေ party သွားတာတို့သိတယ်မလား. Festival သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေကျတော့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်တောအခုနောက်ပိုင်းက တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီလို color လေးတွေနော.အဲဒီလိုမျိုး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ခြယ်ထားကြတယ်. Color အရမ်းသုံးကြတယ်အခုခေတ်ကလေ. .ပြီးရင်နှာခေါင်းလေးဖောမယ်.နှာခေါင်းကတော့ we are browser လေးအသုံးပြုပြီးတော့နှာခေါင်းလေးဖောမယ်. မေးရိုးလေးနည်းနည်းချမယ်ပေါ့နော. We နှာခေါင်းကမဖောထားရင်နှာခေါင်းပျောက်နေလို့လေ. ဝေရဲ့ အဝေးရဲ့အသက်ကောင်ပေါ့နော. ရဲ့အသက်ကတော့နှာခေါင်းပါ. ယွန်းရဲ့အသက်ကရော. ယွန်းရဲ့အသက်ကရော. ဝမ်းဆက်လည်းခြောက်နှစ်. နှစ်ထောင်နှစ်နှစ်ကြီးနေလို့ပြီးအောင်လို့ပါ. မကြီးပါဘူးရော့. မကြီးပါဘူးလို့ထင်လို့ပါ. ဒါပေမဲ့ ယွန်းရဲ့အသက်ကကျွန်တောထင်တယ်. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရော.အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး.ကိုယ့်ရဲ့အားသွင်းအားနည်းချက်အားသာချက်တော့ရှိမှာပေါ့နော.မိန်းကလေးတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး.ဘယ်နေရာလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ပြင်ဖြစ်ကြလဲ. အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်ပြင်ပြီဆိုအဓိကထားပေးပါ. ဖြေပေးပါဦး. ဖြေပေးပါဦး. ဟုတ်.အဓိကကတော့မျက်လုံးပေါ့နော. မျက်လုံးလား.ညီမလေးက.မျက်လုံးကအယ် eye shadow ထိအောင်ပေါမူတည်ပြီးတော့မျက်နှာရဲ့ အမ်ပိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော. အင်း.ပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတာပေါ့နော.မျက်လုံးပေါမှာပဲတွေ့တယ်. ဟုတ်တယ်.မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လောက်ပဲလှနေလှနေပေါ့နော.ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုမကျကြဘူး.တစ်ခုခုကိုတော့လိုနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်. ပြီးရင်ပါးရိုးလေးချမယ်. ဒီမေးရိုးကားကလေမေးရိုးကဝေးတဲ့ဒီလိုမျိုး v shape လေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော.ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနားကနေစပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေး v shape လေးဖြစ်အောင်လို့မေးရိုးလေးနည်းနည်းချမယ်. မျက်နှာရှိန်လေးပိုပေါတာပေါ့. ဟုတ်.မျက်နှာ shape လေးပိုပေါသွားအောင်လို့. အားလုံးလိုက်မိလားရှင်. .ဒါပြီးရင်တော့ဝင်းပြောသလိုမျိုးဟို party တွေဘာတွေမသွားကြနဲ့နော. မုဒေ on ပြီးတော့ကျွန်တောတို့ မရတော့ဘူး.လျှော့လို့မရတော့ဘူးတဲ့.အကုန်လုံးက. အပြည့်တွေလိုက်ဝတ်ထားပြီးသားဆိုတော့. သွားရင်လည်းခေါဦးလို့ပြောမလို့ပါ.တို့ဘာတို့ .ဒါဆိုရင် အားလုံးလိုက်မိပါတယ်နော.အဆင်ပြေရဲ့လားရှင့်. ပြေပါတယ်ရှင့်. နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ. နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့နှုတ်ခမ်းနီပေါ့နော. နှုတ်ခမ်းနီဆိုးမယ်.နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်မှာ week က foundation လေးနဲ့ဒီ BV လေးနဲ့ပေါ့နော. Baby လေးနဲ့ပဲ အာနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်အောင်ဒီနားလေးတွေကိုပို့လိုက်မယ်.အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့အရောင်လေးကလည်းအရောင်ထွက်အားကောင်းမယ်. ပေါ့နော. ဟုတ်.ကျွန်တောတို့နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းလေးမှာအရင်တင်ပေးရမှာ. ဟုတ်.နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားအရောင်နဲ့ ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ခမ်းနီတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော. အောဟုတ်.အဲ့ဒီတော့ဝေတို့ကအရင်ဆုံး အရင်လုပ်လိုက်မယ်. အရောင်မှန်အောင်ပေါ့. ဟုတ်.အရောင်လေးမှန်သွားအောင်ပေါ့. Confirm လုပ်ပြီးတော့မှအဓိကဇာတ်လိုက်ကြီးကိုဆိုးကြမယ်. လိမ္မောရောင်ပေါ့နော. နန်းလိမ္မောရောင်နှုတ်ခမ်းနီ. ဟုတ်. .နှုတ်ခမ်းနီကလေ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆိုလို့ရတယ်သိလား.တချို့ကကျတော့လည်းသင့်လိုမျိုးလေးဆိုးကြတယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအပြည့်ဆိုးကြတယ်. ကိုယ်ကြိုက်သလိုကိုယ်ပေါလို့. ဟုတ်.ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆိုတာပေါ့နော. အခုနောက်ပိုင်းတော့သင့်ပုံစံလေးတွေဆိုတာပိုများတယ်နော. ဟုတ်တယ်. ဒီနားလေးကိုဦးနည်းနည်းလေးပြန်ဖြည့်ပေးမယ်.အရမ်းအပြည့်ကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ဝေးပစ်နေကြအဲဒီလို look လေးတွေကျွန်တောတို့အမြဲတမ်း တွေ့ဖြစ်တယ်.ဒီလိုမျိုးနောက်မီးကအဲဒီလိုမျိုး orange fancy အဲ first orange makeup look လေးတွေတောတောလေးကြိုက်စရာလား.အဲဒီလိုမျိုးနော. ဟုတ်. ဆံပင်ကာလာလေးတွေဆိုးထားတာတွေကိုပိုပြီးတော့ဒီဒီ look နဲ့ပိုလိုက်သလိုပဲနော. ဟုတ်တယ်. ဆံပင်ကာလာလေးတွေဆိုးထားရင်တော့ပိုပြီးကြွတာပေါ့နော.အရမ်းကို party mood လေးဖြစ်နေပြီ.အရမ်းမရတော့ဘူး. သူတို့တွေ ယွန်းအဆိုးဆုံးလို့ပါ. အခုအမှန်ခုနကလိုပါးနီလေးဒီလိုမျိုးလေးခြယ်ထားတာလေးကပိုတောင်မှမိုက်သေးတယ်နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ချင်တယ်. နော. တစ်ခြစ်ပဲသိလား. အချစ်ပဲ. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေတော့အဆင်ပြေလားရှင်. ပြေတယ်နော.ဟာမြန်တယ်ဟ.အားလုံးက. ကဲဦးရေ.အယ်ကျွန်တောတို့ အခု အခုဒီနေ့ပြင်တဲ့မိတ်ကပ် look လေးကလေ. ကျွန်တောတို့ဒါလူငယ်ဆန်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့လိုက်တယ်. Weight ဆိုလည်းအရမ်းနော. We week ကိုတွေ့နေကျဒါကတော့ ဟုတ်တယ်.ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလိမ္မောရောင်ကိုအသားပေးပြီးခြယ်တဲ့ဟာမျိုးသူတို့ အာဒါ first time ထင်တယ်ကျွန်တောထားတာနော. ဟုတ်. အယ်သိပ်ပြီးတော့မတွေ့ ဟုတ်. ဟိုဝင်းအနေနဲ့ကြည့်ရတာလည်းလေ.သူတို့ကအင်္ကျီလေးတွေကလည်းလိမ္မောရောင်လေးတွေနဲ့အပြည့်ပဲဝတ်ထားတယ်.မိတ်ကပ်လေးကလည်းအရမ်းကိုလိုက်ဖက်နေတယ်ဆိုတော့ လိမ္မောသီးလေးတွေတန်းစီထားသလိုပဲခံစားရတယ်. ဟုတ်တယ်.ကျွန်တောတို့ဒါ ဟိုညနေနီညိုရယ်လို့ရှိရင်နီညိုစူးစပ်အလှလေးပေါ့. ထင်စားလိုက်တာ. အိုကေ.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့သူတို့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေမေးကြည့်ရအောင်နော.ဟုတ်.ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနလို ဝိပြောသလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ book လေးတွေဖြစ်နေမလဲ. ဟုတ်.ဟုတ်.နောက် you ကစပြောပေးပါဦး. အာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ကျတာအမြဲတမ်းပြင်တော့မှာ.ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်တော့မှာအရမ်းကြိုက်သွားပြီ. ဒီဒီမိတ်ကပ် look ပဲ လိမ္မောရောင်ပဲ. လိမ္မောရောင်ဝတ်ဖို့တောပါတယ်.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာ အဲဒီတော့ယွန်းရောဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒါလိုက်ပြင်တာပေါ့နော.ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးကြည့်နေတာဆိုတော့ အာဒီနေ့ပြင်ရတဲ့ခံစားချက်ကကောဘယ်လိုရှိလဲ. ဘယ်လိုပြောမှာတုန်း.ရင်တွေခုန်တယ်.စောနကဆိုဒီလိုကြီးကိုင်တာတုန်နေတယ်. သီချင်းဆိုတာထက်လည်းမကျောဘူးပေါ့နော.ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တောတို့မိတ်ကပ်ပြင်ပြီးတော့ရင်ခုန်ရတာ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ကျွန်တောတို့ကျေးဇူးပါ.ကျွန်တောတို့နောက်ထပ်ညီမလေးစိမ်းလဲ့လေးကိုဝင်ကြည့်မယ်နော. ဟုတ်. ဒီ look လေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်.မဝင်းနဲ့တူတူပြင်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်. BCC မှာပါဝင်ပေး ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်. ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး.အဲဒီတော့ဒီနေ့ပြင်ပြီးသွားတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ. အင်း.အရမ်းလှနေတယ်. အရမ်းလှနေတယ်.ဟုတ်တယ်.အရမ်းလှပါတယ်ညီမလေး.ဆံပင်လေးနဲ့လည်းလိုက်တာလေ. ဟုတ်တယ်.ပြီးတော့ဒီနေ့ပြင်ဆင်တာအကုန်လုံးကအဆင်ပြေကြတယ်. ဟုတ်.အကုန်လုံးနဲ့လိုက်တယ်.အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်ကိုလည်းမေးကြည့်ချင်ပါတယ်. ဟာဒီအရောင်ကလေပြင်နေကျမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်မျိုးဆန်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်. ဟိုမိတ်ကပ်တွေဖျက်ပြီးတော့အိပ်လိုက်ရမှာတောင်နှမြောတယ်.ဘယ်သွားရမလဲ. အင်းအင်း. ပျောစရာကြီးနော.အဲ့ဒီလိုမျိုးကြားတာအားရတယ်. ဒီနေ့မျက်နှာမသစ်တော့ဘူးတဲ့. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့ပြီးရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ထားတာနော.ဆရာကြီး. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကနည်းလမ်းလေးတွေသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တောတို့နောက်နေ့တွေပြင်လို့ရပြီ.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာကျွန်တောတို့ခေါကြမယ်.အဲ့ဒီတော့ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအကုန်အဆင်ပြေတယ်နော.ဝေးလည်း ဒီဟာခြောက်ယောက်လုံးကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ. အာဝေခုနကပြောသလိုပေါ့. ခုနကပြော ဟုတ်.ပြီးတော့အကုန်လုံးကအရမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့လေ live တင်တာလေ.ဝီက တကယ်လည်းအံ့သြတယ်.ဟိုတစ်ခုခုဆိုတာနဲ့တစ်ခုခုတန်းလုပ်ပေးပြီးသားပဲ.ဝိတိုတောင်နည်းနည်းပြန်စောင့်နေရသလိုပဲ.အရမ်းတောတယ်.အရမ်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော.ဝင် ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.ယွန်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့အားတက်သရောနော.အားလုံးပါဝင်ပေးကြတာ.အားလုံးအရမ်းလှကြပါတယ်.ကျေးဇူးပါ. ဟုတ်ပြီး.ကျွန်တောတို့ဒီကနေ့ကတော့ညီမငယ်လေးတွေနဲ့ပြင်တာကတော့အရမ်းအဆင်ပြေတယ်နော.ကျွန်တောတို့ကြည့်ပြီးတော့လည်း အကုန်လုံးချစ်စရာလေးတွေခုနကဝူးပြောသလိုပဲ.လိမ္မောသီးလေးတွေလို အခုတီဗီကနေပြီးတော့ကျွန်တောတို့အစီအစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြင်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါနော.ဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကိုရောကျွန်တောတို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ သိချင်တာလေးတွေရှိလား. ဟုတ်.ရှိတာပေါ့.အခု week ဒီ program ပြီးသွားပြီ.ဒီအစီအစဉ်လေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော.ဝတ်ရည်တို့ရဲ့ syndrome network မြန်မာ group ရှိတယ်. Facebook မှာ.အဲ့ဒီမှာ post ရှိပါမယ်.အဲ့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော. Live တင်ပြီးသားလေးတွေကို comment လေး photo comment လေးတွေပေးပေးပါ.ဝီကလည်းအဲ့ဒီမှာ feedback လေးတွေပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တောတို့ comment လေးတွေပေးပါဦးနော. အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဝေထပ်မံပြီးတော့အာဒီနေ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ထပ်မံပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဟုတ်.အဝေးကလည်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်. ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဝိနည်းနဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ special guest ရိုးရာကျေးဇူးပါ. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအားလုံးကျေးဇူးပါနော.ကျွန်တောဒီကနေ့မှာအားလုံးအတူတူပါဝင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ကျွန်တောတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တောတို့ အာတစ်ဆယ့်သုံးပတ်မြောက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ.ကျွန်တောတို့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်.အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တောတို့ အနေနဲ့ပါဝင်မယ့်သူကတော့ကျွန်တောတို့ရဲ့ blogger လမ်းမ ဖြစ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ.အဲဒီတော့ Juventus ကနောက်ဆုံးရေမှာဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ တွေနဲ့တင်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုဆက်စပ်စောင့်မျှောကြည့်ရှုဖို့လည်းပြောကြားရင်းနဲ့ ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်.အားလုံးပဲသာယာပျောရွှင်တဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေ. တာ့တာပါခင်ဗျာ.အားလုံးတာ့တာပါ. ကိုယ်ကာရီအတွက် iron page မှာ main sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်." />
Cinderella Network Myanmar (Episode - 13)
Download MP4 SD 173.07MB
<iframe width="600" height="350" src="https://e.bajarfb.com/711579826081106" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
We Wee Makeup Artist နဲ့အတူ လိမ္မော်ရောင်နှုတ်ခမ်းနီတစ်မျိုးတည်းကိုအသုံးပြုပြီး 🍊“Fancy Orange Makeup Look" 🍊...
ကိုယ်ကာတွေအတွက်အာရုံပြည့်ချိုရည်မှ main sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်. .ဇန်နဝါရီလနောက်ရက်မြန်မာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ. ပျိုမေတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖောခွင့်ရမယ်.ကျွန်တောတို့ရဲ့ အပတ်တစ်ဆယ့်သုံးမြောက်တင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ.ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့အစီအစဉ်ကတော့အလှတရားကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ပျိုမေတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုလေးစနစ်ကျကျနဲ့ကိုယ်တိုင်ပုံဖောနိုင်စေဖို့အတွက် စီနီယာဆင်တွဲလောင်းတွေနဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်.စီနီယာစင်ထွန်းသားတွေဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီး beauty blogger နဲ့ professional makeup artist တွေကနေပြီးတော့ အပတ်စဉ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးခြောက်ဦးကိုခေတ်ကာလနဲ့လိုက်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ရေပန်းစားတဲ့မိတ်ကပ်လိမ်း ခြယ်မှုတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ. မှာတော့ဘောကာတွေအတွက်အာရုံဖြည့်အချိုရည်ကနေ အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ MNTV ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ MNTV channel Facebook page တွေကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. အေကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်လိုက်ပါလိမ်းချိန်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်း အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်. ဒီနေ့ညမှာ senior center အနေနဲ့သင်ပြပေးသွားမယ့် professional makeup artist give ကိုဖိတ်ခေါလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ. ဒီနေ့ညရဲ့စီနီယာရဲ့ဆင်တွဲလကတော့နာမည်ကျော celebrity တွေရဲ့ လက်စွဲတောမိတ်ကပ် artist တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တောတို့အမြဲတမ်းဆန်းသစ်တဲ့မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှုတွေကို အမြဲတမ်းဖန်တီးနေတဲ့မိတ်ကပ် artist grewye ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. မင်္ဂလာပါ. ဟုတ်.မင်္ဂလာပါအစ်ကို. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့အဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပြန်ပြီ.အဝေးရဲ့မိတ်ကပ် look ကျွန်တောတို့လေအမြဲတမ်းလန်းဆန်းပြီးတော့အမြဲတမ်း create ဖြစ်နေတာပေါ့နော. ဟုတ်. အဲဒီတော့အမြဲတမ်းတွေ့ရပါတယ်.အဲဒီတော့ဒီကနေ့ကရော ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမှုလေးတွေတွေ့တာလဲ. ဟုတ်.ဒီနေ့တော့ဝေးကပေါ့နော.အောလူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတယ်.ပြင်ရတာလည်းလွယ်တယ်. အာ fancy online makeup look လေးတွေပြင်ပြဖို့ပေါ့နော.အဲဒါစီစဉ်ထားပါတယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ဝိတ်အမြဲတမ်းပြင်နေကျတွေထဲကကျွန်တောတို့ဒါလူကြိုက်များတဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ဘယ်လိုမျိုးအဲ မျိုးတွေကျလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ကပ်လွတ်ကလေးကပြင်ဖို့အတွက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်. ဟုတ်.ဝင်းအနေနဲ့ပေါ့နော.ဒီ fancy allange makeup look ကကျတော့ အာ party သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် festival သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သင်္ကြန်ပေါ့နော. အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်း pop up ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ရမယ်လို့နီနီထင်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့လူငယ်ဆန်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲလမ်းအပြင်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေကျလို့ရှိရင်နော.အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်း ကလေးတွေအရမ်းခေတ်စားလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော.ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ TV ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တောတို့နဲ့အတူတူအယ် လိုက်ပါပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တောတို့ဖိတ်ခေါပါတယ်.အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဝင်းနဲ့အတူတူအာ ဟုတ်ကဲ့. အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမလေးကို. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့. ပြီးရင်တော့အားလုံးလည်းလူငယ်လေးတွေနော်. အခုဒီနေ့ပြင်မယ့်ခလုတ်လေးလည်းအားလုံးလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဝေ. ဟုတ်တယ်. ဟုတ်. အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတူတူပြင်ဆင်ကြမယ့်ညီမငယ်လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အဲဒီတော့ ပထမဦးဆုံးကျွန်မငယ်လေးတစ်ဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ. မင်္ဂလာပါရှင်.ညီမစန္ဒာအောင်ပါ.ရန်ကုန်မြို့ပြည့်ဝတဲ့ချောင်ကြိုပါရှင့်.အသက်ကနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပါ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးစန္ဒာပါ.တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.နောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ညီမနာမည်ကတော့စိမ်းသိမ့်ဖြူပါ.အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပါ.တောင်ဥက္ကလာပနော. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးစိမ်းလဲ့မေရေ.တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.ကျွန်တောတို့နောက်ထပ် ညီမလေးတစ်ဦးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်.ညီမနာမည်ကတော့သဉ္ဇာဦးပါရှင့်. အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ပါ.မရမ်းကုန်းမှာနေပါတယ်ရှင့်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးတင်ဇာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.ကျွန်တောတို့နဲ့အတူတူမိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မယ့်နောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ကျွန်မနာမည်ကပိုးဝင်းမုန်ဖြစ်ပါတယ်.ညီမအသံမစခင်. ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်.ဟုတ်.အားလုံးမင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ညီမလေးမင်္ဂလာပါ.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောနောက်ထပ်ညီမလေးတစ်ဦးလည်းရှိပါသေးတယ်. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.ညီမနာမည်ကတော့အေးချမ်းပိုင်ပါ. အသက်ကတော့နှစ်ဆယ့်လေးနှစ်ရှိပါပြီ.ဒဂုံမြို့နယ်ကပါ.ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အစ်ကိုတို့ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်.ညီမလေးတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီကနေ့ညီမငယ်လေးတွေနဲ့အတူတူမိတ်ကပ်ပါဝင်လေ့ကျင့်မယ့် special guest တစ်ဦးကိုလည်းဖိတ်ခေါထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ. သူကတော့ ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့ဒါမြန်မာ idol season two မှာကတည်းကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ အဲကျွန်တောတို့အာအင်းပါသီချင်းတွေကိုပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့တေးသံရှင်ယွန်းဖြစ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ. ဂျိုးရေမင်္ဂလာပါ. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်. တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်နော.ယွန်းရေ.အခုတလောဘာတွေလုပ်နေလဲပြောပါဦး. ပရိသတ်တွေကိုပြောပြပါဦး. ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုဖိုးပြည့်နဲ့ပေါ့နော.သူ့ရဲ့စာအုပ်လေးတစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်. အဲဒီအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ယွန်းရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းကျွန်တော အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်နော.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးရောကြည့်ဖြစ်လား. ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.ရှေ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲဒီတော့ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တောတို့တွေဒါ we နဲ့အတူတူတိုက်ရိုက်ပြင်ရမှာပေါ့နော.ပရိသတ်တွေအများကြီးကလည်းကြည့်နေမှာဆိုတော့အာစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်ထင်တယ် အယ်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်.ညီမမိတ်ကပ်ကိုအဲ့ဒီလို မသင်ဘူးကွာ.အခုဒီနေ့မြေးကလည်း သင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမအရမ်းပျောပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့. ဖိတ်ခေါပေးတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်. ဟုတ်ကဲ့ယွန်းရေနော.ယွန်းအတွက်တော့ဒါပထမဦးဆုံးအယ်တွေ့ရမှာပေါ့နော.ပြင်ရမှာပေါ့.ဆိုတော့ ဝေကရောဘယ်လိုခံစားရလဲ.ဒီနေ့ရုံးပါဝင်ပေးမှာဆိုတော့. အာဒီနေ့ယွန်းပါ.ယွန်းနဲ့ဝေနှင်းကလည်းအရင်ကတည်းကသိတယ်လေ.ဆိုတော့ ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးပိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့. ဒါကျွန်တောတို့ဒါညီမငယ်လေးတွေလည်းဒီနေ့ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပျောစရာကြီးနော. ဟုတ်. အတူတူပြင်ကြမယ်.ယွန်းယွန်းနော. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ဝေ ကျွန်တောတို့ပြင်ဆင်မယ့်မိတ်ကပ် look လေးကလည်းဒါပရိသတ်တွေ ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.ဖိတ်ခေါပါတယ်.ကျွန်တောတို့ပြည်သူတွေအတွက် ဟုတ်ကဲ့ပါ. ဟုတ်ကဲ့. ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါ. မင်္ဂလာပါအစ်မ. ကဲအဲဒါဆိုရင်စတင်ချမယ်. ဗီဒီယို ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးစတင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် အာ အာမိတ်ကပ်မလိမ်းခင်မှာအရင်ဆုံး moisturizer လေးလိမ်းပါမယ်. Week ကဒီ က all in one moisturizer လေးလိမ်းမယ်ပေါ့နော်. ကျွန်တောတို့မိတ်ကပ် ပြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် sense အမ်ဒီ တို့ moisturizer တို့ကျွန်တောတို့ skin care step လေးတွေလည်းလိမ်းပေးသင့်တယ်နော. ဟုတ်ဟုတ်.အဲ့ဒါလေးတွေကလိမ်းပေးသင့်တယ်.ဘာလို့ဆိုတော့ moisturizer တို့ဘာတို့ကကျတော့ပေါ့နော.ဝတ်ရည်တို့ရဲ့အသားအရေမှာမညီမညာရှိတာတွေအမ်ပြီးတော့ ဟိုနေလောင်တာတွေဘာတွေပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းပိုပြီးတော့ cover ဖြစ်သွားအောင်လို့ moisturizer လေးသုံးပေးပါမယ်. Moisturizer လေးကိုအသားထဲကိုနည်းနည်းစိမ့်ဝင်အောင်လို့သေချာလေးလိမ်းပေးရမယ်ပေါ့နော. ဒီနေ့ကျွန်တောတို့ဒါ fancy orange makeup look လိမ်းမှာဆိုတော့တချို့ကလိမ္မောရောင်လေးတွေဝတ်ထားကြတယ်နော. အာဟုတ်ပ. အကုန်လုံးအဲ့ဒီတော့မှပိုပြီးတော့နော.အင်္ကျီလေးနဲ့. ဟုတ်တယ်. အမ်းလိုက်ကပ်သွားတာ. လိုက်ဖက်သွားမှာ. ကဲ moisturizer လေးလိမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကိုမိတ်ကပ် base တွေလိမ်းကြမယ်.မိတ်ကပ် base ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော.အာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်လေးတွေ အဲ့ဒီလိုမျိုးအသားအရေမညီတာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးညှိပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးတော့မှ foundation လေးတင်လိုက်တာဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့. ဟုတ်. အာဒီရဲ့ makeup base လေးလိမ်းပါမယ်ရှင့်. ဒါလေးပေါ့နော. ကျွန်တော foundation မလိမ်းခင်မိတ်ကပ် base အရင်လိမ်းတာပေါ့နော. ဟုတ်. ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တောတို့တွေဒါ foundation ကိုတန်းလိမ်းလိုက်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ဖူးတယ်. ဟုတ်. အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုမိတ်ကပ် ကိုခံလိမ်းတာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကွာခြားလဲ. အာမိတ်ကပ် base ခံလိမ်းတာက primer ခံလိမ်းတာကကျတော့လေ.သူကအဓိကကအသားအရေလေးကိုညှိပေးတယ်.ပြီးတော့ကျတော့ဆီတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိန်းပေးတာပေါ့နော. မိတ်ကပ်တန်းလိမ်းတာထက်စာလို့ရှိရင်. ဒီ steps တွေကနည်းနည်းပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်.ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကအသားထဲကိုစိမ့်ဝင်အောင်လို့လိမ်းပေးတာပေါ့နော. Foundation ကောင်းမှကျွန်တောတို့. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒီတော့တစ်နေကုန်ခံတာ.ဟုတ်. အခုနောက်ပိုင်းကလည်းကျွန်တောတို့မိတ်ကပ်ကိုလည်းအဲဒီလို create လုပ်ပြီးတော့လိမ်းလာကြသလို skin care ကိုလည်းအများကြီးဂရုစိုက်လာကြတယ်နော. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. Skin care ကတော့မလုပ်မဖြစ်ပေါ့နော. လုပ်ရမယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ skin skin ကောင်းတဲ့အခါကျတော့မှဝတ်ရည်တို့တွေကအမ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ကပ် look လေးကိုပြင်နိုင်တာပေါ့နော.အဲ့ဒီတော့ skin ကတော့အရေးကြီးတယ်. ရုံးရော skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလား.ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ. မလုပ်ဖြစ်ဘူးလား. ပျင်းတယ်. အများကြီးပဲ. နင်သေချာသင်ပေးရတော့မယ်. ဟုတ်ပ. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရော. ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ. ကျန်တဲ့သူတွေကလုပ်တယ်ထင်တယ်. ကျန်တဲ့သူတွေကလုပ်တာ. လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. လုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့. ရူးမဲတင်းနေတာထင်တယ်. ကဲမိတ်ကပ် ရပြီဆိုလို့ရှိရင် BB cream လေးလိမ်းမယ်.ဒီနေ့ဒီဟာကဒီ BB cream လေးလိမ်းမယ်ပေါ့နော.ပါးပါးလေးပဲလိမ်းကြမယ်. Baby cream ကို ကကျတော့လက်ပေါလေးမှာတင်တယ်.ပြီးလို့ရှိရင်မှမျက်နှာပေါတင်တယ်. Foundation ကိုဝင်းအမြဲတမ်းပြောနေကျအတိုင်းပဲ. ဟိုတစ်စက်ချင်းစီချတာထက်ပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုး မျက်နှာပေါမှာအများကြီးချလိုက်တဲ့ဥစ္စာပိုပြီးတော့ blend လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်. ဆိုရင်မျက်တွင်းအောက်ကနေစပြီးတော့လိမ်းတယ်. ဒီမျက်တွင်းအောက်ကနေစပြီးတော့မှနေရာလေးချလိုက်တယ်.ပြီးလို့ရှိရင်မှ brush လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် sponge လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ blend လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော. ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့နော. ဟုတ်.ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့. ဒီနေ့ကတော့လူငယ်ဆန်ဆန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ BB cream လေးနဲ့ပဲဝတ်ရည်တို့တွေပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့. Baby cream တွေများသွားတာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်ဆမတတ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရော ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲ. ဟုတ်. Baby cream ကများသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဖြူဝဲဘက်သွားတော့လေ နည်းနည်းပြာသွားတတ်တယ်ပေါ့နော.အဲ့ဒီတော့တကယ်လို့မျက်နှာပေါမှာတင်တာများသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတ်ရည်တို့ဒီ sponge လေးနဲ့အာ မသိပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော.ဆွဲဖယ်လိုက်တာ.ဟုတ်.မျက်မျက်နှာပေါကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွဲဖယ်လိုက်တယ်. စယူကတည်းကတော့ကျွန်တောတို့သေချာလေးချိန်ဆပြီးရွေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော. ဟုတ်ဟုတ်. ပိုးလို့ရှိရင်ပြီးတော့လည်ပင်းမှာလိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့.ဟုတ်. လည် လည်ပင်းကလည်းလိမ်းရမှာပေါ့နော. ဟုတ်ကဲ့.လည်ပင်းလည်းဒါတချို့ကတော့တစ်ခါတည်းအသားရောင်မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းနဲ့ညီအောင်တစ်ခါတည်းလိမ်းကြတယ်. ဟုတ်. တချို့ကကျတော့လည်းအဲဒီလိုမျိုးမညီတဲ့သူတွေကျတော့လည်ပင်းက လေးလည်းသတိထားပြီးလိမ်းဖြစ်တာပေါ့. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. လည်ပင်းကတချို့ကကျတော့လေလည်ပင်းကပိုးဖြူနေတယ်. ဟုတ်. မျက်နှာလေးက အဲဒီတော့လည်ပင်းရောမျက်နှာရောတစ်ခါတည်းအရောင်တူအောင်လို့လိမ်းလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော. ကဲအားလုံးမှီကြရဲ့လားရှင်.ဟာလက်တွေနဲ့ပဲချလေ.ကောင်းတယ်.မွေးနိုင်သလိုပဲ. ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဟိုလိမ်းတာနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုကွာတာလဲ. ဟုတ်.လက်နဲ့လိမ်းတာလည်းသူကလက်ရဲ့အနွေးဓာတ်လေးပေါ့နော.လက်ရဲ့ဒီလိုအနွေးဓာတ်လေးကနေပြီးတော့ လိမ်းလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့တော့အသားထဲစိမ့်ဝင်တယ်.ဒါပေမဲ့ကြာလို့ဝီကအဲ့ဒါသိပ်စိတ်မရှည်ဘူးဆိုမဆွဲတတ်ဘူး. အချိန်တော့နည်းနည်းလေးပိုပေးရတယ်.ဒါပေမဲ့လက်နဲ့လိမ်းလည်းကောင်းတယ်. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလိုလိမ်းတဲ့နည်းစနစ်တွေတော့မတူကြဘူးပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ညီမလေးတွေလည်းပြင်နေရင်းနဲ့ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်မေးလို့ရတယ်နော. တစ်ခါတည်းမေးတယ်. ကိုကြီးကိုမေးပါနော. ဒီနေ့ကျွန်တောတို့ဆုံဖို့ကမလွယ်ဘူးလေနော. နင့်ကိုအားမနာပါနဲ့.မကြောက်ကြပါနဲ့နော.ပေါ့ပေါ့ပါးပါး. အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင်လို့လိမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ ဒီနားလေးတွေမှာနည်းနည်း ဟိုဝက်ခြံလေးတွေ,မျက်ကွင်းညိုတာလေးတွေ,ဖုံးဖို့အတွက်ဒီ concealer လေးသုံးမယ်ပေါ့နော. Concept လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပဲယူသုံးမယ်.အယ်ကိုယ်လိုသလောက်ပေါ့.လက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်စေ.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် brush လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော.ကိုယ်လိုသလောက်တွေ.ပြီးကျတော့နည်းနည်းလေးယူမယ်. ယူပြီးရင်မျက်တွင်းအောက်ညိုတာလေးတွေလည်းနည်းနည်းဖြည့်မယ်. အားလုံးမှီကြရဲ့လားရှင့်. အားလုံးကဝင်ပြင်နေကျထင်တယ်.အဲဒီလိုဆိုတော့. ဟာလက်အရမ်းမြန်တယ်နော. ဟုတ်တယ်. အနီးနောက်ကနေ ထက်ထက်မကွာလိုက်နိုင်တာ. ဟုတ်ပ. ကဲမျက်တွင်းလေးတွေလေ.နည်းနည်းညိုတဲ့နေရာလေးတွေဖုံးမယ်. ပြီးရင်ဒီမေးစေ့နားလေးတွေပိုပြီးတော့မေးစေ့ချွန်သင်းရောင်လေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော. Lighting လေးပေးလိုက်တဲ့သဘော.အဲဒါနှာခေါင်းလေးတွေ. ပြီးရင်နဖူးပေါရယ်.ပြီးတော့မျက်လုံးပေါကိုလည်း တာဖြစ်ဖြစ် eye primer ဖြစ်ဖြစ်လိမ်းဖို့မမေ့နဲ့နော.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်ရည်တို့တွေ eye shadow ခြယ်တဲ့ အခါကျလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုပြောရမလဲ.အရောင်ထွက်အားပိုကောင်းတာပေါ့နော.မဟုတ်လို့ရှိရင်က ကိုယ်ခြယ်ထားတဲ့ eye shadow တွေကအရောင်သိပ်မထွက်မှာစိုးလို့. အရောင်သိပ်မထွက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ ဟုတ်.ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူး.သနားလို့ဖြစ်မှာပေါ့. ဒီနေ့ကကျတော့ လေးတွေ ချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တောတို့ color လေးတွေတောက်နေဖို့လိုတာပေါ့. ဟုတ်တယ်. ကဲပြီးရင်တော့ brush လေးနဲ့ လေးနဲ့မီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်. .အားလုံးညှိတယ်နော. ညီမလေးဒီဟာအကုန်ပြင်နေကျထင်တယ်. ဟုတ်တယ်. ရုံးကလည်းသူ သူပြင်တတ်တယ်နော.သူမပြင်ဖူးတာပြောတာ. မပြင်ဖူးဘူးဆိုတာလျှောက်ပြောတာတဲ့. အရမ်းမပြင်တတ်ဘူး. အရမ်းတော့မတတ်ဘူး. အခု week ပြောတဲ့ step တွေအတိုင်းအိမ်မှာပြင်နေကြလား. မဟုတ်ဘူး. အခုမှပြင်တာပဲ.ပြင်းလို့ပဲ. နောက်ကျနေတာ.မှန်တော့ လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ.ပြီးရင်အနီးကပ်မှန်လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော.မီးကိုခဏစောင့်ပါနော. ညီမလေးပိုးဝင်းမဟုတ်ဘူး.ပိုအဆင်ပြေလား.ပြေတယ်နောညီမလေး. တစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်နှစ် ကဲဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီရှင်. ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်ကဲ့ပါ.အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တောတို့ဒါ မိတ်ကပ်လုပ်တဲ့ပထမဦးဆုံး step လေးတော့ပြီးသွားပါပြီ.ကျွန်တောနောက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ step တွေရှိပါသေးတယ်.တီဗွီရှေ့ကနေမခွာဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော. ဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Thilawa Onlight One Star အချိန်ခဏလေးပေးရုံနဲ့နူးညံ့စိုပြေရေဓာတ်ပြည့်ဝစေတဲ့အသားအရေလေးကိုရမှာပါ. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်နိုင်ငံကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအနေနဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဂျပန်မြန်မာပွဲတော. ဒီနေ့မှာတော့ ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီရေးစပ်မှုပုံစံအသစ်နဲ့ရောက်ရှိလာမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခု. မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကျန်းမာပျောရွှင်စေဖို့ရည်ရွယ်တင်ဆက်တဲ့သတ္တမအကြိမ်မြောက်ဂျပန်မြန်မာပွဲတောကြီးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျောအဆိုတောတွေဖြစ်ကြတဲ့သီလဟာရကနဲ့မိုဒီဆာကီဝင်း. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ကြတဲ့စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နီနီခင်ဇော X box မင်းလှသံစဉ်တို့ရဲ့ဖျောဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ Covening ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန်အတွက်လှူဒါန်းမှုတွေကိုတစ်ပါတည်းပြုလုပ်နိုင်မယ့် Charity online show ဖေဖောဝါရီလတစ်ဆယ့်လေးရက်နေ့မှာ MNTV Channel နဲ့ အခြား social media platform များကနေတိုက်ရိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်. We နဲ့အတူရောကျွန်တောတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ fancy orange wait card လို့ပြင်ဆင်ဖို့လေးကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ. ဒါဆိုရင်ဝင်းတို့ကအခု foundation တွေပြီးသွားပြီ. ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲကြမယ်.မျက်ခုံးမွှေးကိုမျက်ခုံးမွှေးမဆွဲခင် အာဒီလို brush လေးနဲ့ပေါ့နော.ဒီ လေးနဲ့အရင်ဆုံးမျက်ခုံးမွှေးကိုခြစ်လိုက်မယ်.အဲ့ဒါမှဝတ်ရည်တို့နည်းနည်းလဲနေတယ်.ထောင်တယ်.မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေအားလုံးကသူ့နေရာလေးနဲ့သူနေရာတကျလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော. ပြီးရင်တော့ဖြူဖြူကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်မျက်ခုံးမွှေးလေးရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ.အမ်မျက်ခုံးမွှေးဆွဲချမယ်.မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့အခါမှာဝိအမြဲတမ်းပြောပါတယ်. နေကြည့်ကြည့်ဝေးကြည့်ကြည့်.နေကကြည့်လိုက်အဝေးကကြည့်တယ်.ကြည့်ပြီးတော့ဆွဲရတာပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော. ဒီနေ့တော့ ခဲတံလေးအသုံးပြုမယ်.ဒီ ကဒီခဲတံလေးနဲ့ အကုန်လုံးဆွဲတဲ့ခဲတံလေးနဲ့ဆွဲပါမယ်ရှင်. အနီးကိုလည်းကြည့်မယ်. လက်လေးကိုထောက်ထားပေါ့နော.လက်လေးနည်းနည်းလေးထောက်ထားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုထောက်ချွန်လိုက်.အဲဒီလိုမျိုးသုံးအသုံးပြုသလိုပဲ.ဒီလက်ကဒီမှာထောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာက အာဘယ်လိုပြောရမလဲ.ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော. Control ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့. ဒါကတော့မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့နည်းလေးပါရှင့်. ဒီနေ့ ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တောတို့မျက်ခုံးမွှေးဆွဲရင်အရမ်း အထူကြီးတော့မဆွဲဘူးပေါ့နော. ဟုတ်. ဒီနေ့မျက်ခုံးမွှေးကိုလည်းပါးပါးလေးပေါ့နော. နည်းနည်းပါးပါးလေး. အနက်ရောင် ဟုတ်. ကဒီအညိုပြေပြေလေးပေါ့. ဟုတ်. အညိုပြေပြေလေးဆွဲတာ. အနက်ရောင်လည်းရတယ်. မီးခိုးလည်းရတယ်. အရောင်ပြေပြေလေးဆို ပြေပြေလေးတွေပေါ့နော်. ဟုတ်. ကိုယ့်ရဲ့နဂိုရှိပြီးသားမျက်ခုံးပုံစံအပေါ်မှာပဲ. ဟုတ်. ဘောင်လေးအရင်ကွပ်မယ်.ဘောင်လေးကွပ်ပြီးသွားရင်မီးကိုဒီအမြှီးလေးကိုအရင်ဖြည့်မယ်. အမြှီးလေးကိုကအားဘယ်လောက်သုံးပြီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်.ဘာမှမဖြစ်ဘူး.ဘာလို့ဆိုတော့အမြှီးကနက်သွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး.ကိစ္စရှိတာကဝတ်ရည်တို့ဒီထိပ်ပေါ့နော. ဒီထိပ်.အဲ့ဒီထိပ်မှာဝတ်ရည်တို့အားသုံးမိလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းထူသွားတာပေါ့.ထူသွားပြီ.အရောင်ကလည်းများသွားတယ်.ပြီးတော့ဝိလိုမျိုးမျက်ခုံးမွှေးဒီနားမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့သတိထားရတယ်. အဲ့ဒီမှာအရှေ့နားလေးမှာထူသွားရင်ကျွန်တောတို့ကသဘာဝသိပ်မကျတော့ဘူး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အရှေ့နားမှာတော့ထူသွားရင်နည်းနည်းရုပ်ရင့်သွားတယ်. Angry Bird လေးတော့ ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းလိုက်တယ်.အဲဒါတချို့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးကြီး သမင်ဆွဲတာလားမသိဘူး.ကျွန်တောတွေ့ဖူးတယ်. တချို့ကျတော့လည်းလိုက်တယ်.သူတို့နဲ့ထူထူထဲထဲလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာလိုက်တယ်. တို့ကျတော့ဒီနားမှာအမွှေးလေးတွေလည်းရှိနေပြီးသားဆိုတော့ အဘွားလေးပဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော. ကဲအနီးကြည့်လိုက်.အဝေးကြီးကြည့်လိုက်. ရေအခုထိပြင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လား. သိတယ်ရှင့်. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရောအဆင်ပြေလား. နိုင်နိုင်လား. ညီမလေးစိမ်းလဲ့ဆီကညီမလေးတစ်အိုးတော့ပြည့်လား.ဟုတ်ကဲ့. ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်ပြေပါတယ်ရှင့်.ဟုတ်. မီးကိုပဲစောင့်နေရတာထင်တယ်. ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်အဆင်ပြေလား. ဟုတ်.ပြေပါတယ်. ပြေပါတယ်နော.ညီမလေးစန္ဒာအောင်ရော. Like တွေရှာတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့. ပြောရင်းနဲ့အဝေးကဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးထူသွားတာ.အားမရသေးတာ. .အဲဒါလည်းဝေး. ကျွန်တောကြည့်ပေးမယ်.အဝေးကို. ကြည့်ပေးပါဦး. ကဲဒါဆိုရင်ရပါပြီ.မျက်ခုံးမွှေးကတော့ ပြီးရင် ပြီးရင်ဝတ်ရည်တို့ဒီမိတ်ကပ် look ရဲ့ main ပေါ့နော.အဓိကကတော့ဝတ်ဒီနှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်လေးကိုအသုံးပြုသွားမှာပါ.မျက်လုံးရော eye shadow အနေနဲ့ရောပါးနီလေးနဲ့ရောနှုတ်ခမ်းနီအနေနဲ့ရောပေါ့နော.ဒီဟာလေးကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးသွားမှာပါ. အောကျွန်တောတို့ဒီတစ်မျိုးတည်းနဲ့ အယ်နှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်တစ်တောင်တည်းနဲ့ကျွန်တောတို့သုံးမျိုးပြည့်မှာပေါ့နော. ဟုတ် အဲဒီတော့ဝတ်ရည်ကိုဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကိုလက်လေးပေါမှာဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်မယ်.တင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် ပြီးတော့ရှင်မှာ brush လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ကိုယ်နှစ်သက်ရာပေါ့နော. အဲဒီလိုမျိုးလေးယူလို့ရတယ်. We ကတော့ brush လေးနဲ့ယူလိုက်မယ်. Brush လေးနဲ့ယူလိုက်ပါမယ်ရှင်. ယူပြီးတော့ ယူ ယူပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှာ eye shadow လေးမှာထည့်လိုက်မယ်.မျက်လုံးလို့. ရွံရဦးမှာ.ပါးမှာထည့်လိုက်တာ. လဆန်းပါတယ်ထင်တယ်. ရတယ်.ပြီးရင်လည်းပါးလွှာ အဲဒီအတိုင်းလေးလည်းလှတယ်. အဲဒီအတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါ. ရပြီ.ရပြီ.မဖျက်နဲ့. ကျွန်တော screenshot ရိုက်လိုက်. အင်းပါတဲ့. သူ့သီချင်းနဲ့သူပြန်ထိတော့မယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားတယ်လေနော.စတိုင်ပေါ့.အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ. စတိုင်ပေါ့. ကဲ eye shadow လေးကို video မျက်ခွံလေးကနေပြီးတော့အပေါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာပေါ့နော. ကျွန်တောနှုတ်ခမ်းနီနဲ့လည်း eye shadow ခြယ်လို့ရတယ်နော. ဟုတ်.နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ sharing ခြယ်လို့ရတယ်.တချို့နှုတ်ခမ်းနီတွေဆိုသူကလုံးဝ ဟို official announce လုပ်ထားတာ.မျက်လုံးပေါလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော. ဒါဆိုကျွန်တောတို့ eye shadow လည်းမကုန်တော့ဘူး.ဝေ့. မကုန်တော့ဘူး.ဟုတ်ကဲ့. အဲ့ဒါကြောင့်လေနှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင့်ရှိရင် အာတောတောများများအဆင်ပြေတယ်.ခရီးသွားလို့ရှိရင် လွယ်လွယ်ကူကူနှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင်ယူသွားလိုက်.ပြီးရင်အဲ့ဒါပါးနီတွေရော eyeshadow တွေရောကြိုက်ကုန်သလိုရတာနော. ဒါဆိုရင်ကျွန်တောတို့တရားဝင်မပြောထားတဲ့တံဆိပ်မပါတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတွေကျတော့မသုံးသင့်တာလား.ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သုံးမိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲ.အသားအရေ. အင်း.သုံးပြီးရင်တော့အားလုံးကမျက်နှာပေါမှာသုံးဖို့အတွက်ပဲထုတ်လုပ်ထားတာဆိုတော့လေ.အဲရတော့ရပါတယ်.ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဆီများတဲ့နှုတ်ခမ်းနီတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ မျက်လုံးပေါမှာအဆီပြန်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော.ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကဒီ ရပါတယ်.ကိုရီးယား brand တွေတောတောများများလည်းရတယ်. ပေါ့နော.ဟုတ်. အဲဒါဆိုအရမ်းတော့စိုးရိမ်စရာတော့မရှိဘူး. ဟုတ်.အရမ်းတော့စွဲစရာမရှိဘူး.အကုန်လုံးဒီလိုပဲသုံးကြတာဆိုတော့. မျက်နှာအသားအရေပေါမှာမူတည်ပြီးတော့အဲဒီလိုအရမ်းအဆီပြန်တဲ့ဟာလေးတွေပဲသုံးတယ်ပေါ့. ညီမလေးအေးချမ်းပါတယ်. ခြယ်ထားတဲ့အရောင်လေး we ရှင်. ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်အဆင်ပြေလား.ကြည့်ပေးပါဦး. အော. ပြေတယ်.သူကလေနည်းနည်းဟိုကင်မရာအရောင်ကြောင့်လားမသိဘူး.နည်းနည်းလေးတော့ပန်းရောင်လေးကောင်းတယ်.ဒါပေမဲ့ရတယ်.ကိစ္စမရှိဘူး.ဝတ်ရည်တို့အခုဟို အရောင်လေးပဲနည်းနည်းကွဲသွားတာပေါ့နော.ပြင်ပုံပြင်နည်းကတော့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်မှာဆိုတော့လေ. ဟုတ်ကဲ့.ဟုတ်. ဟုတ်.ညီမဟိုသုံးတာလိမ္မောရောင်စစ်စစ်ပဲ.ဒါပေမဲ့မျက်လုံးအောက်ရောက်မှပန်းရောင်နဲ့ရမှာ. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒါဖြစ်တယ်.ဖြစ်တတ်တယ်. We love အဲ့ဒီလိမ္မောရောင် ခြယ်လို့ရှိရင် သတိထားတယ်.တစ်ခါတလေ brush ကလည်းအရောင်ကူးတယ်လေ.သိလား. အင်း. Brush ကလည်းအရောင်ကူးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဟို အဲ့ဒီလိုမှားတတ်တယ်ပေါ့နော. ဟုတ်. ရတယ်.ရတယ်.ဒါကိစ္စမရှိဘူး. Eyeshadow လိမ္မောသီးတော့ရှိတယ်.နည်းနည်းဖြေလိုက်မယ်. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. Eye shadow လိမ္မောနဲ့ we love ပြန်ဖြည့်မှာ. ပိုတောင့်လိမ့်မယ်. ပြီးရင်ဒီအရောင်လေးကိုပဲဒီမျက်လုံးအောက်လေးကိုလည်းထည့်မယ်ပေါ့နော. .ပြီးရင်ဒီနေ့ makeup look ကကျတော့လည်းကျွန်တောတို့ဒီလိမ္မောဘက်ကိုအသားပေးပြီးပြင်မယ်.ဒါပေမဲ့ ဟိုဒီမိန်းကလေးတောတောများများနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ look ကလေးတွေပေါ့နော.ကျွန်တောတို့အသားညိုညိုအသားဖြူဖြူလိုက်ပြီးပြင်လို့ရမယ့်အလုပ်ကလေးပေါ့. ဟုတ်တယ်.ဒီလိမ္မောရောင်ကကျတော့သူက one done ဘက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေ နည်းနည်းလူတိုင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မယ်.ဝတ်ရည်တို့မြန်မာအသားအရေဆိုအဝါလေးတွေအဖြူလေးတွေအညိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော.လူတိုင်းနဲ့.ပြီးတော့ပြင်ရတာအရမ်းလွယ်တယ်. ဟုတ်တယ်.ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တောတို့နှုတ်ခမ်းနီလိမ္မောရောင်နဲ့ သုံးမျိုးလောက်ပြင်မှာဆိုတော့တောတောကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာတယ်. အရမ်း အားလုံးကြိုက်နေကြပြီ. အားလုံးကတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူသက်သာချောင်ချိပေါ့နော. ဒါကျတော့လိမ္မောရောင်တွေပဲပြင်နေဦးမယ်ဝတ်ရည်. ဒီနှစ်ကျတော့ကျွန်တောတို့ဘယ်လို trend လေးတွေခေတ်စားလာနိုင်လဲ. ဟုတ်.ဝတ်ဆင်တာတော့လေ.နှစ်ထောင့်နဲ့နှစ်ဆယ့်တစ်မှာတော့ဟိုဒီလိုမျိုးအရောင် crazy color လေးတွေခေတ်စားမယ်.နီယောတွေခေတ်စားမယ်ပေါ့နော. နေရုံတွေခေတ်စားမယ်.ပြီးတော့ကျတော့ဟို clean look လုံးဝ clean ပါးပါးကြည်ကြည် look လေးတွေလည်း ခေတ်စားမယ်ပေါ့.အဲ့ဒီလိုမျိုးထင်တယ်.ဟုတ် ကျွန်တောတို့က အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တောတို့ mask ကမဖြစ်မနေတက်ရမယ်လေနော. ဟုတ်တယ်. ဆိုတော့ဒီမျက်လုံးတစ်ဝိုက်လေ.အပေါအပေါပိုင်း မျက်နှာအပေါပိုင်းလေးကိုကျွန်တောတို့ကအဓိကထားပြီးတော့လှအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြင်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးလာတယ်.ပိုပြီးတော့နော. ဟုတ်တယ်. ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးလည်းပိုပြီးတော့သတိထားပြီးပြင်လာကြသလိုပဲ. ဟုတ်တယ်.အဓိကကတော့ပေါတာမျက်လုံးပဲရှိတာကိုး.မျက်လုံးမှာအားတွေ အကုန်လုံး အဲဒီတော့မျက်လုံးကို day သေချာလုပ်ထားတာပေါ့နော.အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင်ဘာညာပေါ့.အမ်း ဒါဆိုရင်ဒီ cream လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် week ကတော့ ရဲ့ဒီ eye shadow palette တွေကလိမ္မောရောင်လေးပေါ့နော.လိမ္မောရောင်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ထပ်ပေးပါ့မယ်. လိမ္မောရောင် eye shadow palette လေးတွေရှိကြလားရှင်.ပြပါဦး.အယ်အဲ့ဒီဟို အောရတယ်.ရတယ်.အဲဒီမှာလိမ္မောရောင်လေးပါတယ်.အဆင်ပြေတယ်.အေးချမ်းပါတယ်.အဆင်ပြေတယ်. နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒီလိုအရောင်လေး.ဟုတ်တယ်.သင်ဇာပဲ.အဆင်ပြေတယ်. အိုကေ. ညီမလေးစန္ဒာအောင်. စန္ဒာကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်.ရတယ်.အဲ့ဒီလိုအရောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေး လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော.လုံးဝယွန်းလည်းရတယ်. ဟုတ်.မရှိတော့ဘူး.လေးပွဲတောင်မရှိတာ. ဪလိမ္မောရောင်မရှိဘူးလား.ယွန်းမာ. မရှိဘူးပဲရတယ်.ယွန်းအရောင်ကတောတောတော့. တောတောတော့ဟိုဟာဖြစ်နေပြီ. ဒီကောင်ကအရောင်တော့ထွက်နေပါပြီ. အရောင်တော့ထွက်နေပြီ. အဲ့ဒီအပေါလေးမှာနည်းနည်းလေး. ဒီမှာလေပိုညီမလေးပိုးဝင်းမောင်ဖို့ရော.အဆင်ပြေလားညီမလေး. ဟုတ်.အစ်မကိုပြပါဦး. အမ်း.ဒီဒီဒီဟာဆိုရင်နော. အောရတယ်.ရတယ်.ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒါလည်းရတယ်. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ colour ခြယ်တာကဟိုထွက်တဲ့အရောင်လေးတွေကတော့အသားအရေပေါမူတည်မယ်ထင်တာပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.အသားအရေပေါမူတည်တယ်.ခုနကဝင်းပြောသလို brush ကလည်းစကားပြောသေးတယ်. Brush ပေါမှာလည်းပါသွားလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းပေါ့နော.အရောင်လေးတွေ ပြောင်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်. ဒါဆိုကျွန်တောတို့ festival တွေဘာတွေသွားလို့ရှိရင် ကိုယ်ကအထင်းဆုံးဖြစ်နေမှာ. Mask တပ်ထားရင်တောင်ထင်းနေပြီ. Mice တပ်ထားရင်တောင်မျက်လုံးပစ်ချမယ်တို့ဘာတို့ ရိုးနို့ဆိုသာ သီချင်းတွေဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး look လေးတွေလည်း ပြင်ရင်အဆင်ပြေမယ်နောအစ်ကိုကြီး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ပြင်တော့မှာတဲ့.ပြင်တော့မှာတဲ့. ဒီနေ့စပြင်ပြီ. အရမ်းကြိုက်သွားပြီ. အမ်း. အမ်း.ဒါကတော့ဒါကတော့အစ်ကိုအကုန်မပြီးသေးဘူးနော. ပြော.အကုန်ပြီးပြီဆိုရင်မျက်နှာမသစ်တော့ဘူးတဲ့.ဒီအတိုင်းအိပ်ထားဦး. ဒါဆိုရင်မျက်လုံးအပေါအောက်လည်းပြီးသွားပြီ.ဆိုလို့ရှိရင် ကို eyeliner လေးဆွဲကြမယ်. Eyeliner ကလည်းဆွဲရမှာပေါ့နော. Eyeliner ကလေဟို ဟိုတချို့ကကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်.မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်. We are ကတော့ eye liner ကိုမသိမသာလေးပါတယ်ဆိုရင်ရောပေါ့နော.အဲဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်. မျက်လုံးအောက်လေးထဲကနေပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော eyeliner ဆွဲတာတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်အရမ်းအထူကြီးမဆွဲကြတော့ဘူးနောအစ်ကိုကြီး. ဟုတ်တယ်. အခုက eye shadow ကိုအရမ်းအသားပေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော.အဲဒီလိုအဲဒီလိုဖြစ်သွားတာ. Eye shadow ကိုပဲများသောအားဖြင့်သေချာအချိန်ပေးပြီးတော့ ခြယ်လေ့ရှိကြတယ်. Liner ကိုတော့ weight ခုထည့်လိုက်သလိုမျိုးလေမသိမသာလေးပါတယ် လေးပဲထည့်ကြတော့တယ်.ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမျက်တောင်. မျက်တောင်ကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ကောကြတယ်.မျက်တောင်ကော့ကောလေးတွေနဲ့ eye shadow လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော. ဟုတ်.ညီမလေးပွဲပွဲမှာပိုအဆင်ပြေလား. သူကြိုက်နေတာကျွန်တော. အားရပါးရကျွေး. ပြည့်တယ်လေ.အဲ့ဒါသူက မှန်တော့ဝိလည်းအဲဒီလိုပဲ.ဒီမှာနည်းနည်းဘာညာလက်ကမဆန့်တော့လို့. ဪဟုတ်. မဟုတ်ရင် လည်းအဲဒီလိုပဲ.လှန်ပြီးတော့ဆိုးရတာ. ဟုတ်.ဟုတ်. အရမ်းပျံ့သွားမှာစိုးလို့. ကျွန်တောတို့ကြည့်ရတာအကုန်လုံးပြေပြင်တာက step တွေကအဆင်ပြေတယ်ကွာ.ဒီစင်္ကြာတောမှာအကုန်လုံးကအားရပါးရကြီးတွေဖြစ်ကုန်လို့. ဟုတ်ပ. ရုံးကပြီးသွားပြီလား. မဆွဲရဲဘူး. အာ liner မဆွဲဘူးလား. ဪ. မအိပ်ရဲလို့. ဪ. ပုံမှန်ဆိုရင်ရောဆွဲနေကြမဟုတ်ဘူးလား.ယွန်းက. အင်း.အဲဒီနေရာကလှိုင်သာယာကိုမဆိုးဖြစ်ဘူး. ဪမဆိုးဖြစ်ဘူး. ဟိုဒီအပေါနားလေးပဲအဲဒီလိုလေးပဲဆွဲဖြစ်တယ်. ဟုတ်.အောက်ထဲ. ပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးမဆွဲရဲတာတို့.ယွန်းတို့လိုလူမျိုးကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.မျက်လုံးလေးတွေပေါ့. အမ်းအမ်း.ဘယ်လိုပြောရမလဲ. Liner မဆွဲရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှလေ. Eye shadow အမှုန့်လေးတွေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးတစ်စောင်းစာလောက်တွေပေါ့နော.အဲဒီလိုမျိုးလေးသုံး. Liner ပုံစံလေးသုံးလည်း မသုံးခင်လည်းရပါတယ်.အခုခေတ်က liner ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းကေ သိပ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော. မျက်တောင်ကော့မယ်.မျက်တောင်ကော့စက်လေးနဲ့သေချာကော့မယ်. ညှပ်မိရုံပဲနော.ကျွန်တောဖြည်းဖြည်းညှပ်မယ်. .သတိထားနော. ကျွန်တောတို့အရေးကြီးတာပဲနော. ဟုတ်. Mascara ကလည်းအရေးကြီးတယ်.အပေါရောအောက်ရောပေါ့နော. Off လေးပါပါးပါးလေးဆို. ဟုတ်.အောက်ကိုပါ.ပါးပါးလေး. Mascara ကတော့သူဆိုးတယ်. အာ mascara ကတော့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အသက်ပေါ့နော.အရမ်းကြိုက်ကြတယ်. Mascara အားလုံးလိုက်မှီတယ်ထင်တယ်နော. အားလုံးလိုက်မိကြလားညီမလေးတို့. အခုကြည့်ထားတာကတော့အကုန်လုံးကလေဝေးနဲ့ထပ်ချက်မကွာဘဲလိုက်ပစ်နေတာ. ဟုတ်ပ. ဝေးပဲ.ဝေးပဲနည်းနည်းပဲနောက်ကျနေတယ်. နောက်မကျပါဘူး. အဆင်ပြေပါတယ်.အိုကေ. ဒါဆိုရင် eye makeup လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ မီးကလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော.ဟုတ်. ဟုတ်.အရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုအာအရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုအာ feedback ပေးပါမယ်. အဲဒီညီမလေးကသူကကျတော့သူလည်းအဲဒီလိုပဲ.လိမ္မောရောင်သိပ်မပေါက်ဘူးပေါ့နော. Eye shadow ခြယ်ထားတာမှန်တယ်. ဒါပေမဲ့အရောင်လေးတော့နည်းနည်းလေးမှားနေတယ်.ခုနက week ပြောသလိုမျိုး brush မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလို အမှုန်လေးတွေနည်းနည်းရောသွားလို့ရှိရင်အရောင်လေးတွေရောတတ်တယ်.ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်. ပြီးရင်နော.ဒီမှာလေ.စိမ်းတဲ့နှင်း.စိမ်းတဲ့နှင်းက အယ်စိတ်နဲ့နေတယ်. Blending color blending ကလည်းအဆင်ပြေတယ်. အာ foundation လေးတော့နည်းနည်းလေးပါးတယ်ပေါ့နော.ပြီးတော့ကျတော့အာ blending ကိုဒီဘက်လေးဒီမျက်လုံးထောင့်လေးမှာပါနည်းနည်းလေး ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်.ဟုတ်. .ပြီးလို့ရှိရင်ညီမလေးသင်ဇာဦး သင်ဇာဦးကအယ်ညီမလေးသင်ဇာဦးက eye shadow အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းနေတယ်. သူကဒီဒီနားနဲ့အယ်မျက်မျက်ခုံးနဲ့ပေါ့နော.မျက်ခုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကနည်းနည်းလေးနီးတဲ့အခါကျတော့ အရောင်လေးကိုဒီထက်မကပိုပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ဆိုးလို့ရတယ်.ကျန်တာကတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်. ဟုတ်.ဟိုဘက်သွားရအောင်. .ပြီးရင်ဇွန်း. ယွန်းကတော့ယွန်းကအဆင်ပြေတယ်.ပါးယံတယ်. ပါးနီလေးကြိုဆွဲလိုက်တာပေါ့နော.ကြိုးလည်းရိုက်တာပေါ့.အဲ့ဒါစတိုင်မဟုတ်ပါဘူးလို့.ကြိုဆွဲမိတာ. ပြောပြလိုက်ပါဦး.ပရိသတ်ကြီးကို. အမ်.ကျန်တာကအဆင်ပြေတယ်.မျက်ခုံးမွှေးလည်းအဆင်ပြေတယ်. ပြီးတော့ color branding ကလည်းအရမ်းကောင်းတယ်.ပြီးတော့ liner လေးပါသွားလို့ရှိရင်တော့ perfect ပေါ့နော. ဟုတ်.အဆင်ပြေပါတယ်.ယွန်း. ဘားနီလေးကြိုးဆွဲထားလေလို့. ညီမလေး ညီမလေးပိုးမွှားမှုန်ကကျတော့အမ်သူလည်း eye shadow အရောင်လေးတောတောတော့နည်းတယ်.ဒါကင်မရာထဲမှာလား.ဘာလို့လဲတော့ဝီရီမသိဘူးပေါ့နော. ဒါပေမဲ့အရောင်လေးနည်းနည်းလေးနည်းတယ် အာ ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ. Eye shadow အရောင်လေးကို pop up ဖြစ်အောင်လို့ပိုပြီးတော့ထည့်လို့ရှိရင်တော့အရမ်းအဆင်ပြေမှာ. ဟုတ်.အယ်ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်.ဟုတ်.ပြီးတော့အေးချမ်းပိုင်. Agent file ကတော့ခုနကသူပြောတဲ့အရောင်အရောင်ရောသွားတယ်လို့.ခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်. ပြီးတော့တကယ်လို့ထပ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော.အရောင်လိမ္မောရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးမျက်လုံးတစ်ပြင်လုံးနီးပါးပေါ့နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ထည့်ပြီးတော့ ထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်.ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေတယ်. Liner လေးဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးထွက်နေတယ်.ကျန်တာအဆင်ပြေတယ်. ဟုတ်. ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့အခု eye makeup လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော. အဲ့ဒီမိတ်ကပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုမျိုးမိတ်ကပ်တွေဆက်ပြီးတော့ချဲ့မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်. ခေတ်သစ်မှာဆန်းသစ်မှုတွေများစွာနဲ့ပရိသတ်ထံကိုရရှိလာမယ့် Happy Bank အရင့်နဲ့မတူဘဲ အခုနွယ်ကဘာတွေသိမှာလဲ. ဆီတွေပုဆိုးနဲ့ဒူချင်ပြုတ်.ဟာမိုက်တယ်. ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုခံစားနိုင်သလို ကျွန်တောတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖလှယ်ရင်း ဗဟုသုတတွေရရှိစေမယ့်အပြင်စိတ်လည်းပျောရွှင်စရာလေးပါ.သာမန်သာ .ဒါတွေဘယ်ကရမလဲ. ပရိသတ်တွေရယ်မောပျောရွှင်နိုင်မယ့်ပခန်းရဲ့ဟာသတွေလာဦးမှာနော. TV ရှေ့ကမခွာနဲ့. Final သုံးမှာ. ဒီလို စိတ်ဝင်စားဖွယ်များစွာကိုကြည့်ရှုခံစားရမယ့် Happy ကျွန်တောရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်.အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တောတို့ဒါနောက်ဆုံး step ကိုရောက်ပါပြီ.အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေထူးခြားပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်. ခုနကပြောသလိုပဲဝတ်ရည်တို့ရေဒါနောက်ဆုံး step ပေါ့နော.ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ အဆင့်ထဲမှာပါတယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်ရည်တို့ခုနကပါးနီလေးတွေပါးနီလေးကို အယ်ဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှဆိုးကြမယ်.ပါးနီကအရောင်လေးနည်းနည်းလေးနှုတ်ခမ်းနီကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးတောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော.သတိထားပြီးတော့ဆိုးရမယ်. Branding ကိုသေချာလုပ်ရမယ်.အဲ့ဒီတော့ we are အာယူလိုက်တယ်. ယူပြီးလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့ပဲ လက်လေးနဲ့ယူပြီးတော့မှမျက်နှာပေါမှာတင်လိုက်မယ်. ကိုယ်ရေလိုက်သလိုပြုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါလာတယ်.ဒီပါးမှုန့်လေး ပေါ့နော.အဲဒီပုံလေးမှာတင်မယ်.ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ခါတည်း spot ကလေးနဲ့ brand blending လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော.မဟုတ်လို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့ အာအရောင်ကကွက်သွားမှာတွေဘာတွေကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့ သမီးရေဒါဆိုဟိုမှာယွန်းကကွက်နေပြီထင်တယ်. ယွန်းပလိုင်းကြည့်ပါဦး. ရုံးကကြိုပြီးတင်ပေးလိုက်တော့လေ.သူအရောင်ကိုအမှန်ထွက်သွားတာ. မျက်နှာသစ်ဖို့အချိန်ပေးရမယ်. ရပါတယ်. Blend blend လုပ်လို့ရှိရင်အမ်းတို့တို့ပြီးတော့လုပ်သွားလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်. ရလားရော့. အဆင်ပြေရဲ့လားပြောလေ. နည်းနည်းတော့ခဲနေတယ်. နည်းနည်းတော့ခဲတယ်ဗျ.ဒါပေမဲ့လည်းချစ်စရာလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော. စတိုင်ပေါ့.ဒါစတိုင်ပစ်တိုင်အသစ်.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာယူစတိုင်အသစ်နဲ့စပါမယ်. မက်မွန်အသီးလေးလိုဖြစ်နေပြီ.မက်မွန်သီးကာလလိုဖြစ်နေပြီ. .ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်း အဲဒီလိုပဲ.တစ်ဖက်ချင်းစီလုပ်တဲ့ we are men ဟိုဟာကွက်တာတို့ဘာတို့ကြောက်လို့ပေါ့နော.အဲဒီတော့ဒီဘက်ကိုလည်းလုပ်မယ်. ပါးနီကလေဟိုအမျိုးမျိုးခြယ်လို့ရတယ်သိလား. အခုဒီနားလေးမှာခြယ်ကြတယ်.တချို့ကကျတော့ဒီမျက်လုံးကာလာလေးနဲ့စပ်စပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးတွေမှာခြယ်ကြတယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအယ်ပိုးဝတ်မှုန်ခြယ်သလိုမျိုးဒီလိုအတန်းလိုက်တွေခြယ်ကြတယ်.ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့နော.ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆိုခြယ်လို့ရတယ်. သူကဒီနေ့အလုပ်ကကောဘယ်လိုကြက်ဥကိုထည့်လို့ရလဲ. ဟုတ်.ကြိုက်သလိုခြယ်လို့ရတယ်.ဒီနေ့လုပ်တာလည်း ညီမလေးပေါအဝတ်မဟုတ်ဘူး.အထူချယ်ထားတာမျိုးဆိုတော့အလယ်နားလေး. ဟုတ်တယ်.သူအလယ်လေး.ဒီလိုလေးဖြတ်ပြီးတော့တချို့ဆိုနှာခေါင်းလေးတွေပါဖြတ်ချယ်. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.အဲဒါလည်းအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် လူငယ်လည်းအရမ်းဆန်တယ်. .ဆိုတော့ပါးနီတို့ဘာတို့လည်းခြယ်လာကြတယ်နော. .အဲ့ဒီတော့ပါးနီချယ်ရီကျတော့ကျွန်တောတို့ ဘယ်လိုမျိုးအယ်ကိုယ့်မျက်နှာကျပေါမူတည်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလိုက်ဖက်မှုရှိလဲ. ဟုတ်.ပန်းတွေကတော့အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်.မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံသေလည်းရှိတယ်.ဒါပေမဲ့အယ်အခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိပ် ဟိုဘောင်နဲ့ဆေးနဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော.အခုခေတ်ကကျတော့အဓိကဖက်ရှင်ခေတ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ.ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်လိုက်ဖက်မယ့်အလုပ်ကလေးတွေကိုခြယ်ကြတာများတယ်. Rose မရှိဘူးပေါ့နော. Music ရယ်လို့တော့ထွက်မတတ်တော့မရှိဘူး. အာဒီနေ့လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တောတို့အယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေနဲ့ပိုပြီးတော့လိုက်တာပေါ့နော. လေးတွေကလည်းနည်းနည်းတောက်တောက်ကလေးသုံးတာ. ဟုတ်တယ်. ဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေး. ပြီးရင်တော့ဝတ်ရည်တို့အာဒီ BB လည်းသုံးထားတယ်ဆိုတော့မေဦးတို့လိမ်းထားတဲ့မိတ်ကပ်လေးတွေကိုကြာရှည်ခံအောင်လို့အာဒီ loose powder လေးနဲ့ set လုပ်ကြမယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအာ two way ပေါ့နော.တချို့ကကျတော့လည်း comfort powder သုံးကြတယ်ပေါ့. ဒါကတော့ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်. We ကတော့ loose powder လေးသုံးပေးပါမယ်ရှင်. .အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောဒီနေ့ဒီ မိတ်ကပ် look ပါ. ဟုတ်. အယ်ပြင်ဆင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလည်းဟို step တွေအများကြီးကျွန်တောတို့သုံးစရာမလိုဘူးနော.ဒီနေ့ဆိုအများကြီးလည်း cosmetic ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးမလိုဘူး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒီမှာကျွန်တောတို့ moisturizer ကနေစပြီးတော့လိမ်းလာတာဆိုတော့အခုဆိုနှုတ်ခမ်းနီလေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းကျွန်တောတို့သုံးမျိုးလောက်ခြယ်တာဆိုတော့လေ. ဟုတ်. ဟုတ်. Step တွေလည်းအများကြီးမှတ်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော. ဟုတ်တယ်.အများကြီးမှတ်စရာမလိုဘူး.ပြီးတော့ဒါက အာအဓိကကတော့ခရီးသွားရင်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ပိုးထင်တယ်.ဒီလိမ္မောရောင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော. ဘယ်လိုအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီနည်းလမ်းလေးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရောင်လေးတွေလည်းခြယ်လို့ရတယ်. ဒါပေမဲ့လိမ္မောရောင်ကျတော့လည်းခုနကပြောခဲ့သလို ကြားမှာတွေ party သွားတာတို့သိတယ်မလား. Festival သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေကျတော့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်.ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်တောအခုနောက်ပိုင်းက တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီလို color လေးတွေနော.အဲဒီလိုမျိုး. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်. ခြယ်ထားကြတယ်. Color အရမ်းသုံးကြတယ်အခုခေတ်ကလေ. .ပြီးရင်နှာခေါင်းလေးဖောမယ်.နှာခေါင်းကတော့ we are browser လေးအသုံးပြုပြီးတော့နှာခေါင်းလေးဖောမယ်. မေးရိုးလေးနည်းနည်းချမယ်ပေါ့နော. We နှာခေါင်းကမဖောထားရင်နှာခေါင်းပျောက်နေလို့လေ. ဝေရဲ့ အဝေးရဲ့အသက်ကောင်ပေါ့နော. ရဲ့အသက်ကတော့နှာခေါင်းပါ. ယွန်းရဲ့အသက်ကရော. ယွန်းရဲ့အသက်ကရော. ဝမ်းဆက်လည်းခြောက်နှစ်. နှစ်ထောင်နှစ်နှစ်ကြီးနေလို့ပြီးအောင်လို့ပါ. မကြီးပါဘူးရော့. မကြီးပါဘူးလို့ထင်လို့ပါ. ဒါပေမဲ့ ယွန်းရဲ့အသက်ကကျွန်တောထင်တယ်. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေရော.အယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး.ကိုယ့်ရဲ့အားသွင်းအားနည်းချက်အားသာချက်တော့ရှိမှာပေါ့နော.မိန်းကလေးတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး.ဘယ်နေရာလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ပြင်ဖြစ်ကြလဲ. အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်ပြင်ပြီဆိုအဓိကထားပေးပါ. ဖြေပေးပါဦး. ဖြေပေးပါဦး. ဟုတ်.အဓိကကတော့မျက်လုံးပေါ့နော. မျက်လုံးလား.ညီမလေးက.မျက်လုံးကအယ် eye shadow ထိအောင်ပေါမူတည်ပြီးတော့မျက်နှာရဲ့ အမ်ပိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော. အင်း.ပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတာပေါ့နော.မျက်လုံးပေါမှာပဲတွေ့တယ်. ဟုတ်တယ်.မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လောက်ပဲလှနေလှနေပေါ့နော.ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုမကျကြဘူး.တစ်ခုခုကိုတော့လိုနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်. ပြီးရင်ပါးရိုးလေးချမယ်. ဒီမေးရိုးကားကလေမေးရိုးကဝေးတဲ့ဒီလိုမျိုး v shape လေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော.ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနားကနေစပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေး v shape လေးဖြစ်အောင်လို့မေးရိုးလေးနည်းနည်းချမယ်. မျက်နှာရှိန်လေးပိုပေါတာပေါ့. ဟုတ်.မျက်နှာ shape လေးပိုပေါသွားအောင်လို့. အားလုံးလိုက်မိလားရှင်. .ဒါပြီးရင်တော့ဝင်းပြောသလိုမျိုးဟို party တွေဘာတွေမသွားကြနဲ့နော. မုဒေ on ပြီးတော့ကျွန်တောတို့ မရတော့ဘူး.လျှော့လို့မရတော့ဘူးတဲ့.အကုန်လုံးက. အပြည့်တွေလိုက်ဝတ်ထားပြီးသားဆိုတော့. သွားရင်လည်းခေါဦးလို့ပြောမလို့ပါ.တို့ဘာတို့ .ဒါဆိုရင် အားလုံးလိုက်မိပါတယ်နော.အဆင်ပြေရဲ့လားရှင့်. ပြေပါတယ်ရှင့်. နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ. နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့နှုတ်ခမ်းနီပေါ့နော. နှုတ်ခမ်းနီဆိုးမယ်.နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်မှာ week က foundation လေးနဲ့ဒီ BV လေးနဲ့ပေါ့နော. Baby လေးနဲ့ပဲ အာနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်အောင်ဒီနားလေးတွေကိုပို့လိုက်မယ်.အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ရည်တို့အရောင်လေးကလည်းအရောင်ထွက်အားကောင်းမယ်. ပေါ့နော. ဟုတ်.ကျွန်တောတို့နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းလေးမှာအရင်တင်ပေးရမှာ. ဟုတ်.နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားအရောင်နဲ့ ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ခမ်းနီတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော. အောဟုတ်.အဲ့ဒီတော့ဝေတို့ကအရင်ဆုံး အရင်လုပ်လိုက်မယ်. အရောင်မှန်အောင်ပေါ့. ဟုတ်.အရောင်လေးမှန်သွားအောင်ပေါ့. Confirm လုပ်ပြီးတော့မှအဓိကဇာတ်လိုက်ကြီးကိုဆိုးကြမယ်. လိမ္မောရောင်ပေါ့နော. နန်းလိမ္မောရောင်နှုတ်ခမ်းနီ. ဟုတ်. .နှုတ်ခမ်းနီကလေ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆိုလို့ရတယ်သိလား.တချို့ကကျတော့လည်းသင့်လိုမျိုးလေးဆိုးကြတယ်.တချို့ကကျတော့လည်းအပြည့်ဆိုးကြတယ်. ကိုယ်ကြိုက်သလိုကိုယ်ပေါလို့. ဟုတ်.ကိုယ်ကြိုက်သလိုဆိုတာပေါ့နော. အခုနောက်ပိုင်းတော့သင့်ပုံစံလေးတွေဆိုတာပိုများတယ်နော. ဟုတ်တယ်. ဒီနားလေးကိုဦးနည်းနည်းလေးပြန်ဖြည့်ပေးမယ်.အရမ်းအပြည့်ကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ဝေးပစ်နေကြအဲဒီလို look လေးတွေကျွန်တောတို့အမြဲတမ်း တွေ့ဖြစ်တယ်.ဒီလိုမျိုးနောက်မီးကအဲဒီလိုမျိုး orange fancy အဲ first orange makeup look လေးတွေတောတောလေးကြိုက်စရာလား.အဲဒီလိုမျိုးနော. ဟုတ်. ဆံပင်ကာလာလေးတွေဆိုးထားတာတွေကိုပိုပြီးတော့ဒီဒီ look နဲ့ပိုလိုက်သလိုပဲနော. ဟုတ်တယ်. ဆံပင်ကာလာလေးတွေဆိုးထားရင်တော့ပိုပြီးကြွတာပေါ့နော.အရမ်းကို party mood လေးဖြစ်နေပြီ.အရမ်းမရတော့ဘူး. သူတို့တွေ ယွန်းအဆိုးဆုံးလို့ပါ. အခုအမှန်ခုနကလိုပါးနီလေးဒီလိုမျိုးလေးခြယ်ထားတာလေးကပိုတောင်မှမိုက်သေးတယ်နော.အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ချင်တယ်. နော. တစ်ခြစ်ပဲသိလား. အချစ်ပဲ. ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေတော့အဆင်ပြေလားရှင်. ပြေတယ်နော.ဟာမြန်တယ်ဟ.အားလုံးက. ကဲဦးရေ.အယ်ကျွန်တောတို့ အခု အခုဒီနေ့ပြင်တဲ့မိတ်ကပ် look လေးကလေ. ကျွန်တောတို့ဒါလူငယ်ဆန်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့လိုက်တယ်. Weight ဆိုလည်းအရမ်းနော. We week ကိုတွေ့နေကျဒါကတော့ ဟုတ်တယ်.ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလိမ္မောရောင်ကိုအသားပေးပြီးခြယ်တဲ့ဟာမျိုးသူတို့ အာဒါ first time ထင်တယ်ကျွန်တောထားတာနော. ဟုတ်. အယ်သိပ်ပြီးတော့မတွေ့ ဟုတ်. ဟိုဝင်းအနေနဲ့ကြည့်ရတာလည်းလေ.သူတို့ကအင်္ကျီလေးတွေကလည်းလိမ္မောရောင်လေးတွေနဲ့အပြည့်ပဲဝတ်ထားတယ်.မိတ်ကပ်လေးကလည်းအရမ်းကိုလိုက်ဖက်နေတယ်ဆိုတော့ လိမ္မောသီးလေးတွေတန်းစီထားသလိုပဲခံစားရတယ်. ဟုတ်တယ်.ကျွန်တောတို့ဒါ ဟိုညနေနီညိုရယ်လို့ရှိရင်နီညိုစူးစပ်အလှလေးပေါ့. ထင်စားလိုက်တာ. အိုကေ.အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့သူတို့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေမေးကြည့်ရအောင်နော.ဟုတ်.ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနလို ဝိပြောသလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ book လေးတွေဖြစ်နေမလဲ. ဟုတ်.ဟုတ်.နောက် you ကစပြောပေးပါဦး. အာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ကျတာအမြဲတမ်းပြင်တော့မှာ.ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်တော့မှာအရမ်းကြိုက်သွားပြီ. ဒီဒီမိတ်ကပ် look ပဲ လိမ္မောရောင်ပဲ. လိမ္မောရောင်ဝတ်ဖို့တောပါတယ်.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာ အဲဒီတော့ယွန်းရောဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒါလိုက်ပြင်တာပေါ့နော.ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးကြည့်နေတာဆိုတော့ အာဒီနေ့ပြင်ရတဲ့ခံစားချက်ကကောဘယ်လိုရှိလဲ. ဘယ်လိုပြောမှာတုန်း.ရင်တွေခုန်တယ်.စောနကဆိုဒီလိုကြီးကိုင်တာတုန်နေတယ်. သီချင်းဆိုတာထက်လည်းမကျောဘူးပေါ့နော.ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တောတို့မိတ်ကပ်ပြင်ပြီးတော့ရင်ခုန်ရတာ. ဟုတ်ကဲ့ပါ.ကျွန်တောတို့ကျေးဇူးပါ.ကျွန်တောတို့နောက်ထပ်ညီမလေးစိမ်းလဲ့လေးကိုဝင်ကြည့်မယ်နော. ဟုတ်. ဒီ look လေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်.မဝင်းနဲ့တူတူပြင်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်. BCC မှာပါဝင်ပေး ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်. ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး.အဲဒီတော့ဒီနေ့ပြင်ပြီးသွားတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ. အင်း.အရမ်းလှနေတယ်. အရမ်းလှနေတယ်.ဟုတ်တယ်.အရမ်းလှပါတယ်ညီမလေး.ဆံပင်လေးနဲ့လည်းလိုက်တာလေ. ဟုတ်တယ်.ပြီးတော့ဒီနေ့ပြင်ဆင်တာအကုန်လုံးကအဆင်ပြေကြတယ်. ဟုတ်.အကုန်လုံးနဲ့လိုက်တယ်.အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်ညီမလေးအေးချမ်းပိုင်ကိုလည်းမေးကြည့်ချင်ပါတယ်. ဟာဒီအရောင်ကလေပြင်နေကျမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်မျိုးဆန်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်. ဟိုမိတ်ကပ်တွေဖျက်ပြီးတော့အိပ်လိုက်ရမှာတောင်နှမြောတယ်.ဘယ်သွားရမလဲ. အင်းအင်း. ပျောစရာကြီးနော.အဲ့ဒီလိုမျိုးကြားတာအားရတယ်. ဒီနေ့မျက်နှာမသစ်တော့ဘူးတဲ့. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့ပြီးရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ထားတာနော.ဆရာကြီး. ဟုတ်တယ်.အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကနည်းလမ်းလေးတွေသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တောတို့နောက်နေ့တွေပြင်လို့ရပြီ.နှစ်ထောင့်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာကျွန်တောတို့ခေါကြမယ်.အဲ့ဒီတော့ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအကုန်အဆင်ပြေတယ်နော.ဝေးလည်း ဒီဟာခြောက်ယောက်လုံးကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ. အာဝေခုနကပြောသလိုပေါ့. ခုနကပြော ဟုတ်.ပြီးတော့အကုန်လုံးကအရမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့လေ live တင်တာလေ.ဝီက တကယ်လည်းအံ့သြတယ်.ဟိုတစ်ခုခုဆိုတာနဲ့တစ်ခုခုတန်းလုပ်ပေးပြီးသားပဲ.ဝိတိုတောင်နည်းနည်းပြန်စောင့်နေရသလိုပဲ.အရမ်းတောတယ်.အရမ်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော.ဝင် ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.ယွန်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့အားတက်သရောနော.အားလုံးပါဝင်ပေးကြတာ.အားလုံးအရမ်းလှကြပါတယ်.ကျေးဇူးပါ. ဟုတ်ပြီး.ကျွန်တောတို့ဒီကနေ့ကတော့ညီမငယ်လေးတွေနဲ့ပြင်တာကတော့အရမ်းအဆင်ပြေတယ်နော.ကျွန်တောတို့ကြည့်ပြီးတော့လည်း အကုန်လုံးချစ်စရာလေးတွေခုနကဝူးပြောသလိုပဲ.လိမ္မောသီးလေးတွေလို အခုတီဗီကနေပြီးတော့ကျွန်တောတို့အစီအစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြင်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါနော.ဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကိုရောကျွန်တောတို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ သိချင်တာလေးတွေရှိလား. ဟုတ်.ရှိတာပေါ့.အခု week ဒီ program ပြီးသွားပြီ.ဒီအစီအစဉ်လေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော.ဝတ်ရည်တို့ရဲ့ syndrome network မြန်မာ group ရှိတယ်. Facebook မှာ.အဲ့ဒီမှာ post ရှိပါမယ်.အဲ့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော. Live တင်ပြီးသားလေးတွေကို comment လေး photo comment လေးတွေပေးပေးပါ.ဝီကလည်းအဲ့ဒီမှာ feedback လေးတွေပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့.အဲ့ဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တောတို့ comment လေးတွေပေးပါဦးနော. အဲဒီတော့ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဝေထပ်မံပြီးတော့အာဒီနေ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ထပ်မံပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဟုတ်.အဝေးကလည်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်. ဟုတ်ကဲ့.ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဝိနည်းနဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ special guest ရိုးရာကျေးဇူးပါ. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့.ကျန်တဲ့ညီမလေးတွေလည်းအားလုံးကျေးဇူးပါနော.ကျွန်တောဒီကနေ့မှာအားလုံးအတူတူပါဝင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ကျွန်တောတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တောတို့ အာတစ်ဆယ့်သုံးပတ်မြောက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ.ကျွန်တောတို့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်.အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တောတို့ အနေနဲ့ပါဝင်မယ့်သူကတော့ကျွန်တောတို့ရဲ့ blogger လမ်းမ ဖြစ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ.အဲဒီတော့ Juventus ကနောက်ဆုံးရေမှာဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ တွေနဲ့တင်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုဆက်စပ်စောင့်မျှောကြည့်ရှုဖို့လည်းပြောကြားရင်းနဲ့ ကျွန်တောတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်.အားလုံးပဲသာယာပျောရွှင်တဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေ. တာ့တာပါခင်ဗျာ.အားလုံးတာ့တာပါ. ကိုယ်ကာရီအတွက် iron page မှာ main sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်.
Cinderella Network Myanmar (Episode - 14)
MNTV Channel 18K views ·
Happy Japan EP7Teaser
MNTV Channel 5.8K views ·
MNTV Channel 5.6K views ·
MNTV Channel 283K views ·
MNTV Channel 8.2K views ·
WeWee နဲ့အတူ ကိုယ်ပိုင်အလှကို ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ဖို့ Ready ပဲလား 🤩🤩
MNTV Channel 4.6K views ·
MNTV Channel 488K views ·
MNTV Channel 708K views ·
Cinderella Network Myanmar Online Event (Episode 12)
MNTV Channel 22K views ·